ဖှဖှလေး – My Blog
ညနေ လေးနာရီခှဲပွီးနပွေီ။ … ကိုလတျတယောကျ အိမျပွနျရနျ ဆေးရုံလှကေားမကွီးမှ ဆငျးတော့မလို့ဟနျပွငျနစေဉျ နောကျဖကျမှ အသံလေးတခုက ရုတျတရကျပျေါလာ၏။ ‘ ဆရာ ပွနျတော့မလို့လား … ဟငျးဟငျးဟငျး .. ‘ ပွနျတော့မလားမေးတာ ဘာမြား ရီစရာ ပါနသေညျမသိ။ … ကိုလတျစိတျထဲ နဲနဲ အစာမကွဖွေဈသှားမိသညျ။ .. လှညျ့ကွညျ့စရာမလိုပဲ သိနသေညျ။ အသံရှငျလေး မညျသူဆိုတာ။ … ဘယျသူရှိရမညျလဲ … သူနာပွုအသဈလေး ဂြာဂြာ ပေါ့။ … သူမက မွနျမာမဟုတျ .. ။ တိုငျးရငျးသူလေး .. ။ နာမညျအပွညျ့အစုံက အယျလျကှနျဖနျဂြာ တဲ့ ….. ။ သို့ပမေယျ့ တဆေးရုံလုံးက သူမကို ဂြာဂြာ လို့ပဲ ချေါကွသညျ။ … တှေးကွညျ့လြှငျ အဓိပ်ပါယျက ဘာလိုလိုကွီး … ။ ကိုလတျစိတျထဲတော့ လှနျခဲ့သညျ့ သုံးလလောကျက သူတို့ဆေးရုံကို ဒီဆရာမလေး ရောကျလာပွီး သူတို့ဝါ့ဒျထဲရောကျလာခဲ့ခြိနျကစပွီး သူမနာမညျကို ဂြာဂြာ လို့ ချေါလိုကျရတိုငျး စိတျထဲမှာ သူမကို ဘာဂြာပေးခငျြစိတျတှသော တဖှားဖှားပျေါပျေါလာနတေော့ ခကျလှသညျ။
နာမညျအပွညျ့အစုံချေါဘို့ကလဲ ချေါရခကျလှတော့ ဒီအတိုငျးပဲ သူမြားတှခေျေါသလို အတိုပဲ ချေါနရေတော့သညျ။ ထားပါတော့ ဂြာဂြာ ပဲ … ။ အနှီ ဂြာဂြာသညျ လှတာတော့ တျောတော့ကိုလှသညျ။ .. ဆှဲဆောငျမှုကလညျး ကောငျးသညျ။ .. မကျြနှာလေးကွညျ့မလား … ဖွူနုနသေညျ။ .. မကျြခုံးလေးတှကေ တနျးတနျးလေး .. ။ နှာတံလေးက ပျေါပျေါ .. ။ တခွားတိုငျးရငျးသူတှနှေငျ့မတူပဲ မကျြဆံလေးကလဲ နကျနကျလေး … ။ ပါးပွငျလေးတှကေ ခရမျးခဉျြသီးလေးတှလေို ရဲရဲလေးတှေ … ။ နှုတျခမျးလေးတှကေ ဖူးရှနသေညျ။ .. အောကျနှုတျခမျးလေးက တှဲတှဲလေး … ။ မေးစနှေ့ဈခှလေးအပျေါနားမှ မှဲ့လေးကတော့ သူမမကျြနှာကို ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံး ဖွဈလာအောငျ လုပျပေးထားသညျ့အရာလေးပဲဖွဈမညျ။ … ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျကွညျ့ဦးမလား … ဘာမှ အပွဈပွောစရာမရှိ။ … ငါးပသေုံးလကျမဆိုသော အရပျလေးက နဲနဲတော့ ပုသညျပွောလို့ရပမေယျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ မိနျးကလေးတှအေတှကျ ကွညျ့ကောငျးသော အရပျထဲမှာ ပါနသေညျ။ … ခါးလေးက သေးသေးလေး။
ကိုလတျဖတျဖူးသညျ့ဆောငျးပါးမြားအရ ငါးပသေုံးလကျမရှိသော မိနျးကလေးတယောကျအတှကျ စံခြိနျမှီ ခါးအတိုငျးက ၂၁ လကျမခှဲ ရှိရမညျဟု ဖတျဖူးသညျ။ .. မယျရှေးပှဲတှအေကွောငျး လိုကျလလေ့ာတုနျးက ဖတျဖူးထားတာပါ … ။ ခု ဂြာဂြာ့ခါးက ၂၁ တောငျနဲနဲ လြော့ဦးမလားမသိ။ .. ခါး ၂၁ ဆိုလြှငျ ရငျက ၃၁၊ တငျက ၃၃ အနညျးဆုံးရှိရမညျတဲ့ … ဒါလောကျရှိမှ စံမှီမညျ။ … ဒီ့ထကျကှာခွားခကျြပိုလလေေ ပိုကွညျ့ကောငျးလလေပေေါ့ … ။ သို့ပမေယျ့ တခိြု့ ကှာခွားခကျြအရမျးကွီး မြားသှားလှနျးလြှငျလညျး မဆံ့မပွဲကွီးလိုဖွဈပွီး မကျြစိထဲ အမွငျရိုငျးသှားတတျပွနျသညျ။ … ကိုလတျ ပကွေိုးနှငျ့တော့ သှားမတိုငျးကွညျ့ဖူးပါ … ဒါပမေယျ့ မကျြမှနျးအတိုငျးအရတော့ ဂြာဂြာ့ ရငျက ၃၂လောကျ .. တငျက ၃၃ခှဲ လောကျရှိလိမျ့မညျမှနျး သိနသေညျ။ .. မကျြစိထဲ မွငျယောငျသာ ကွညျ့ကွပါတော့။ .. ထိုခါးကို လတေိုးရငျ ကြိုးမှာ အလှနျစိုးတယျဆိုသညျ့ ဆရာမွို့မငွိမျးသီခငျြးက ဂြာဂြာ့ကိုမြား ကွညျ့ပွီး စပျထားသလား ထငျရသညျ။
မဆံ့မပွဲကွီးမြိုးလညျး ဖွဈမနေ .. သူ့ဟာနှငျ့သူ ကြော့ကြော့မော့မော့လေးနှငျ့ ကွညျ့လို့ကောငျးလှသညျ။ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျ လှသလို ဂြာဂြာက ဝတျလိုကျစားလိုကျလြှငျလညျး ကိုယျလုံးအလှပျေါအောငျ အထူး သတိထားပွီး ဝတျစားပုံရသညျ။ .. သူနာပွုဆိုတော့ အလုပျခြိနျဆို ယူနီဖောငျးပဲ ဝတျရသညျပေါ့။ … ဒါပမေယျ့ မဂြာဂြာတို့က သူမြားတှလေို ယူနီဖောငျးကို ဖွဈသလိုမဝတျ … ။ ရငျဖုံးအင်ျကြီလေးဆိုလဲ ဖွူဖှေးဥနသေညျ။ … အသားက ခပျပြော့ပြော့ကိုယျကပျ အသားမြိုးမှ ရှေးဝတျသညျ။ အင်ျကြီကိုဘယျတော့မှ ပှပှ မဝတျ .. ။ တဈရဈ တငျးကပျနအေောငျ ခပျကပျြကပျြအမွဲဝတျသညျ။ တခါတခါ .. ဝါ့ဒျထဲကို မထေရှနျကွီး ရောငျးလှညျ့လာလို့ ဆုံမိလြှငျ ဂြာဂြာ့ကို အနားနားကပျပွီး တိုးတိုးဆူတတျတာ .. လကျမောငျးကို လိမျဆှဲပွီး သတိပေးတတျတာ ကိုလတျ သတိထားမိသညျ။ ယူနီဖောငျးနှငျ့ဆိုတော့ အောကျကတော့ ရိုးရိုးဘျောလီပဲဝတျရသညျမို့ ဘရာစီယာတှေ ပုံဆနျးဘျောလီတှေ တော့ ဝတျခှငျ့မရှိဘူးပေါ့ …။ သို့ပမေယျ့ ဂြာဂြာ့ကိုယျလုံးလေးက ဒါတှေ ကူနစေရာကို မလိုအောငျကို ပွီးပွညျ့စုံနပွေီးသားဖွဈသညျ။
ကိုလတျ တခါတခါမြားမွငျယောငျကွညျ့မိသညျ .. ။ ဒီလို ကိုယျလုံးမြိုးလေးနှငျ့ ဒီလို အသားပြော့အင်ျကြီအဖွူကပျြကပျြလေး အောကျမှာမြားပုံဆနျး ဘရာစီယာလေးနှငျ့သာဆို ဘယျလိုနမေညျမသိ .. လို့ ။ တှေးကွညျ့ယုံနှငျ့ပဲ ဖှားဘကျတျောကခေါငျးထောငျထောငျ ထလာတတျလို့ အိမျသာထဲ ပွေးခဲ့ရသညျ့အကွိမျတှလေဲ မနညျးတော့။ … ထမီလေးကွညျ့ဦးမလား … ။ သူမြားတှလေို တှကေ့ရာ အသားနှငျ့ အနီရောငျဖွဈ ပွီးရော ဘယျတော့မှ မဝတျ။ .. ဘီဘဲလျလို အိတုံလို ကိုယျပျေါမှာ ပြော့အိပွီးကပျနမေညျ့ အသားမြိုးမှ အနီရောငျရှာပွီး ဝတျတတျသညျ။ ဒေါကျတှဘောတှေ လိုအပျသလို သသေခြောခြာလဲ တတျပုံရသညျ။ ဂြာဂြာ့တငျသားအိအိကွီးတှပေျေါတှငျ ထမီပြော့ပြော့လေးက အမွဲလို တသားတညျးကပျနတေတျသညျ။ .. အောကျမှ ပငျတီ အရဈလေးက အထငျးသား …. ။ လမျးလြှောကျလိုကျလို့ လှိုငျးတှထေ သှားတိုငျး မွငျရသူ အသကျရှုမှားလောကျသညျ ဆိုတာမြိုး ဖွဈနတေော့၏။
အရပျကလေးက နညျးနညျးပုသူမို့ တခါတလေ ဝါ့ဒျထဲမှာ ဒရဈပုလငျးတှဘောတှေ ခြိတျရဖွုတျရတိုငျး ဒီအတိုငျးမမှီလတေော့ ခွဖြေားလေးတှထေောကျပွီးမြား လှမျးလိုကျရခြိနျတှဆေို ကိုလတျသာ အနားမှာရှိနလြှေငျ အလုပျထဲက စညျးမဉျြးတှေ ဂုဏျတှမေထေ့ားလိုကျပွီး နောကျကနေ သှားပွီးတော့သာ ကိုငျညှဈပွဈလိုကျခငျြမိလောကျအောငျ ဖွဈရတတျသညျ။ ဒီကောငျမလေး ဝါ့ဒျထဲရောကျလာတော့ ကိုလတျ ဖနျမလားစိတျကူးသေးသညျ။အမှနျက မိဂြာဂြာကလညျး ဝါ့ဒျထဲရောကျလာကတညျးက လူပိုလြူလှတျ ဇ နှငျ့ နာမညျတလုံးနှငျ့ကိုလတျကို သတိထားမိပုံရပါသညျ။ .. နဂိုကလဲ ခပျသှကျသှကျဖွဈရသညျ့အထဲ ကိုလတျရှဆေို့လြှငျ ပိုပွီး အသံလေးက စာ သှားတာ … ဆေးရုံစင်ျကွနျတှမှောမြား ကိုလတျရှကေ့ သှားမိတာနှငျ့ကွုံလြှငျ တငျသားကွီးတှေ ပိုလှုပျခါပွီး လြှောကျပွတတျတာ .. တခါတခါ ကိုလတျ စားပှဲမှာ အလုပျထိုငျလုပျနတေုနျးမြား ကိုလတျဆီ လာဘို့ ကွုံလာလြှငျ စားပှဲပျေါလကျထောကျပွီး ရငျကိုကော့ တငျကိုနောကျပဈပွတတျတာ .. ကိုလတျလဲ ကောငျးကောငျးသတိထားမိသညျပဲ … ။
အလုပျထဲဆိုတော့လဲ ရုတျတရကျ သှားမစရဲ။ .. စလိုကျလို့ ဖွဈသှားပွီးလြှငျ အပွငျကဟာလေးတှလေို အရှောငျအတိမျးလုပျလို့ လှယျမညျမဟုတျ။ .. ယူရဘို့ မြားသှား လိမျ့မညျ။ … ဒီအခြိနျမှာပဲ မီမီနှငျ့ကလဲ မနားတမျးကို ဆှဲလာဖွဈကွတော့ ကိုလတျစိတျထဲ ဂြာဂြာ့ကို ခနခေါကျထားလိုကျမိတော့သညျပေါ့။ …မိဂြာဂြာလို ကောငျမလေးမြိုးက ကိုလတျခေါကျထားတော့ကော ဒီအတိုငျးနနေမေညျတဲ့လား … ။ သူမ ဟနျရေးပွသမြှ အရာမထငျတော့ စိတျက ပေါကျလာသညျ။ .. ဒီ လူပိုဆြရာဝနျ မကျြစိမြား ကနျးနသေလားပငျမသိဟု တှေးမိတာ အကွိမျကွိမျ … ။ အခွောကျတော့ မဟုတျနိုငျ … သူ့သတငျးတှကေ မှေးလှသညျပဲ။ .. တဆေးရုံလုံး မကွားခငျြမှ အဆုံးရယျ … ။ သူမကိုတော့ အရေးမလုပျပမေယျ့ သူဆေးခနျးဖှငျ့ ထားသညျ့လမျးထဲမှ ကုလားဆငျ မုဆိုးမလေးနှငျ့ကတြော့ ဘယျလိုဘယျပုံဆိုတာ ကွားလိုကျရသညျ့နကေ့ ဂြာဂြာ မခံခငျြစိတျနှငျ့ အိပျလို့ပငျမပြျော … ။ ဒီလောကျတောငျဖွဈလှတာ တှကွေ့သေးတာပေါ့ ဟု ဂြာဂြာ တေးမှတျထားလိုကျသညျ။
ဖွဈခငျြတော့ နောကျရကျမြားမကွာခငျ နောကျဆုံးနှဈဆေးကြောငျးသား ကိုလှငျက ဂြာဂြာ့ကို ပရိုပို့ဈ လုပျလာတော့ ဂြာဂြာ ဘာမှ စဉျးစားမနတေော့ပဲ ခကျြခွငျးကို အဖွပေေးပဈလိုကျ၏ ကိုလတျရှမှေ့ာ ကိုလှငျနှငျ့တှဲသှား တှဲလာ လုပျပွရတာ အရသာရှိလှသညျမှတျသညျ … ။ ကိုလတျကတော့ လှတျတဲ့ငါး ကွီးသညျ ဆိုတာလို နှမြောတသ ဖွဈနရေခဲ့ရ၏။ သူ့ရှမှေ့ာ ဂြာဂြာက ဟိုကောငျလေးနှငျ့တှဲပွလေ သူ့စိတျတှကေ မခံခငျြစိတျနှငျ့အတူ နိုးထလာလဖွေဈေနရေတော့သညျ။သို့ပမေယျ့ သူမ ကိုယျတိုငျလဲ မှနျးခကျြနှငျ့နှမျးထှကျက မကိုကျဖွဈနတော သူမဖာသာပဲ သိသညျ။ .. ကိုလတျကို အရှဲ့ တိုကျခငျြစိတျနှငျ့ အဖွပေေးကာ တှဲပဈလိုကျသော ဆေးကြောငျးသားကိုလှငျက ခပျကွောငျကွောငျရယျ .. ။ နှဈယောကျသား ခြိနျးတှခြေိ့နျ ကဗြာတှေ လာရှတျပွလိုပွ လုပျနတေတျသညျ့လူမြိုး … ။ လူကိုပဲ မထိရကျ သလိုလို မကိုငျရကျသလိုလိုနှငျ့ … ပနျးကလေးနှမျးသှားမှာစိုးသညျတှဘောတှနှေငျ့ ဒိုငျကွောငျနတေတျသူ ဖွဈနတော တှဲပွီးမှ သိရတော့သညျ။
တှဲပွီးမှတော့ မိဂြာဂြာတို့ ဘာတတျနိုငျမှာတဲ့လဲလေ …။ တခါတလေ သူတို့သူငယျခငျြးတှရှေိရာ အဆောငျကို သှားလညျသညျ့အခါမြိုး (ဂြာဂြာကိုယျတိုငျကတော့ မွို့ထဲမှာ မိဘတှနှေငျ့ အတူနသေူဖွဈသညျ၊ .. အဆောငျမှာ မနေ) မြား .. ဟဲ့ကောငျမ ညဉျးဘယျအဆငျ့ ရောကျနပွေီလဲ ဘာလဲ နှငျ့ အမေးခံရလြှငျ ဂြာဂြာ မခြိပွုံးလေးသာ ပွုံးနလေိုကျရသညျခညျြး။ .. ပါးလေး နမျးယုံထကျ မပိုသေးဘူးဟု အမှနျအတိုငျးဖွလေဲ ယုံကွမှာမှ မဟုတျတာလေ။ဒီနညေ့နတေော့ ကိုလှငျ့ကို ကြှတျအောငျခြှတျမညျရယျလို့ ဂူတြီဆငျးလြှငျ ရုပျရှငျသှားကွညျ့ကွဘို့ ခြိနျးထားခွငျးဖွဈသညျ။ .. သူမလဲ ဆေးရုံအပွီး ကိုလှငျလဲ ကြောငျးအပွီး ညနေ ၅နာရီပှဲပေါ့။ … လှကေားမှ ဆငျးတော့မညျ့ဆဲဆဲ သူမရှမှေ့ာ ကိုလတျကို ခပျငေါငျငေါငျကွီး တှလေို့ကျရသညျမို့ မထိတထိ ကလိသလို ရီသံလေးနှငျ့ လှမျး နှုတျဆကျလိုကျမိခွငျးပါ … ။
ကိုလတျ မကျြမှောငျကွုံ့ရငျး လှညျ့ကွညျ့လိုကျမိ၏။ ဂြာဂြာ၏ ခဈြစဖှယျ အပွုံးလေးကို မွငျရတော့ ကိုလတျမကျြခုံးတှေ အလိုလို အတှနျ့ပွသှေားသညျ။ ဂြာဂြာက ယူနီဖောငျး မလဲရသေး .. ။ သို့ပမေယျ့ ခေါငျးဆောငျး ကကျပျ လေးကိုတော့ ဖွုတျထားပွီးပွီ။ ကကျပျ မပါပဲ နောကျတှဲဆံထုံးလေးနှငျ့ မွငျရတာ ဂြာဂြာက တမြိုးကွညျ့ကောငျးနေ၏။ အစကတော့ ကိုလတျစိတျထဲ ဂြာဂြာ့ရီသံက သူ့ကိုလှောငျနသေလိုလို ခံစားရသဖွငျ့ စိတျခုသလိုလိုဖွဈသှားရခွငျးဖွဈသညျ။ .. ဒါပမေယျ့ တကယျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ဂြာဂြာ့မကျြနှာလေးက အပွဈကငျးစငျစှာဖွငျ့ ဝငျးပနသေညျ။ .. ကိုယျ့ဖာသာ အလိုလို လိပျပွာမလုံဖွဈနမေိတာပဲ ထငျပါရဲ့လေ … ။ ‘ ပွနျတော့မယျလေ … ဂြာဂြာရဲ့။ … လေးနာရီပဲခှဲပွီးနမှေဟာ .. ။ ဂြာဂြာရော မပွနျသေးဘူးလား … ‘ ဂြာဂြာက သူမလကျကိုငျပဝါလေးကို လကျထဲတှငျ ဆုပျလိုကျခလြေိုကျ လှညျ့ပါတျကစားလိုကျလုပျနသေညျ ဒါလဲ မိနျးကလေးတို့ တတျအပျသော မာယာတှထေဲမှာ တမြိုးပါလသေလားတော့ မသိ။
‘ အဟငျး … ဒီနေ့ ကိုလှငျနဲ့ ရုပျရှငျသှားကွညျ့ဘို့ ခြိနျးထားလို့ ဆရာ … ‘ ‘ သွျော …. ဒီလိုလား … ။ အိမျပွနျနောကျကနြတေော့မှာပေါ့ … ‘ ‘ အဟဲ … အိမျကို ဒီနေ့ ညဂူတြီကတြယျလို့ လှိမျ့ထားတယျဆရာ။ .. ရုပျရှငျပွီးမှ အဆောငျက သူငယျခငျြးတှေ အခနျး ပွနျအိပျမှာ … ‘ ‘ အမယျ … ညီးတောငျ တျောတျော ပညာစုံနပေါ့လား … ‘ လကျယဉျနသေော ကိုလတျက ဂြာဂြာ့ခေါငျးလေးကို ခပျဖွညျးဖွညျး လှမျးထုသညျ။ ဂြာဂြာ ခေါငျးလေး ပုသှားကာ လြှာလေးတဈလဈဖွဈသှား၏။ ‘ ကဲကဲ … ဘယျရုံမှာလဲ .. ညီးအဆကျနဲ့ ခြိနျးထားတာ … ။ ခုပဲ ငါးနာရီမတျတငျးရှိတော့မယျ … ‘ ‘ ပပဝငျးမှာပါ ဆရာ၊ ဒီနေ့ သူက ဆေးရုံကွီးမှာ အတနျးရှိလို့ ရုံမှာပဲ ဆုံဘို့ခြိနျးထားကွတာ … အယျ .. ဟုတျပါရဲ့ နဲနဲတောငျ နောကျကနြပွေီ .. ‘ ဂြာဂြာက လကျပါတျနာရီလေးကို မွှောကျကွညျ့ရငျး မဲ့တဲ့တဲ့လေး ဖွဈသှားသညျ။ … အနောကျပိုငျးဆေးရုံကနေ မွို့လယျ ပပဝငျး ရုပျရှငျရုံကို ဆယျ့ငါးမိနဈထဲနှငျ့ ရောကျဖို့ဆိုတာ သိပျမလှယျလှပေ။ … ‘ ဆရာလိုကျပို့ပေးမယျလေ … ဆရာ့ကားကို ဂြာဂြာ စီးရဲရငျပေါ့ …
‘ ‘ အောငျမယျလေး … ကိုယျ့ဆရာကားမြား ဘာမစီးရဲစရာရှိလဲ … လိုကျပို့ပေးမယျဆို ကြေးဇူးပါဆရာ … ခနနျော … ဂြာဂြာ အဝတျအမွနျသှားလဲလိုကျဦးမယျ … ယူနီဖောငျးကွီးနဲ့ ရုပျရှငျနဲ့ မဖွဈသေးပါဘူး ‘ ‘ အိုကေ … ဆရာ ကားပါကငျကပဲ စောငျ့နတေော့မယျ … ‘ ‘ ဟုတျ … ‘ ဂြာဂြာ ဆရာမမြား နားနခေနျးဘကျ ခပျသှကျသှကျ ထှကျသှားတုနျး ကိုလတျလဲ အောကျဆငျးလာနှငျ့ခဲ့ လိုကျတော့၏။ … ဘာရယျမဟုတျ … ပါးစပျမှ ‘ မငျးရညျးစားတောငျသိရဲ့လား ‘ … သီခငျြးလေးကို လခြှေနျလာမိလြှကျသားဖွဈနသေဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပွုံးမိရသေးသညျ။ .. ငါးမိနဈလောကျနတေော့ ဂြာဂြာ ကားနားရောကျလာ၏။ ‘ ဆောရီးနျော ဆရာ … ပို့ပေးမယျ့သူက တကူးတက စောငျ့နရေတယျ၊ .. အားနာလိုကျတာ … ‘ ဖကျဖူးရောငျ ဝမျးဆကျလေးနှငျ့ အလှကွီးလှနသေော ဂြာဂြာက ကားပျေါစှကေ့နဲ ဝငျထိုငျရငျး တောငျးပနျ နပွေနျသညျ။ … ဂြာဂြာ့ကိုယျသငျးနံ့လေးက ရမှေေးနံ့လေးတှေ မိတျကပျနံ့လေးတှနှေငျ့ ရောကာ ကားထဲမှာ သငျးကနဲဖွဈသှား၏။ .. ကိုလတျ တံတှေးကို အသာ လူမသိသူမသိ မွိုခလြိုကျမိသညျ။ လှတျတဲ့ငါး .. ကွီးသညျဆိုတာ ဒါမြိုးလား မသိ။
ကားမောငျးကြှမျးသလောကျ ကွမျးသူမို့ ပပဝငျးရုံကို ငါးမိနဈလောကျနှငျ့ ရောကျသှားသညျ။ လမျးတလြှောကျ သူခပျကွမျးကွမျးမောငျးတာကို မကျြလုံးလေးအဝိုငျးသားနှငျ့ကွညျ့ရငျး ဘုရားသခငျ … ဟု မကွာမကွာ ခပျတိုးတိုးရရှေတျနသေော ဂြာဂြာ့ပုံလေးက မကျြစိထဲကကို မထှကျ။ ‘ ကဲ .. ရောကျပွီ။ .. အခြိနျမှီပါတယျ ဟုတျ … ‘ ‘ အဟငျး .. အခြိနျမှီတာတော့ ဟုတျပါတယျ၊ လမျးမှာ ဂြာဂြာ ဘယျနှဈခါတောငျ ဘုရားသခငျကို တ မိတယျမသိဘူး။ … ‘ ဂြာဂြာက ခဈြစဖှယျလေးပွုံးပွရငျး ကားပျေါမှ ဆငျးလိုကျသညျ။ ရုပျရှငျရုံအောကျကို တခကျြဝကွေ့ညျ့တော့ သူမဘဲ ကိုလှငျကို အရိပျအယောငျတောငျ မတှေ့။ … ‘ ဟို … ဆရာ အပနျးမကွီးရငျ တခုကူညီပါဦးလားရှငျ … ‘ ကိုလတျက ကားပွနျထှကျဖို့ စကျတောငျနှိုးနပွေီ။ … စကျကိုပွနျသတျလိုကျရငျး ဘာလဲဆိုသော သဘော နှငျ့ အသာမေးဆတျ ပွလိုကျမိ၏။ ‘ ဟိုလေ … လကျမှတျတှကေ ဂြာဂြာ့ဆီမှာ ရှိပွီးသားပါ .. ကွိုတငျ ယူထားတာ။ .. ဒါပမေယျ့ သူက မရောကျသေးတော့ ဂြာဂြာ တယောကျထဲ ရုံအောကျမှာ စောငျ့နရေမှာ တမြိုးကွီးဖွဈနလေို့ ဆရာမြား ခန အတူစောငျ့ပေးလို့ ရမလားလို့ … အားတော့နာတယျ ဆရာရယျ … ‘ အငျး .. ဒါလဲ ဟုတျသညျပဲ။
ဂြာဂြာ့လို ဟော့ရှော့တျလေးနှငျ့ အရမျးကို မိသညျ့ကောငျမလေးတယောကျက ရုပျရှငျရုံအောကျမှာ ဘယျလာ တယောကျထဲ အူကွောငျကွောငျ ရပျစောငျ့နခေငျြပါ့မလဲ။ .. ခုတောငျ ရုံအောကျက လူတှေ(ယောကျြားတှေ) က ချေါတော တထောငျအားနှငျ့ ဝိုငျးကွညျ့နကွေပွီ။ ‘ ရပါတယျဗြာ … အားလဲနာတယျ ခငျလဲခငျတယျဆိုတာ ဒါမြိုးထငျပါ့ .. ဟုတျလား … ‘ ‘ အဟဲ … ကြေးဇူးပါဆရာ … ‘ ဂြာဂြာက ရှကျပွုံးလေးနှငျ့ ခေါငျးလေးငုံ့သှားသညျ။ ကိုလတျ အိပျမကျမြား မကျနသေလား ထငျမိသညျ။ သူအရငျက မစှမျးရငျးရှိခဲ့ပွီး အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ သူမြားလကျပါသှားသော ဂြာဂြာလေးနှငျ့ အတူတူ ရုပျရှငျရုံအောကျမှာ မုနျ့တှဝေယျ .. အအေးတှသေောကျနှငျ့ … ဖွဈနရေသညျကိုး။ သူ့ရညျးစားနှငျ့အတူကွညျ့ဘို့ စောငျ့နတောမဟုတျပဲ သူနှငျ့အတူသာကွညျ့ကွဘို့ဆို ဘယျလောကျမြား ရငျခုနျစရာ ကောငျးလိုကျလမေညျလဲလေ။ … သကျပွငျးကိုသာ ဂြာဂြာမသိအောငျ မကွာမကွာ ခိုးပွီး ခနြေ မိရတော့သညျ။ အခြိနျတှေ တစစ ကုနျသှားပွီ။ ငါးနာရီ ဆယျ့ငါးမိနဈတောငျ ရှိပွီ … ။
သကောငျ့သား ကိုလှငျကား မပျေါရေးခြ ပျေါကိုမလာ။ … ဂြာဂြာ့မကျြနှာလေးလဲ ဒေါသနှငျ့ ရှကျစိတျတှနှေငျ့ ရဲတှတျနပွေီ။ … မကျြဆံနကျနကျလေးတှနှေငျ့ ခဈြစဖှယျကောငျးလှသော မကျြလုံးလေးတှတှေငျ မကျြရညျလေးတှပေငျ ဝိုငျးနပွေီ။ ‘ ကဲ … ဂြာဂြာရေ .. အခြိနျလဲ တျောတျောနောကျကနြပွေီ … ဘာလုပျကွမလဲ … ‘ ဂြာဂြာ့နှုတျခမျးလေးတှေ တဆတျဆတျ တုနျနသေညျ။ တျောတျောနှငျ့ စကားသံထှကျမလာ .. အေးလေ ရှကျရှာမညျပေါ့။ … တစိမျးယောကျြားတယောကျရှမှေ့ာမှ ခြိနျးထားသော ရညျးစားက ရောကျမလာတော့ ဘယျမိနျးကလေးမဆို အရှကျခှဲခံရသညျလို့ပဲ ယူဆကွမညျပေါ့။ … ‘ သူ ဒီလိုခညျြးပဲ ဆရာ … ဂြာဂြာ့ကို ဒါ သကျသကျအရှကျခှဲတာ … ‘ စကားအဆုံးတှငျ ဂြာဂြာ့အသံလေးက တိမျဝငျသှားပွီး ခပျတိုးတိုး ရှိုကျသံလေးပငျ ထှကျလာသညျ။
မကျြရညျတှေ ကမြလာအောငျ မကျြတောငျကော့ကွီးတှကေို တဖွတျဖွတျခပျကာ ထိနျးလိုကျရ၏။ ‘ ကဲ … ရောကျလာပွီးမှတော့ မထူးပါဘူး ဂြာဂြာရယျ … ဝငျကွညျ့လိုကျကွရအောငျပါ .. ‘ ဂြာဂြာ စိတျရှုပျထှေးသှားဟနျလေး ဖွဈသှားသညျ။ ‘ အငျး … အိမျကိုလဲ ညဂူတြီ ပွောထားပွီးမှတော့ ပွနျလဲမပွနျခငျြတာ အမှနျပဲ ဆရာရယျ … ဒါပမေယျ့ ဆရာ ဆေးခနျးထိုငျဘို့က ရှိသေးတယျ မဟုတျလား … ‘ ‘ အို … ဆေးခနျးက အရေးမကွီးပါဘူးကှာ … ဂြာဂြာ့ကိုကွညျ့ပွီး ဆရာပါ ဝမျးနညျးလာလို့ပါ … ‘ ဟုတျပါသညျ … ဆေးခနျးတရကျစာ ဝငျငှကေ ဂြာဂြာ့လို ကောငျမလေးမြိုးနှငျ့ ရုပျရှငျအတူတှဲကွညျ့ရမညျ့ အခှငျ့အရေးကို ဆုံးရှုံးခံရလောကျအောငျတော့ မတနျရေးခြ မတနျပါ။ … တနညျးအားဖွငျ့တော့ ရညျးစားက ခြိနျးထားတာတောငျ ရောကျမလာခြိနျမှာ မိမိက ဆေးခနျးတောငျဖကျြပွီး သူမကို အဖျောလုပျပေးနိုငျသညျဆိုသညျ့သဘောနှငျ့ အမှတျယူလိုကျခွငျးလဲ ဖွဈပါသညျ။
‘ ဒီနတေ့ော့ ဂြာဂြာ ဆရာ့ကို ဒုက်ခတှေ တခုပွီး တခုပေးနမေိပါပွီရှငျ … ဘယျလိုပွောရမှနျးတောငျ မသိ တော့ပါဘူး … ‘ ‘ ကဲ အမိရေ … ဘယျလိုပွောရမှနျးမသိရငျလဲ ပွောမနနေဲ့တော့ .. ။ ရုပျရှငျတောငျ စနတော တျောတျော ကွာလောကျပွီ။ အထဲ ဝငျကွစို့ … ‘ ဒီလိုနှငျ့ ကိုလတျက ဦးဆောငျကာ ဂြာဂြာနှငျ့ ၂ယောကျသား ရုံထဲ ဝငျလာဖွဈခဲ့တော့သညျ။ သွျော … ဒီတညနလေေးက သူမကို ဘ၀ တဆဈခြိုးပွောငျးစဘေို့ ဖွဈလာလိမျ့မညျဆိုသညျကိုတော့ ဂြာဂြာလေး လုံးဝ မရိပျမိခဲ့ရှာပါပေ။ ….. ရုံထဲရောကျတော့ ရုပျရှငျက စပွီးပွနပွေီမို့ မီးတှမှေိတျနပွေီ။ ခဈြသူစုံတှဲကွညျ့ဘို့ယူထားသညျ့ ကွိုတငျလကျမှတျဆိုတော့ ခုံနရောက ဟိုးနောကျက ဒီစီနောကျဆုံးတနျး ဒေါငျ့လေးမှာ … ။
ကိုလတျက ဂြာဂြာ့လကျလေးကို ဆုပျကိုငျရငျး မှောငျထဲမှာ ခလုတျမတိုကျမိအောငျ သတိထား သှားနရေ၏ အရေးထဲမှ တမငျလုပျထာမဟုတျပဲနှငျ့ကို မှောငျထဲမှာ ဂြာဂြာနှငျ့သူ ကိုယျလုံးခငျြး ၂ခါလောကျ တိုကျမိကွ သေးသညျ။ ဂြာဂြာ့တငျပါး အိအိကွီးတှကေ ကိုလတျပေါငျတှနှေငျ့ အိကနဲထိတော့ ကိုလတျ မှောငျထဲမှာ အံကိုသာ တငျးတငျးကွိတျထားမိလိုကျရသညျပေါ့။ … တျောသေးသညျ ဆေးရုံက တနျးလာရတာမို့ ဒီနေ့ အောကျခံဘောငျးဘီ ဝတျလာမိလို့သာ … ။ ခုံနရောရောကျတော့မှ နှဈယောကျသား ထိုငျခယြငျး အလငျးရောငျ မပီဝိုးတဝါးအောကျမှာ လှမျးပွုံးပွဖွဈ ကွသညျ။ .. ခုံနရောက နောကျဆုံးတနျး၏ ဘယျဘကျဒေါငျ့လေးမှာ။ .. ဂြာဂြာက နံရံဘကျမှာထိုငျသညျ။
ကိုလတျက ဂြာဂြာ့ညာဘကျမှာ ထိုငျ၏။ အနားကပျလြှကျ ညာဘကျ သုံးလေးခုံအထိ မညျသူမြှ မရှိ။ .. ရှကေ့အတနျးမှာလဲ ဟိုးညာဘကျခပျလှမျးလှမျးမှာသာ စုံတှဲ နှဈတှဲ သုံးတှဲ အသီးသီးထိုငျနကွေသညျ။ ကိုလတျ အသကျရှုတှေ မွနျလာရသညျ။ ပတျဝနျးကငျြ အခွအေနကေ လှုံ့ဆျောနသေညျမို့လားမသိ၊ .. ကိုလတျကော ဂြာဂြာပါ စကားတခှနျးမှ မပွောမိကွပဲ ကိုယျ့ရငျခုနျသံ ကိုယျပွနျကွားနရေသညျထငျမိသညျ။ .. မှောငျထဲမှာ တခါတခါ ရုပျရှငျက အလငျးပွကှကျတှေ ပွလာလို့ အလငျးရောငျလေး နဲနဲအားကောငျးလာတိုငျး အနားပတျလညျမှ စုံတှဲတှကေ အပီပှဲကွမျးနကွေတာ လှမျးလှမျးမွငျနရေသညျ။ .. ဂြာဂြာတော့ ဘယျလိုနသေညျမသိ၊ .. ကိုလတျတော့ ရမကျဇောတှေ ထလာသညျ။ .. ဟိုးအရငျကတညျးက စိတျဝငျစားမိလြှကျသားနှငျ့ မရညျရှယျသော အဖွဈအပကျြမြားကွောငျ့ မနီးစပျဖွဈခဲ့သညျ့ ဂြာဂြာလေးနှငျ့ ခုလိုအခွအေနမြေိုး ရောကျနရေတော့ ကိုလတျခမြာ စိတျကို ထိနျးဘို့ အရမျးခကျခဲလာတော့သညျပေါ့။
လုပျငနျးခှငျမှာ ဆရာနှငျ့တပညျ့ပုံစံမို့ သူမမှာလဲ ရညျးစားရှိနမှေနျးကွီးသိသိနှငျ့ အစပြိုးရမှာ နဲနဲတော့ အခကျကွုံနရေသညျ။ … ဂြာဂြာကတြော့ကော … သူမလဲ သှေးနှငျ့ကိုယျ သားနှငျ့ကိုယျပဲလေ။ အစကတညျးက ကိုလတျကို အထာ တှပေေးနခေဲ့မိပွီး ကိုယျတျောခြောက သူမကိုတော့မကွံပဲ မုဆိုးမလေးနှငျ့ သှားငွိမျ့နမှေနျးသိလိုကျရလို့သာ စိတျဆိုးဆိုးနှငျ့ လကျရှိဘဲကို အရှဲ့တိုကျအဖွပေေးဖွဈခဲ့သညျပဲ … ။ ခုလိုမြိုး ဘဲနှငျ့နှဈပါးကွညျကွဘို့လို့ ရုပျရှငျကွညျ့မညျ စီစဉျထားပွီးကာမှ ဘဲကပျေါမလာလို့ ကိုလတျနှငျ့အတူကွညျ့ဖွဈကွတော့ သူမစိတျတှေ ဘယျလိုကွီးဖွဈလာမှနျးကို မသိ။ .. ရငျတှကေ မခုနျစဖူး အခုနျထူးလာသညျ။ .. ပွီးတော့ လကျရှိဘဲ ကိုလှငျက ကဗြာရူး ခပျကွောငျကွောငျမို့ တခါမှ ထိထိရောကျရောကျ အပှအေ့သပျအကိုငျအတှယျ မခံရ ဘူးလတေော့ စိတျတှကေ ဆာနခေဲ့ရသညျဖွဈရာ ကိုလတျမြား ခုနေ သူမကို လာဖကျလတေော့မညျလား .. နမျးပွုမြား လာလတေော့မှာလား … စသညျဖွငျ့ စိတျတှေ ဂနာမငွိမျဖွဈနရေလတေော့၏။
အခြိနျတှေ အတျောလေးကွာသှားသညျ။ … ကိုလတျက မှောငျထဲတှငျ မကျြလုံးဒေါငျ့ကပျပွီး ဂြာဂြာ့ကို အသာခိုးကွညျ့၏။ .. ကောငျမလေးလဲ စိတျတှေ ဂနာမငွိမျဖွဈနမှေနျး ကိုလတျရိပျမိသှားသညျ။ .. ရိပျမိမညျပေါ့၊ ဂြာဂြာ့အာရုံက ရုပျရှငျထဲမှာကို မရှိ။ .. ဘာတှေ ပွလို့ပွနမှေနျးလဲ သိပုံမရ။ .. မှောငျထဲကိုသာ မကျြလုံး အကွောငျသား တှငေေးငေးလေး ကွညျ့နမေိသညျကိုး ..။ သကျပွငျးလေးတှေ မသိမသာ ခိုးခိုးခနြတောကလဲ အကွိမျကွိမျ။ ကိုလတျ စိတျတှေ ပိုဆူလာသညျ။ ကံစမျးမဲလေးတော့ နှိုကျကွညျ့ဦးမှ ဟူသော စိတျက ရုနျးထလာသညျ။ ဖွဈခငျြရာ ဖွဈစတေော့ … ။ နှဈယောကျကွားမှ လကျရနျးပျေါတငျထားသော ဂြာဂြာ့လကျလေးပျေါသို့ ကိုလတျ သူ့လကျကို မသိမသာ ထပျတငျလိုကျသညျ။ … ဂြာဂြာ့လကျလေးတှေ အေးစကျနတော သတိပွုမိသှားပွနျ၏။ ဂြာဂြာက သူမ၏ လကျကို မရုနျးဖယျ .. ။ ‘ မလှုပျ စိတျတူ ‘ ဆိုသော စကားကို ကိုလတျ သှားသတိရသညျ။ ရဲဆေးတှကေ ပိုပွီး တကျလာတော့၏။
ကိုလတျ ခါးဆနျ့ဆနျ့ပွငျထိုငျလိုကျသညျ။ .. အနအေထားပွငျရငျးမှ လကျညောငျးလို့ ဆနျ့ရသလိုလိုနှငျ့ သူ့ဘယျလကျမောငျးကို ဂြာဂြာရှိရာ ဘေးခုံ ပျေါသို့ အသာဆနျ့တငျလိုကျသညျ။ … ပထမတော့ လှတျလှတျကငျးကငျးတငျထားခွငျးဖွဈ၏။ ခနနတေော့ လကျကို မသိမသာ လြှောခကြာ ဂြာဂြာ့ပုခုံးသားအိအိလေးတှနှေငျ့ သူ့လကျမောငျးကော လကျဖံကြိုပါ ဖိကပျထားလိုကျသညျ။ … ဂြာဂြာလဲ ငတုံးမလေးမှ မဟုတျသညျပဲလေ။ .. ကိုလတျ အနအေထားပွငျလိုကျကတညျးက သတိထားမိနသေညျ။ .. ထငျထားသညျ့အတိုငျးပဲ ခနနတေော့ ကိုလတျလကျကွီးက သူမပုခုံးပျေါရောကျလာတော့ ဘာလုပျရရငျကောငျးမလဲ ခနစဉျးစားနမေိသေးသညျ။ ရုနျးလိုကျရမလား .. ရနျတှပွေီ့း ထှကျသှားလိုကျရမလား … ။ အို … လကျရှိဘဲကလဲ အာပလာကောငျ … ။ ကိုလတျမှာလဲ လကျရှိ ဆိုငျသူရှိမနတော သူမအသိ။ … သူမ စိတျတှကေလဲ မရိုးမရှဖွဈနတော အမှနျ … ။
ဘာမြား ရုနျးရနျ အကွောငျးရှိမညျတဲ့လဲလေ … ။ ဂြာဂြာ အသာပဲငွိမျနမေိလိုကျတော့သညျ။ ငါးမိနဈခနျ့တော့ အခွအေနကေ ဒီအတိုငျးငွိမျသကျနေ၏။ ဂြာဂြာ အသကျပငျ ရဲရဲမရှုရဲ … ။ ဘာတှမြေား ဆကျဖွဈလာဦးမညျလဲ ရငျတထိတျထိတျနှငျ့ စောငျ့စားနမေိ ရသညျ။ … တကိုယျလုံးလဲ ဖိနျးကနဲ ရှိနျးကနဲ ဖွဈဖွဈလာသညျ။ တခကျြတခကျြ ကွကျသီးလေးတှပေငျ ထထ သှားရ၏။ … အောကျက စောကျဖုတျလေးထဲမှ အရညျတှေ စိမျ့ထှကျလာလသေညျလား မသိ။ .. အောကျခံပငျတီခှဆုံနားမှာ စေးကပျကပျဖွဈလာတာ ခံစားနရေသညျ။ … နရေ ခကျလိုကျတာနျော။ ကိုလတျကလဲ အခွအေနကေို တရံမလပျ အကဲခတျနခွေငျးဖွဈသညျ။ ဂြာဂြာ့မကျြနှာအနအေထား အပွောငျးအလဲကို မကျြလုံးဒေါငျ့ကပျပွီး ခကျြကငျ လုပျနသေညျမို့ ပထမတော့ သူမမကျြနှာလေး ဝခှေဲမရသညျ့ခံစားမှုဖွငျ့ဇဝဇေဝါဖွဈနတော .. နောကျတော့ ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျဟနျမြိုး ဖွဈသှားတာ … တျောတျောကွာတော့ ဖီးလျတှေ တကျလာဟနျနှငျ့ မကျြတောငျလေးတှမှေေးပွီး တလှုပျလှုပျ တရှရှ ဖွဈလာတာ .. အကုနျ ကိုလတျ မွငျနရေသညျ။ ကံစမျးမဲတော့ ပေါကျပွီပေါ့ … ။
စားနကွေ ကွောငျဖား ကိုလတျအဖို့ ဒီအခွအေနရေောကျလြှငျ ဘာတှဘေယျလို ရှဆေ့ကျရမညျဆိုတာ စဉျးစားနစေရာပငျမလို။ အရာရာက သူ့အလိုလို တဆကျတညျး လှုပျရှားသှားကွလသေညျ။ ပထမက မသိမသာတငျထားသော ကိုလတျလကျတှကေ သိသိသာသာပုံစံသို့ပွောငျးကာ ဂြာဂြာ့ပုခုံး လုံးလုံးအိအိလေးတှကေို ကကြနြန ဖကျလိုကျသညျ။ ဂြာဂြာ့ကိုယျလေး တခကျြတုနျတကျသှားသျောလညျး ရုနျးတာတှေ ဘာတှတေော့ မလုပျ။ .. ဒီတော့ နောကျတဆငျ့အနဖွေငျ့ သူမ၏ ဘယျလကျမောငျးလေးကို ကိုလတျလကျခြောငျးတှကေ ဆုပျညှဈလာသညျ၊ … တရှရှ ပှတျသပျပေးလာသညျ။ ဂြာဂြာ တလူးလူးတလှနျ့လှနျ့ ဖွဈလာသညျ။ ခေါငျးလေးကိုတော့ တအားကို ငုံ့ခပြွဈထားမိ၏။
ဝတျထားမိသညျက လကျပွတျအင်ျကြီလေးမို့ ဂြာဂြာ့လကျမောငျးသားလေးတှကေ ကိုလတျပှတျသပျတာကို အကာအကှယျမရှိ တိုကျရိုကျခံနကွေရသညျ။ ခံစားမှုက နငျ့နငျ့နဲနဲ ရှိလှသညျ။ … ဂြာဂြာ၏ တုတျတုတျခဲခဲ ပေါငျတံကွီးနှဈခြောငျးက မသိမသာ တလူးလူးတလှနျ့လှနျ့နှငျ့ အခငျြးခငျြး ပှတျပှတျနကွေတာ ကိုလတျ အလငျးရောငျမှိနျမှိနျထဲတှငျ မွငျနရေသညျ။ ဗွုနျးဆို ကိုလတျ ညာလကျက ထိုပေါငျတံကွီးတှပေျေါ ကရြောကျလာ၏။ .. အခငျြးခငျြး ပှတျနရေတာ မကွညျ့ရကျသညျ့အလား ဂြာဂြာ့ပေါငျတံကွီးနှဈခုကို ပှတျပေးလာသညျ။ .. ကူညီပါရစေ ဆိုတာ ဒါမြိုးပဲဖွဈမညျ။ … ‘ အို … ‘ ဂြာဂြာ့ အာမဍေိတျ သံလေးက ခွောကျကပျနသေော အာခေါငျထဲတှငျ တိုးတိတျပြောကျကှယျသှား၏။ အာတှတှေငျမက နှုတျခမျးတှလေဲ ပူစပျပူလောငျနှငျ့ ခွောကျသှနေ့လေပွေီ။ အောကျနှုတျခမျးကို သူမ၏ ရှသှေ့ားလေးတှနှေငျ့ တအားကိုဖိကိုကျထားမိတော့၏။ ကိုလတျပိုဆိုးလာသညျ။
ဘယျလကျမောငျးကို ပှတျသပျဖွဈညှဈပေးနသေော ကိုလတျလကျခြောငျးတှကေ ဂြာဂြာ့ခိုငျြးကွားလေးမှ လှိုကြာ ဘယျဘကျနို့အုံကွီးကို နှိုကျဖို့ကွိုးစားလာကွသညျ။ .. ဂြာဂြာ အတငျးလကျမောငျးကို ဖိကပျထား မိ၏။ အပိုလြေးဆိုတော့လဲ ရငျဖိုသညျပေါ့ … ။ လကျရှိရညျးစား ကိုလှငျက ဒီနယျမွတှေကေို ကြူးကြျော ဘူးသေးတာမှ မဟုတျတာ။ … ‘ အာ့ … ‘ ဂြာဂြာ့ နှုတျမှ လှတျကနဲ အသံလေးထှကျသှားသညျ။ ခိုငျြးကွားမှ တိုးဝငျရနျ လမျးရှာမရဖွဈနသေော ကိုလတျလကျကွီးက ဗွုနျးကနဲဆို ပုခုံးပျေါမှကြျောကာ ဂြာဂြာ့ဘယျဘကျနို့အုံကွီးကို အုပျကိုငျလိုကျသညျကိုး … ။ သူမ ဘာလုပျလိုကျရမညျမှနျး မသိသေးခငျမှာပငျ ကိုလတျလကျခြောငျးမြားက နို့အုံကွီးတခုလုံးကို အုပျစီးမိသှားပွီ။ … အိတုနျသား အင်ျကြီလေးပျေါမှ ဖိအုပျကာ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ဆုပျညှဈလိုကျသော ကိုလတျလကျကွီးအောကျတှငျ ဂြာဂြာ့နို့အုံကွီးက အိကနဲ အိကနဲ မရုနျးသာမဖယျသာ ခံနရေတော့သညျ။
ဒါတော့ ကိုလတျ နဲနဲလှနျပွီထငျသညျ။ .. ‘ အှနျ့ .. ဟှနျး … အူး ….. ‘ ကိုလတျကို ရှမေ့ဆကျဖို့ ပွောမညျရယျလို့ ဂြာဂြာ ငုံ့ထားသောခေါငျးလေးကို မော့ပွီး ကိုလတျဖကျသို့ အလှညျ့လိုကျတှငျ ဒီလိုဖွဈလာမညျမှနျး ကွိုတှကျကာ အသငျ့ပွငျထားသော ကိုလတျမကျြနှာကွီးက သူမ မကျြနှာလေးကို အလိုကျသငျ့ပူးကပျသှားလိုကျတော့သညျ။ ဒီတော့ ကိုလတျနှုတျခမျးနှေးနှေးကွီးတှကေ ဂြာဂြာ့နှုတျခမျးအိတှဲတှဲလေးတှနှေငျ့ အလိုလို ဂဟဆေကျမိသှားရတော့သညျပေါ့။ .. ဂြာဂြာ့တကိုယျလုံး ဗွောငျးဆနျသှားရခြိနျမှာပငျ ကိုလတျက သူမနှုတျခမျးသားလေးတှကေို အားအငျအပွညျ့ နှငျ့ သူ့ပါးစပျကွီးထဲ ပါလာသညျအထိ စုပျသှငျးယူလိုကျတော့ ဂြာဂြာ့ထဲမှ မပီမသ ညဉျးသံလေးတှပေဲ လြှံထှကျလာရတော့သညျ။ တကိုယျလုံးလဲ အားအငျတှေ မရှိတော့သလို ကိုလတျရငျခှငျကွီးထဲ လဲပွိုကြ သှားရတော့သညျ။
စောစောက ဂြာဂြာ့ဘယျလကျမောငျးလေးကို ပှတျသပျပေးနသေော ကိုလတျဘယျလကျကွီးက သူ့ရငျခှငျထဲ လဲပွိုကလြာသော ဂြာဂြာ့ကိုယျလုံးလေးတခုလုံးကို မွှတေကောငျလို သိုငျးဖကျရဈပါတျ ထားလိုကျသညျ။ ညာလကျကတော့ မူလ တာဝနျဖွဈသညျ့ ပေါငျတံကွီးတှကေို ပှတျသပျပေးနသေညျ့အလုပျကို ဆကျလကျ ထမျးဆောငျနဆေဲပငျ … ။ နှုတျခမျးခငျြးတစေု့ပျလို့ အားရတော့ ကိုလတျက သူ့လြှာဖြားလေးကို ဂြာဂြာ့ ပါးစပျထဲ ထိုးသှငျးလာပွနျသညျ။ ပထမတော့ ဂြာဂြာ နှုတျခမျးကို အတငျးစထေ့ားမိသညျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုလတျလကျကွီးက သူမပေါငျတံနှဈခုကွားထဲ ရုတျတရကျ ထိုးနှိုကျလိုကျခြိနျမှာတော့ ပါးစပျလေးက အလိုလို ဟပေးလိုကျမိလြှကျသား ဖွဈသှားရလတေော့သညျ။
ကိုလတျက သူအလှနျဖီးလျလာခဲ့ရသော ဂြာဂြာ့တကိုယျလုံးကို အခုမှ စိတျတိုငျးကြ အသုံးခနြလေတေော့၏ ဘယျလကျက အပျေါပိုငျးတခုလုံးကို ပိုကျစိပျတိုကျခွမှေုနျးနခြေိနျတှငျ ညာလကျကတော့ ဗိုကျသားခပျြခပျြ လေးနှငျ့ ပေါငျတံကွီးတှေ ပေါငျကွားတှကေို ဒလစပျလိုကျလံပှတျသပျနသေညျ။ ထိုငျခုံနှငျ့ညပျကာ ပိနေ သော မယျတှပေငျရှုံးလောကျသညျ့ တငျသားအိအိကွီးတှမှောလဲ ဘေးမဲ့ပေးမခံရရှာပါ။ .. ဘယျလကျကော ညာလကျကပါ အဆငျသငျ့လြှငျ သငျ့သလို အောကျကိုလြှောခလြာပွီး အိတုနျသားထမီလေးပျေါကနေ တလကွမျးပှတျသပျလိုကျ ဖွဈညှဈဆုပျနယျလိုကျ ဆိတျလိုကျ လုပျနလေတေော့သညျ။ ရညျစားနှငျ့တုနျးက ဘာမှမဖွဈခဲ့ရသေးသညျ့ ဂြာဂြာ့တကိုယျလုံး ကိုလတျလကျထဲတှငျ စိစိညကျညကျ ကနြေရေလပွေီ။
ခံလို့လဲကောငျးသညျ .. နာလဲနာသညျ။ ကိုလတျလြှာကွီးကလဲ ဂြာဂြာ့ပါးစပျထဲတှငျ ဒေါငျ့စလေ့ောကျအောငျကို လြှောကျထိုးမှနှေောကျနသေညျ။ မသိစိတျ၏ စဆေ့ျောမှုဖွငျ့ပငျ ဂြာဂြာလညျးပဲ ကိုလတျလြှာကို သူမလြှာလေးနှငျ့ ပွနျထိုးကလိပေးနမေိသညျ။ ‘ အငျး ဟငျးဟငျး …. ပွှတျပွှတျ … အှနျးဟှနျး …. အူးအူး …. ‘ ကိုလတျက ပှဲကွမျးသထကျ ကွမျးလာသညျ။ ဂြာဂြာ့ထမီလေးက ပွလြေော့နပွေီမို့ အောကျခံပငျတီလေးက မပျေါ့တပျေါဖွဈနရော ကိုလတျ၏လကျကွီး တှကေ ထို ပငျတီလေးနှငျ့ တငျသားအိအိကွီးတှကွေားထဲတိုးဝငျပွီး တငျသားကွီးတှကေို အရှိအတိုငျးကို ကိုငျဆုပျလာသညျ။ တခါတခါ ရှဘေ့ကျဗိုကျသားလေးနှငျ့ ပငျတီကွားထဲသို့ပငျ နယျကြျော ဝငျရောကျခငျြ လာလရော ဂြာဂြာ မနနေိုငျတော့ပဲ နှုတျမှ အျောညဉျးသံတှေ ထှကျလာရသညျ။ သူမနှုတျခမျးတှကေ ခုထိ ကိုလတျနှုတျခမျးတှအေောကျမှာပငျ ငုံခဲထားခံရဆဲဖွဈရာ ပလုံးပထှေးအျောသံတှလေို ထှကျလာရလေ၏။
ကိုလတျက အသံတှေ ငွိမျသှားအောငျ နှုတျခမျးကို အားနှငျ့ဖိစုပျပွဈသညျ။ … သို့ပမေယျ့ အသံတှကေ ငွိမျမသှားပဲ လှိုဏျသံပေါကျကာ ပိုကယျြလာရသညျ။ .. ဘေးနားက အတှဲတှပေငျ သူတို့အလုပျကိုရပျပွီး ကိုလတျနှငျ့ ဂြာဂြာ့အဖွဈကို တစတေ့စောငျးလှမျးကွညျ့လာကွတာ ဂြာဂြာ မကျြစိဒေါငျ့ထဲမှ မွငျလာရတော့ တခုခုတော့ လုပျမှဖွဈတော့မညျဟု ဆုံးဖွတျလိုကျမိသညျ။ .. ဒီအတိုငျးတော့ မဖွဈမှ မဖွဈတော့ပဲလေ။ .. ‘ ပွှတျ ….. ‘ ဂြာဂြာ ခေါငျးလေးကို တအားစောငျးပဈပွီး သူမနှုတျခမျးတှကေို ကိုလတျ၏အနမျးအစုပျတှအေောကျမှ လှတျအောငျ အားစိုကျရုနျးလိုကျတော့ နှုတျခမျးခငျြးကှာသှားသညျ့အသံက ရုပျရှငျတရုံလုံးပငျ ဟိနျးထှကျ သှားလား မှတျရသညျ။
ရှကျဖို့ကောငျးလိုကျတာနျော ….. ‘ လူ .. လူတှေ ဝိုငျးကွညျ့ကုနျပွီ ဆရာရယျ … ပွနျ .. ပွနျကွရအောငျပါနျော … နျော … ‘ အသကျကိုမှနျအောငျ ထိနျးရှုရငျး အသံတုနျတုနျလေးနှငျ့ ဂြာဂြာ ပွောမိသညျ။ .. ရုပျရှငျပွီးမှ မီးတှလေငျးမှ လူရှသေူ့ရှမှေ့ာ သူမ ဘယျလိုမကျြနှာနှငျ့ အပွငျပွနျထှကျရပါ့မလဲလေ။ .. ကိုလတျက သိပျသဘောတူခငျြပုံမရ .. ။ ခုမှ နမျးလို့ကိုငျလို့ နှိုကျလို့ ကောငျးတုနျးမို့ ဝသေးပုံမပျေါ။ .. ‘ နျော .. ဆရာ .. နျောလို့ … ။ ပွနျကွရအောငျပါ ….. ‘ ဂြာဂြာ ငိုသံပါလေးနှငျ့ တောငျးပနျတော့မှ ကိုလတျက မညိတျခငျြညိတျခငျြနှငျ့ ခေါငျးညိတျသညျ။ မှောငျထဲမှာ နှဈယောကျသား လကျခငျြးတှဲယငျး ရုံအပွငျထှကျပေါကျဆီ လှမျးလာခဲ့လိုကျကွ၏။ ဂြာဂြာကတော့ ခေါငျးကို ကွမျးပွငျနှငျ့ထိလုမတတျ ငုံ့ထားသညျ။
ကိုလတျကပဲ ဦးဆောငျချေါလာရခွငျး ဖွဈ၏။ .. အပွနျမှာတော့ အခွအေနကေ မတူတော့ပွီမို့ ကိုလတျ ပညာပွတော့သညျ။ အဝငျ တုနျးက မတျောတဆ နှဈခါလောကျ ထိမိတိုကျမိခဲ့တာ သှေးရိုးသားရိုးမှနျး ဂြာဂြာသိသညျ။ သို့ပမေယျ့ အခုကတြော့ ကိုလတျက တမငျကွီးကို မှောငျထဲမှာ မမွငျရသလိုလိုနှငျ့ သူမကိုယျလေးကို ဝငျတိုးလိုကျ ပှတျတိုကျလိုကျ လုပျနသေညျ။ .. တခါတခါ လကျကွီးတှကေ ပီပီပွငျပွငျပငျ သူမခါးကိုဖကျလိုကျ ဖငျဆုံကွီးကိုပှတျလိုကျ ကိုငျလိုကျ လုပျနသေေးသညျ။ လမျးလြှောကျယငျးမို့ အခှငျ့မသာလတေော့ နို့အုံကွီးတှကေတော့ ခမျြးသာရာ ရနသေေးသညျ။ .. ဖွဈခငျြတာဖွဈ ရုံအပွငျမွနျမွနျရောကျဖို့ အဓိကပဲဟုသာ တှေးကာ ဂြာဂြာ လိုကျလာခဲ့ရတော့သညျ။ အပွငျတှငျ ၆နာရီခှဲလောကျရှိပွီမို့ မှောငျစပြိုးနပွေီ။ .. ဆောငျးဦးပကေိုး ။ ဂြာဂြာ့ခွထေောကျတှေ မွကွေီးနှငျ့ထိနလေား လထေဲတှငျလှငျ့နလေားပငျမသိတော့ … ။
ကိုလတျ ကားနားရောကျလို့ တံခါးဖှငျ့ပေးလိုကျတော့မှ ဝုနျးကနဲအရုပျကွိုးပွတျ ဝငျထိုငျခလြိုကျပွီး မကျြစိ အစုံကို နာနာမှိတျထားလိုကျမိတော့သညျ။ ကိုလတျကိုလဲ မကျြနှာခငျြးမဆိုငျရဲ … ။ ကိုလတျက ကားစကျနှိုးပွီး မောငျးထှကျလာသညျ။ ဆောငျးဦးမို့ မအိုကျသျောလညျး ကိုလတျက မှနျတှအေလုံပိတျကာ အဲယားကှနျးကို ခပျနိမျ့နိမျ့ဖှငျ့ထား၏။ လနေုအေးလေးက ဂြာဂြာ့မကျြနှာကို တိုးနသေညျမို့ စောစောက မောထားသမြှ အတိုးခကြာ ဂြာဂြာ အမော ဖွနေရေလသေညျ။ တျောသေးသညျ … ကိုလတျက အခုတော့ ကားကို ညငျညငျသာသာပဲ မောငျးနသေဖွငျ့ ရုပျရှငျအလာတုနျးကလို ရငျမောမနရေလို့သာပဲ ။ မဟုတျရငျတော့ မိဂြာဂြာတို့ မောရလှနျးလို့ အသကျပငျ ထှကျသှားလောကျမညျ ဟု တှေးနမေိလသေညျ။
ကိုယျ့ဇောနှငျ့ကိုယျမို့ ကိုလတျ ဘယျကိုမောငျးနမှေနျး ဂြာဂြာ သတိမထားမိ။ ကားလေးက တုနျ့ကနဲ ရပျလိုကျတော့မှ မကျြစိအသာဖှငျ့ကွညျ့မိတော့ ဆေးရုံအဆောငျကို ပွနျပို့ပေးတာ မဟုတျမှနျး သဘောပေါကျမိတော့သညျ။ ဂြာဂြာ မကျြလုံးပွူးသှားသညျ။ … ကိုလတျဖကျ ပွာပွာသလဲ လှညျ့ကွညျ့မိတော့ ကိုလတျက ခပျအေးအေး မထုံတကျသေး ပုံစံနှငျ့။ .. ‘ ဒါ .. ဒါက ဘယျရောကျနတောလဲ ဆရာ … ‘ ကိုလတျက နှဈလိုဘှယျ ပွုံးပွလိုကျသညျ။ ‘ ဒါ ဆရာ့အိမျလေ ဂြာဂြာရဲ့ … ဟိုတုနျးက ဂြာဂြာပဲ ကွုံရငျ ဝငျလညျခငျြတယျဆို … ‘ ‘ အယျ … အဲဒါက .. အဲဒါက … ‘ ဂြာဂြာ ကိုယျ့စကားနှငျ့ကိုယျ ဘာပွနျပွောရမညျမှနျးမသိ။ ‘ လာပါ .. ဂြာဂြာရယျ … အေးအေးဆေးဆေး စကားပွောရအောငျလို့ပါ နျော .. နျော ….. ‘ မကျြနှာနားကပျကာ ပွုံးပွနသေော ကိုလတျစကားသံအောကျတှငျ ဂြာဂြာ ဘယျလိုကဘယျလို ခေါငျးညိတျ ပွလိုကျမိသညျမသိ။
ကိုလတျက အောကျ အရငျဆငျးသှားကာ မွညေီတိုကျခနျးအဝငျတံခါး နှဈထပျကို သော့ဖှငျ့နသေညျ။ ကြောကျမွောငျးဘကျမှ မွညေီတိုကျခနျးကယျြတှေ ထုံးစံအတိုငျး ကားကို အထဲတနျးပွီး မောငျးသှငျးလို့ ရအောငျ ဆငျခွလြှေောလေးတှေ လုပျထားသညျမို့ တံခါးတှေ ဖှငျ့ပွီးသညျနှငျ့ ကိုလတျက ကားကို အထဲ မောငျးသှငျးလာလိုကျ၏။ ဂြာဂြာကတော့ ကားပျေါမှမဆငျးဖွဈပဲ ခေါငျးလေးငုံ့ကာသာ ငူငူငေါငျငေါငျကွီး ထိုငျနမေိတော့သညျ။ သူမတော့ စိတျညှို့မြား ခံထားရပွီလားမသိဟုပငျ သူမဖာသာ တှေးနမေိလေ၏။ တိုကျခနျးထဲ ကားရောကျသှားတော့ ကိုလတျက ကားပျေါမှဆငျးကာ အခနျးတံခါးတှေ ပွနျပိတျသညျ။ ကားမှနျတှကေ ခုထိမခရြသေးသညျမို့ ဂြာဂြာ ကိုလတျနှငျ့ပါလာတာ အပွငျလူတှေ သတိထားမိမှာမဟုတျ။ ဒီလိုဖွဈအောငျပဲ ကိုလတျက မွညေီတိုကျခနျးကယျြမှာ တမငျ နခွေငျးဖွဈသညျ။
အပျေါထပျတှဆေို ကောငျမလေးတှေ ပါလာတိုငျး လမျးလြှောကျတကျနရေသညျနှငျ့ ရပျကှကျထဲ ကွျောငွာမောငျးခတျသလို ဖွဈနမေညျ။ .. အခုတောငျမှ သူ့သတငျးတှကေ တရပျကှကျလုံးပွနျ့ခငျြခငျြ မဟုတျလား။ … အမှနျက အောကျထပျ အခနျးကယျြကွီးမို့ ဆေးခနျးကို အိုးမကှာ အိမျမကှာ ဖှငျ့လြှငျလဲ ရသညျပငျ ။ သို့ပမေယျ့ ကိုလတျက အိမျခနျးကို ဘယျတော့မှ ဆေးခနျးမဖှငျ့ဟု စှဲစှဲမွဲမွဲ ခံယူထားသူဖွဈသညျ။ ‘ လာလေ … ဂြာဂြာ ဆငျးလေ …. ‘ ကိုလတျက ခလုပျလေးနှိပျလိုကျသောကွောငျ့ ပါဝါဝငျးဒိုး ကားမှနျလေးက လြှောကသြှားသညျ။ ခုထိအောငျ ခေါငျးငုံ့ကာ ငွိမျငွိမျလေးထိုငျနသေော ဂြာဂြာ့မကျြနှာနားကပျကာ ကိုလတျက ခပျတိုးတိုး ချေါလိုကျလေ၏။
ကိုလတျ ထှကျသကျလလေေးတှကေ ဂြာဂြာ့ ပါးရဲရဲလေးတှပေျေါ ဖွတျပွေးသှားသညျ။ ‘ ဆရာ့ အိမျသားတှကေော ဟငျ … ‘ ဂြာဂြာက မကျြလှာလေးပငျ့ကာ မရဲတရဲလေး မေး၏။ ကိုလတျက ကကြေနြေပျနပျကွီး ပွုံးလိုကျသညျ။ ‘ မရှကျပါနဲ့ ဂြာဂြာရဲ့ … ဘယျသူမှကို မရှိပါဘူး … ဆရာက တယောကျထဲ နတေဲ့ဟာကို … ‘ ‘ အို … ဘုရားသခငျ … ‘ ဂြာဂြာ ဘုရားတရ ပွနျပါပွီ။ .. လိုကျလာမိတာတော့ မှားပွီထငျသညျ။ ဝခှေဲမရသော မကျြနှာလေးနှငျ့ ဂြာဂြာ ကားပျေါမှမဆငျးဖွဈပဲ ကိုလတျကို မော့ကွညျ့နမေိသညျ။ ‘ အှနျ့ ….. ‘ ကိုလတျက မကမျြးကွပွေီးသားမို့ ဘာလုပျရမညျဆိုတာ နားလညျသညျ။ စောစောက အရှိနျတှကေ အခြိနျနဲနဲကွာလို့ ဂြာဂြာသှေးအေးနမှေနျးသိသညျ။ .. သှေးပွနျပူလာအောငျ နှိုးပေးမှ အလုပျဖွဈမညျမှနျးလဲ သိသညျ။ ဒီတော့ တှတှေလေေး မေျာ့ကွညျ့နသေညျ့ ဂြာဂြာ့မကျြနှာလေးဆီ သူ့မကျြနှာကို ရုတျတရကျပူးကပျကာ နှုတျခမျးခငျြး အားရပါးရ တစေု့ပျပွဈလိုကျခွငျးဖွဈပါသညျ။ နှုတျခမျးခငျြးခပျပွငျးပွငျးစုပျထားရငျးနှငျ့ ကိုလတျခေါငျးက နောကျဆုတျကာ ပွနျမော့လိုကျတော့ ဂြာဂြာ မနနေိုငျ။
တဟငျးဟငျး ညဉျးသံလေးတှနှေငျ့အတူ နှုတျခမျးပျေါကရြောကျနသေညျ့ စုပျအား သကျသာလို သကျသာငွား ကိုလတျရှလြေ့ားရာနောကျ အလိုကျသငျ့ပါလာရတော့၏။ ချေါလိုရာကို ရုတျတရကျမလိုကျပဲ ငွငျးဆနျခငျြနသေညျ့ မိနျးကလေးတှကေို အလိုကျသငျ့ပါလာအောငျ ချေါသညျ့နညျးတမြိုးပါပဲ … ။ ခုလဲ ဂြာဂြာတယောကျ ကားအောကျ အလိုလို ဆငျးမိလြှကျသား ဖွဈသှားရတော့သညျပေါ့။ … ဂြာဂြာ သိလိုကျပါပွီ … သူမဘ၀ ဘယျသို့ဘယျပုံဖွဈတော့မညျဆိုသညျကို ။ သို့ပမေယျ့ သူမ မကနြေပျတာက ခုထိ ကိုလတျက ခဈြသညျလို့တောငျ တခှနျးမှ ဖှငျ့ဟမပွောသေး။ သူမ အပေါစား ဆနျလှနျးနပွေီလား … ။ တှေးရငျးတှေးရငျး ဝမျးနညျးလာသညျမို့ ဂြာဂြာ ရှိုကျကွီးတငငျ ကို ငိုခပြွဈလိုကျမိတော့သညျ။
‘ ဟငျ … ဂြာဂြာ ဘာဖွဈလို့လဲဟငျ … ‘ ဂြာဂြာ ရှိုကျကွီးတငငျ တကယျငိုတော့ ကိုလတျ ပွာသှားသညျ။ .. သူက ကောငျမလေးတှကေို သူတို့ကိုယျတိုငျ လိုလိုခငျြခငျြရှိနမှေ လုပျခငျြသူဖွဈ၏။ အလိုမတူပါပဲ မတရားကငျြ့တာမြိုးကြ ဘယျလိုမှ ခံစားလို့ မရ။ .. ထို့ကွောငျ့ ဂြာဂြာ အခုလို ရှိုကျကွီးတငငျ ငိုတော့ ရှမေ့ဆကျဖွဈပဲ ခနရပျကာ မေးလိုကျ မိခွငျးဖွဈသညျ။ ဂြာဂြာက မဖွေ။ … ခေါငျးကိုသာ တှငျတှငျယမျးကာ အားရပါးရ ဆကျငိုနသေညျ။ ကိုလတျက လှတျပေးလိုကျပွီမို့ အနားမှ ဆိုဖာတခုပျေါ ထိုငျခလြိုကျပွီး မနားတမျးကို ငိုနမေိခွငျးဖွဈပါ၏ ကိုလတျခေါငျးထဲ အတှေးတခု လကျကနဲ ဖွဈသှားသညျ။
ရညျးစားရှိသညျဆိုပမေယျ့ အစိမျးသကျသကျလေး။ .. ဖွဈခငျြတော့ အခွအေနတှေကေ တှနျးပို့လိုကျလို့ မရညျရှယျပါပဲ ခကျြခွငျးကွီး ဇာတျလမျးက ဖနျလာရ ပမေယျ့ သူက ခုခြိနျထိ သူမကို ခဈြတယျလို့တောငျ မပွောရသေး။ … ဒါကွောငျ့ ငိုနတောပဲဖွဈရမညျ။ ဒါဆိုလြှငျတော့ အနာသိလြှငျ ဆေးရှိရမညျပေါ့။ … ကိုလတျ က ဂြာဂြာ ငိုနသေော ဆိုဖာနားတှငျ ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျသညျ။ ‘ ဂြာဂြာ …. ‘ ဂြာဂြာက မော့မကွညျ့။ .. ငိုမွဲဆကျငိုနသေညျ။ ‘ ဂြာဂြာ … ဆရာ့ကို ကွညျ့ပါဦး။ … ဆရာ့ကို စိတျဆိုးနတောလား … ‘ ကိုလတျက နူးနူးညံ့ညံ့လေး ချေါလိုကျရငျး ဂြာဂြာ့ ပါးလေးနှဈဖကျကို လကျနှငျ့ အသာအုပျကိုငျကာ ညငျညငျသာသာလေး ခေါငျးကို ဆှဲမော့ယူလိုကျသညျ။ ဂြာဂြာ့ ရှိုကျသံလေးတှေ နဲနဲ ကဲသြှား၏။
‘ မဟုတျပါဘူး ဆရာရယျ … ဆရာ့ကို စိတျမဆိုးပါဘူး … ဂြာဂြာ့ကိုယျ ဂြာဂြာ စိတျဆိုးမိတာပါ … ‘ ‘ သွျော … ဂြာဂြာ ရယျ … ‘ မကျြရညျလေးတှေ ဥနသေော မကျြဝနျးနကျနကျလေးတှနှေငျ့ သူ့ကိုစိုကျကွညျ့နသေော ဂြာဂြာ့မကျြနှာလေးကို ကွညျ့ရငျး ကိုလတျရငျထဲမှာ အရငျတုနျးက တခါမှ မခံစားဘူးသော ခံစားမှုတခု ဖွဈထှနျးလာသညျ။ ဒီကောငျမလေးကို သူတကယျ ခဈြမိပွီ ထငျသညျ။ ဂြာဂြာ့လကျလေးတှကေို ကိုလတျ ခပျတငျးတငျးဆုပျကိုငျလိုကျမိ၏။ ‘ မငိုပါနဲ့ ဂြာဂြာရယျ … ဆရာ ဂြာဂြာ့ကို တကယျခဈြတာပါ ….. ‘ ‘ ရှငျ … ‘ ‘ တကယျပါ … ဟို ကဗြာရူးကောငျနဲ့ ဂြာဂြာ မဖွဈခငျကတညျးက ခဈြနခေဲ့ရတာ … အခွအေနတှေကေ မပေးတာနဲ့ ဆရာ ဘာမှမလုပျရသေးခငျ ဂြာဂြာ ဟိုကောငျ့နောကျ ပါသှားခဲ့ရတာ .. ။ ခုတော့ ပိုငျရှငျမှနျ လို့ ဆရာ့ဆီ ပွနျရောကျလာပွီပေါ့ ခလေးရယျ …. ‘ ကိုလတျအသံက ဆှေးမွညျ့တုနျခါနသေညျ။ ရုပျရှငျသာဆို အကယျဒမီ ရှော့တျ ပေါ့။ … အလိုလို ကမှ မဆှတျခငျက ညှတျခငျြနခေဲ့သူ ဂြာဂြာ့အတှကျတော့ ဒါလောကျက လိုအပျယုံမက ပိုနပေါပွီ။
ဂြာဂြာ အငိုတိတျသှားပွီး ကိုလတျကို စိနျးစိနျးကွီး ကွညျ့နသေညျ။ ‘ ဆရာ တကယျပွောတာလား … ‘ ‘ တကယျပေါ့ ဂြာဂြာရဲ့ … ပွီးပွီးရော ပွောပွီး နောကျနတှေ့ကြေ မတှရေ့မယျ့ မကျြနှာတှမှေ မဟုတျတာ၊ ဂြာဂြာ့ကို ဆရာတကယျ လကျထပျမှာ … ‘ ‘ သှားပါ … အပိုတှေ ….. ‘ ဂြာဂြာ့မကျြနှာလေးက ပွုံးတုံ့တုံ့လေး ပွနျဖွဈသှားသညျ။ ကိုလတျ ရငျဘတျကို လကျသီးဆုပျလေးတှနှေငျ့ ခပျသာသာလေး လှမျးထု၏။ ‘ ကဲ … ထဦး .. ။ ငိုထားလိုကျတာ ပပှေနပွေီ … မကျြနှာလေးဘာလေး သှားသဈခြဦေး … ‘ ကိုလတျက ဂြာဂြာ့ ပါးလေးကို လိမျဆှဲရငျး ကားပျေါမှာ ကနျြခဲ့သော ဂြာဂြာ့ ကြောပိုးအိတျလေးကို လှမျးယူပေးသညျ။ ‘ အို … ဆရာ မယူနဲ့ .. ဂြာဂြာ့ဖာသာ ယူမယျ … အထဲမှာ ထမီတှေ ပါတယျ … ‘ ဂြာဂြာက သူ့ကြောပိုးအိတျလေးကို ကိုလတျလကျထဲမှ အတငျးပွနျလုသညျ။
‘ သွျော … ဒါကွောငျ့ အိတျက ဖောငျးလှခညျြလား ထငျနတော … ဘယျ့နှယျ့ကွောငျ့ အဝတျတှအေကုနျ ထညျ့လာရတာလဲ … တခါတညျးမြား ဟိုအကောငျနဲ့ ခိုးရာလိုကျဖို့ လုပျထားလို့လား … ‘ ကိုလတျက မကျြမှောငျကွီးကုံ့ပြွီး မကမြေခမျြးလသေံနှငျ့ မေးလာသညျ။ ဂြာဂြာ ခဈကနဲ ရီလိုကျမိ၏။ ‘ ဆရာဟာလေ … သဝနျတိုစရာမရှိ ရှာကွံ တိုနတေယျ … နကျဖွနျ အလုပျတကျတော့ ဝတျဖို့ ယူနီဖောငျး တှပေါရှငျ့ … သူနဲ့က ဘာဆိုဘာမှ မဖွဈခဲ့ပါဘူးရှငျ ..ယုံပါ …. ဆရာနဲ့သာ …. ‘ ဂြာဂြာက စကားမဆကျတော့ပဲ ရုတျတရကျရှကျသှားဟနျဖွငျ့ မကျြနှာလေးရဲတှတျသှားသညျ။ ‘ ဆရာနဲ့က ဘာဖွဈလဲ … ဆကျပွောလေ … ‘ ကိုလတျက ခြောငျပိတျ မေးသညျ။ ‘ တျောပွီ … မပွောဘူး … ဆရာ အရမျးလူလညျကတြယျ … ‘ ဂြာဂြာက ခဈြမကျြစောငျးလေး လှမျးထိုးသညျ။ ကြောပိုးအိတျလေးကို ဇဈဖှငျ့လိုကျပွီး အထဲမှ ကရငျပတျဖျ ဘူးလေးတှေ နှုတျခမျးနီတောငျ့လေးတှေ ထုတျယူသညျ။
ကိုလတျက ကြောပိုးအိတျထဲ အသာကဲကွညျ့၏။ ဟုတျပါသညျ … ယူနီဖောငျးတှကေလှဲလို့ တခွားအဝတျအစားတှေ မပါပါ။ .. ဂြာဂြာ သူ့ကို မညာတာ သိလိုကျရတော့ ကနြေပျသှားသညျ။ ‘ ဟဲ့ … ယူနီဖောငျးကလဲ တစုံထဲ မကပါလား … ‘ ‘ အို … ဘယျ့နှယျကွောငျ့ ထမီတှလြှေောကျကိုငျကွညျ့နရေတာလဲ .. ဖယျပါ ဆရာရဲ့ ..။ ဂြာဂြာ့အကငျြ့က အမွဲတမျး ယူနီဖောငျး အပိုတစုံဆောငျထားနကေပြဲလေ .. ဒါမှ မတျောတဆ ဝါ့ဒျထဲမှာ အလုပျလုပျရငျး သှေးတှဘောတှေ ပရေငျ ခကျြခွငျးလဲစရာ တစုံအသငျ့ရှိနအေောငျလို့ … ‘ ဂြာဂြာက ရှငျးပွရငျး စောစောက ငိုထားမိလို့ ပပှေနသေညျ့ သူမ အငိုမကျြနှာလေးကို ပွနျသနျ့စငျဘို့ အိမျနောကျဖကျထဲ ဝငျမညျပွုသညျ။ ကိုလတျ အတှေးတခုပေါကျလာသဖွငျ့ ဂြာဂြာ့လကျကို လှမျးဆှဲထားလိုကျ၏။
‘ ဂြာဂြာ .. ခန ‘ ‘ ရှငျ … ဘာဖွဈလို့လဲ ဆရာ … ‘ ဂြာဂြာ မကျြလုံးလေး အဝိုငျးသားနှငျ့ လှညျ့မေးသညျ။ ‘ မကျြနှာသဈရငျးနဲ့ အခုအဝတျတှကေို ယူနီဖောငျးလေးနဲ့ ပွနျလဲလိုကျပါလား … ‘ ‘ အို … ပေါကျပေါကျရှာရှာ ဆရာရယျ … ‘ ‘ တကယျပွောတာပါ .. ဂြာဂြာရဲ့ .. ဂြာဂြာ့ကိုယျလုံးလေးကို ယူနီဖောငျးလေးနဲ့ အားရပါးရ ကွညျ့ခငျြလို့’ ‘ ဟှနျး … ပိုကို ပိုတယျ .. ‘ ဂြာဂြာ နှုတျခမျးလေးစူ ခွလေေးဆောငျ့ရငျး ကြောပိုးအိတျလေးကို ပွနျလာယူသညျ။ ပွီးမှ နောကျဖေးဘကျ ဝငျသှား၏။ နှဈယောကျသား ညစာလဲ မစားရသေး … သို့ပမေယျ့ အကွောငျးမဟုတျပါ၊ အိမျမှာ စညျသှပျ ဗူးတှေ ကွကျဥတှေ ဝကျအူခြောငျးတှေ အမြားကွီး ရှိပါသညျ။ .. ဆာမှပဲ ထလုပျပွီး စားတော့မညျဟု ကိုလတျ တှေးနမေိသညျ။ အခြိနျဘယျလောကျ ကွာသှားသညျ မသိ။ … အိမျရှေ့ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ ငှလေမငျးလေး ရုတျတရကျ သာ သှားသညျ။ ဟုတျပါသညျ … ဂြာဂြာရယျလေ .. ။
အဖွူအနီ ယူနီဖောငျးလေးနှငျ့ မကျြလှာလေးခကြာ မခို့တယို့လေး ရပျနသေညျ။ မကျြနှာသဈလိုကျယုံမက မိတျကပျနှငျ့ ကရမျပတျဖျပါးပါးလေးပါ ပွနျလိမျးထားသညျ။ ရုပျရှငျရုံထဲမှာ သူတလကွမျး စုပျနမျးလိုကျသဖွငျ့ ဆေးသားအကုနျပွယျကုနျပွီဖွဈသော နှုတျခမျးအိအိလေးတှကေိုလဲ ပနျးရောငျနုနုဆိုးဆေးလေးတှေ ပွနျတငျထားသညျ။ ဧညျ့ခနျးမီးခြောငျးရောငျအောကျတှငျ ဂြာဂြာတယောကျ အလှကွီး လှနတေော့သညျ။ လှမျးကွညျ့လိုကျမိသော ကိုလတျ မှငျတကျလို့ပငျ သှားရ၏။ ဂြာဂြာ့ထုံးစံအတိုငျး ရငျဖုံးအင်ျကြီအဖွူလေးက အသားအိအိလေးနှငျ့ တငျးရငျးကပျြထုပျနသေညျ။ အိတုံသား ထမီအနီလေးကတော့ ခါးနှငျ့ တငျသားအိအိထှားထှားကွီးတှပေျေါမှာ ခပျြခပျြရပျရပျလေး … ။ သံပါတျပေးလိုကျသော စကျရုပျကွီးပမာ ကိုလတျ ထိုငျနရောမှ စှကေ့နဲထပွီး ဂြာဂြာ့အနားရောကျသှား၏။ ဂြာဂြာ မော့မကွညျ့ပဲ ကိုလတျ အနားရောကျလာတာ သိနသေညျ။
ကိုလတျ အသကျရှုသံကွီးတှကေ ပွငျး ထနျလှနျးနသေညျကိုး .. ။ ကိုလတျက ဂြာဂြာ့ကို ရှတေ့ညျ့တညျ့မှ ကွညျ့သညျ၊ ဘေးစောငျးကွညျ့သညျ၊ ဂြာဂြာ အနခေကျလာသညျ။ ကိုယျတျောက ထိုမြှနှငျ့ အားမရသေး .. ။ နောကျဖကျမှ ပတျကွညျ့ပွနျသညျ။ ဂြာဂြာ ထှကျပွေးခငျြစိတျပငျ ပေါကျလာမိသညျ။ ကိုလတျအကွညျ့တှအေောကျမှာ တကိုယျလုံးမြား အရညျပြျောကသြှားတော့မလား လို့ ထငျမှတျခံစားရ၏။ ယူနီဖောငျးဆိုပမေယျ့ ဆေးရုံမှာမဟုတျပဲ အပွငျအဝတျအစားတှခြှေတျပွီး လဲလိုကျခွငျးမို့ အတှငျးခံတှကေ မလဲဖွဈလိုကျပါ။ .. အဲဒီတော့ ဂြာဂြာ့ အင်ျကြီအဖွူလေးအောကျတှငျ ဆေးရုံမှာလို ဘျောလီမဟုတျပဲ ပုံဆနျး ဘရာစီယာလေးနှငျ့ဖွဈနတော ကိုလတျ မမြှျောလငျ့ပဲ တှလေို့ကျရ၏။ အိုး … ဟနျကလြစှေ။ ဒီလိုလေး ဂြာဂြာ့ကို စိတျကူးပုံဖျောကွညျ့နခေဲ့ရတာ အကွိမျပေါငျးမရတှေကျနိုငျ။ ဒီနတေ့ော့ ကိုလတျ ကံကောငျးစှာနှငျ့ လိုအငျဆန်ဒတှေ ပွညျ့ဝ ရလပွေီပေါ့။ .. ကွညျ့ပါဦး … ။
အခြိုးအစားကလြှသော ကိုယျလုံးလေးပျေါတှငျ အသားအိအိ အင်ျကြီဖွူခပျပါးပါးလေးက တငျးရငျးဖိကပျလို့ နသေညျ။ … ထိုအသား ခပျပါးပါးလေးအောကျတှငျ ပုံဆနျးဘရာစီယာ မြှငျမြှငျလေးက အတနျးလိုကျလေး။ ဆူဖွိုးသော ဂြာဂြာ့ အသားဆိုငျတှကေို ဘရာစီယာကွိုးမြှငျလေးက ခပျတငျးတငျးစညျးနှောငျထားသဖွငျ့ အသားလေးတှေ ခိုငျြ့ဝငျနတောကိုပငျ အင်ျကြီဖွူလေးကိုထိုးဖောကျကာ ကိုလတျ မွငျနရေသညျ။ … နောကျကြောဘကျကနေ ကိုလတျ ကွညျ့နတော ကွာလှနျးလာတော့ ဂြာဂြာ နောကျကြောမလုံသလိုခံစား လာရသညျမို့ ကိုလတျ ဘာတှမြေားလုပျနသေလဲလို့ နောကျကို ခေါငျးလေးစောငျးငဲ့ကာ ပွနျကွညျ့သညျ။ ကိုယျလေးကို လိမျလိုကျသလိုဖွဈသှားရသညျမို့ ဂြာဂြာ့တငျသားကွီးတှကေ အိတုံထမီအနီလေးအောကျမှ တငျးကနဲ ရုနျးထှကျလာကွမလိုဖွဈသှား၏။ ကိုလတျ စိတျမထိနျးနိုငျတော့ပါ။
ဝါ့ဒျထဲမှာ ဒါမြိုးမွငျရလတေိုငျး မနဲစိတျထိနျးထားခဲ့ရသမြှ ခုတော့ ကိုလတျ လှတျထှကျသှားရတော့သညျ။ ‘ အား … သပွေီဆရာ … ‘ ကိုလတျလကျကွီးတှကေ ဂြာဂြာ့တငျသားအိအိကွီးတှကေို ခပျကွမျးကွမျးဆုပျကိုငျဖွဈညှဈလိုကျသညျမို့ ဂြာဂြာ ရုတျတရကျလနျ့ကာအျောမိသှားရသညျ။ အလိုလိုကမှ ရငျတှကေ တုနျနခြေိနျမို့ ဖငျ အားရပါးရ အကိုငျခံလိုကျရတော့ ဂြာဂြာ မတျတပျပငျကောငျးကောငျးမရပျနိုငျတော့။ .. ဒူးလေးတှေ ညှတျကာ နောကျကိုလဲပွိုကသြှားသညျ။ .. ကိုလတျက နောကျမှာရပျနခြေိနျဆိုတော့ ကိုလတျရငျခှငျထဲ အလိုလို ဂြာဂြာ့တကိုယျလုံး ရောကျသှားတော့သညျ။ ကိုလတျက ရငျခုနျစရာကောငျးလှသော ဂြာဂြာ့ကိုယျလုံးလေးကို အားရပါးရ ဆီးပွီးဖကျလိုကျသညျ။ စောစောကမှ အလှပွနျပွငျထားသညျမို့ ဂြာဂြာ့ကိုယျလေးက မှေးပံ့သြငျးမွ နသေညျ။ .. ကိုလတျစိတျတှေ မုနျယိုလာတော့သညျ။ ဆကျဒဇငျ(ှေိငြာ ) လို့ ချေါကွသညျ့ အကွမျးဖကျမှုနှငျ့ ကာမဆန်ဒတှဲပွီး ခံစားလိုသညျ့ စိတျက ကိုလတျထံ ရုတျတရကျအရှိနျအဟုနျပွငျးစှာ ဝငျရောကျလာသညျ။ .. ‘ ဗွိ … ဗွိ … ‘ ‘ အား … ဆရာ ဆရာရယျ … ‘ ဘာမှ မစဉျးစားနိုငျခငျမှာပငျ ကိုလတျက ဂြာဂြာ့ ယူနီဖောငျးအင်ျကြီဖွူလေးကို ကွမျးတမျးစှာ ဆှဲဖွဲပွဈလိုကျ လတေော့သညျ။
ဂြာဂြာ အလနျ့တကွား အျောမိတော့သညျ၊ .. ယူနီဖောငျး အပိုတစုံရှိသေးမှနျး ပွောမိတာ မှားပွီထငျသညျ။ ကိုလတျပုံစံက လူစိတျပြောကျနသေလိုဖွဈလာသညျမို့ ဂြာဂြာ အလနျ့တကွား ရုနျးမိ၏။ သို့ပမေယျ့ အရာမထငျတော့ .. ။ ကိုလတျရငျခှငျထဲတှငျ ကကြနြန ရဈပါတျခုပျြနှောငျခံထားရပွီမို့ ဘယျလိုမှ မရုနျးသာတော့ပါ။ .. ကိုလတျပွုသမြှ နုရတော့မညျ့ ဂြာဂြာ ဖွဈနရေပါပွီ။ ‘ ဗွိ ဗွိ .. ဗွဈဗွဈ .. ‘ ‘ အား … သပွေီ သပွေီ … ဆရာရယျ သနားပါဦး … ‘ ကွမျးကွမျးတမျးတမျးဆှဲဖွဲရငျး လကျမောငျးနားရောကျတော့ အင်ျကြီအသားက ရုတျတရကျ ဆှဲဖွဲမရပဲ တဈနသေညျမို့ ကိုလတျက ပိုပွီး အားစိုကျကာ ဆှဲဖွဲပွဈတော့ ဂြာဂြာ့လကျမောငျးသား နုနုလေးတှေ သှေးခွပေငျဥကုနျပွီလား မှတျရသညျ ..။ ဘယျလောကျတောငျးပနျတောငျးပနျ ကိုလတျကတော့ မရပျရေးခြ မရပျတော့ ..။ ဂြာဂြာ့အသံတှကေို မကွားပဲ ကိုလတျနားထဲမှာ သူအင်ျကြီဆှဲဖွဲရာက ထှကျလာသော တဗွိဗွိ အသံတှပေဲ လှမျးမိုးနသေညျ။
ထိုအသံတှကေ သူ့ကို ပိုပွီး မုနျယိုအောငျ လုပျပေးနကွေသညျ။ ဒီလိုနှငျ့ ခနအကွာတှငျ ဂြာဂြာ့ယူနီဖောငျးအင်ျကြီအဖွူလေးမှာ အစိတျစိတျအမှာအမှာ ဖွဈကာ ကိုယျပျေါမှ လြှောကြ သှားရတော့သညျ။ .. ‘ အယျ အယျ .. ဆရာ ဆရာ .. မလုပျပါနဲ့ .. မလုပျပါနဲ့ .. ဂြာဂြာ ခြှတျပေးပါ့မယျ … ‘ အင်ျကြီကိုခမြှေုနျးပွီးတော့ ကိုလတျလကျကွီးတှကေ ဂြာဂြာ့ အိတုံထမီလေးကို ကိုငျလာသညျ၊ ဆှဲဖွဲမညျပွငျ လာပွနျသညျ။ .. ဒီတခါတော့ ဂြာဂြာ မနသောတော့။ .. ကိုလတျ ဆှဲမဖွဲခငျ သူမထမီအနီလေးကို ကမနျးကတနျး ခြှတျခပြေးလိုကျရလသေညျ။ မဟုတျရငျ ဒါလေးလဲ ကိုလတျလကျခကျြမိသှားဦးမှာ။ .. ထမီတကှငျးဆိုလဲ တနျဘိုးက နဲတာမှ မဟုတျတာလေ .. နျော ။
ခုတော့ မီးခြောငျးမီးရောငျ ဖွူဖွူအောကျတှငျ ဂြာဂြာ့တကိုယျလုံး အဝတျဆိုလို့ ကြောတနျးဘရာစီယာလေးနှငျ့ အောကျက ပငျတီအနီရောငျလေးပဲ ကနျြတော့သညျ။ … ကိုလတျက ခုမှ လူစိတျပွနျဝငျလာဟနျနှငျ့ သကျပွငျးကွီးတခကျြမှုတျထုတျကာ နောကျနဲနဲဆုတျလိုကျ၏။ ‘ ဆရာရယျ …. ‘ ဂြာဂြာ ခပျတိုးတိုးညဉျးတှားယုံမှလှဲပွီး ဘာမှ မပွောနိုငျတော့ပါ။ ကိုလတျက ဘရာစီယာနှငျ့ ပငျတီလေးနှငျ့ လှခငျြတိုငျးလှနသေော ကွှရေုပျလေး ဂြာဂြာ့ကို အငမျးမရပငျ စိုကျကွညျ့နတေော့သညျ။ ပွီးတော့မှ ကွမျးပျေါ ခွပေဈလကျပဈ ထိုငျခလြိုကျလေ၏။ သူ့ခေါငျးကို သူ လကျနှဈဖကျနှငျ့ ခပျတငျးတငျးဖိညှဈရငျး ခါယမျးပဈလိုကျသညျ။ .. သူ့စိတျတှေ ဘာဖွဈ သှားပါလိမျ့နျော .. ။ ‘ ဆရာ .. ဆရာ .. နလေို့ကောငျးရဲ့လားဟငျ .. ဂြာဂြာဘာလုပျပေးရမလဲ … ‘ အရေးထဲ မိဂြာဂြာက စိုးရိမျတကွီးနှငျ့ သူ့ကိုပွေးပှထေူ့သညျ။
အားခငျြးက မမြှလတေော့ သူကတော့ မတျတပျရပျမိမလာပဲ ဂြာဂြာ့ကိုယျလေးသာ သူ့ရငျထဲ လဲပွိုကလြာပွနျ၏။ ‘ ပွှတျ .. အငျး ဟငျးဟငျး .. ‘ အမှတျမရှိသညျ့ မိဂြာဂြာ .. ။ ခံရတာတောငျ နဲသေးသညျလို့ သူမဖာသာ တှေးလိုကျမိသညျ။ ကိုလတျက သူမနှုတျခမျးတှကေို ပွတျထှကျမတတျ ဖမျးစုပျပွဈလိုကျသညျ။ .. တူးပိဈကလှဲလို့ တခွားဘာမှ မကနျြတော့သညျ့ သူမကိုယျပျေါမှ အသားစိုငျတှကေို မညှာတမျးဖွဈညှဈဆုပျနယျနပွေနျသညျ။ ‘ အား .. ဟာ့ ဟာ့ .. ဆရာ ဆရာ .. ဘာလုပျတာလဲ ရှီး .. အား .. ‘ ကိုလတျက သူ၏ နောကျထပျဆန်ဒတခုကို အကောငျအထညျဖျောလိုကျပါလပွေီ။ ဂြာဂြာ့ကို စတှပွေီ့းကတညျးက သူမနာမညျကို ဂြာဂြာလို့ ချေါလိုကျတိုငျး သူမကို ဘာဂြာပေးခငျြစိတျတှေ ထိမျးမနိုငျသိမျးမရ ပျေါပျေါလာတတျသညျဟု စာရှုသူတို့ ဖတျခဲ့ရပွီးပွီ မဟုတျလား။ … ခုတော့ ကိုလတျ ဆန်ဒပွညျ့ဝသှားရလပွေီ။
ဂြာဂြာ့ကိုယျလေးကို ကွမျးပျေါ အသာလှဲခလြိုကျပွီး ပငျတီအနီလေးအောကျမှ ဖောငျးဖောငျးမို့မို့ စောကျဖုတျ နရောလေးကို ကိုလတျနှုတျခမျးသားကွီးတှကေ အငမျးမရ ဖိကပျပွီး စုပျပွဈလိုကျတော့ ဂြာဂြာ့ အူတှေ အသဲတှေ ကလီစာတှေ အကုနျ ကိုလတျစုပျအားနှငျ့ပါသှားပွီလား ထငျလိုကျရတော့သညျ။ ဂြာဂြာ ထှနျ့ထှနျ့လူးသှားသညျ။ … ကိုလတျကို အားလဲ နာသညျ။ .. ကိုယျ လေးစားရငျးစှဲရှိခဲ့သော အလုပျထဲက ကိုယျ့ဆရာမို့ မကျြနှာလဲပူနေ မိရသညျ။ .. ကိုလတျကတော့ ဘာဆိုဘာကိုမှ ဂရုစိုကျသညျ့ပုံ မရှိတော့။ ပငျတီလေးပျေါမှ စုပျနရေတာ အားမရသညျ့အလား ကိုလတျက ပငျတီလေးကို ဆှဲဖွဲပဈလိုကျပွနျသညျ။ ‘ ဗွိ ဗွိ … အိုး … ‘ ပငျတီကတော့ ထမီလို မွနျမွနျဆနျဆနျခြှတျပေးလို့ ရတာမဟုတျလတေော့ ဂြာဂြာ ဘာမှ မတတျနိုငျလိုကျ။
မကျြစိတမှိတျအတှငျးမှာပငျ ပငျတီလေး စုတျပွဲသှားပွီး သူမ ဆီးခုံမို့မို့လေးနှငျ့ ရတနာရှကွေုတျခံတှငျးဝမှ စောကျဖုတျ နှုတျခမျးသားလေးတှကေ ထငျးကနဲ ဝငျးကနဲ ပျေါထှကျလာရတော့သညျ။ ကိုလတျက မကျြနှာတခုလုံးမှောကျခကြာ ဂြာဂြာ့ စောကျဖုတျ နှုတျခမျးသားလေးတှကေို သူ့နှုတျခမျးကွီးတှနှေငျ့ဖိကပျလိုကျပွီး ဖူးကနဲ လတေခကျြ ခပျပွငျးပွငျးမှုတျသှငျးလိုကျသညျ။ .. ‘ အိုး … မိုငျ … ‘ ဂြာဂြာ ကော့ပွနျတကျသှားသညျ။ .. တငျပါးကွီးက ကွမျးပွငျမှ တပလေောကျပငျ မွောကျတကျသှား၏။ ကိုလတျနှိုးဆှမှုကွောငျ့ စိုရှဲနှငျ့နသေော အရညျတှကေ မှုတျလိုကျသညျ့ခပျပွငျးပွငျးလအေားနှငျ့ လှငျ့စငျကာ ပတျဝနျးကငျြတခှငျ ပွနျ့ထှကျသှားကွသညျ။
‘ အာ့ .. အား … ‘ ကော့ပေးထားသလိုဖွဈနသေညျ့ ဂြာဂြာ့ရှကွေုတ စောကျဖုတျအ၀ လေးကို ကိုလတျက ပါးစပျတခုလုံး ဟနိုငျသမြှ ဟကာ ငုံခဲလိုကျပွီး စုပျယူလိုကျပွနျသညျ။ .. ဂြာဂြာ့တငျပါးကွီးတှေ ကွမျးပျေါ ဝုနျးကနဲ ပွနျပွဈကြ၏။ တငျဆုံသားအိအိကွီးတှသော မရှိလြှငျ တငျပါးရိုးတှပေငျ ကြိုးလောကျသညျ။ .. မိနျးကလေးတှေ တငျဆုံ အိထှားကွတာ သဘာဝတရားက ဒီလိုအခြိနျမြိုးတှအေတှကျ ကွိုတငျစီမံပေးထားတာပဲ ဖွဈရမညျ။ .. ခုလဲ ကိုလတျ ဘာဂြာအစှမျးအောကျတှငျ ဂြာဂြာ့တငျပါးကွီးတှကေ ဒလစပျခါယမျးနလေိုကျ မွောကျတကျ သှားလိုကျ .. ပွနျပွဈကလြာလိုကျဖွဈနရော တငျသားကွီးတှေ အိကနဲ အိကနဲကို ဖွဈနရေတော့သညျ။ နာလို့ နာရမှနျးလဲ မသိ။ .. ဂြာဂြာတို့ ဘာဂြာ အရသာကို ကောငျးကောငျးသိသှားပွီ။
ကိုလတျက ရိုးရိုး စုပျနေ မှုတျနရောမှ လြှာကွီးထုတျကာ အပွားလိုကျလကျြလိုကျ .. လြှာဖြားလေးနှငျ့ အစိလေးကို ထိုးကျောဆှလိုကျ .. နှုတျခမျးသားတဖကျစီကို သူ့နှုတျခမျးကွီးတှနှေငျ့ ဖိညှပျဆှဲယူလိုကျ လုပျနလေရော ဂြာဂြာ ကော့ကျောကနျကား ဖွဈနရေတော့သညျ။ .. အရညျတှလေဲ ထှကျကလြာလိုကျတာ ကိုလတျနှုတျခမျးတှလေဲ ပပှေနပွေီ။ .. ဒါနဲ့တငျမရပျသေးပဲ ထပျထှကျလာသောအရညျတှကေ ကွမျးပျေါမှာ အိုငျထှနျးလို့ကို နပွေီ။ .. ဘယျနှဈခြီတောငျ ပွီးကုနျပွီလဲ မသိတော့။ .. ‘ အယျ .. အယျ … မလုပျပါနဲ့ ဒါလေးတော့ … ‘ အောကျမှာ ဘာဂြာပေးနရေငျးက ကိုလတျလကျကွီးတှကေ အပျေါဘကျတရှရှေ့တေ့ကျလာကာ ဘရာစီယာ လေးကို လှမျးကိုငျလာတော့ ဂြာဂြာ ပွာပွာသလဲပငျ ကြောလေးကွှပွီး အမွနျခြိတျဖွုတျပေးလိုကျရသညျ။ မဟုတျလြှငျ ဒါလေးလဲ ကိုလတျက ခမျြးသာပေးမှာမဟုတျ။
ဆှဲဖွဲပွဈနဦေးမှာ။ ခုတော့ ဂြာဂြာ့အပျေါပိုငျးလဲ ဗလာကငျြးသှားပွီ။ ကိုလတျက ဂြာဂြာ့ကိုယျ အပျေါပိုငျးဆီ လြှောကနဲတကျ လာပွီး အရညျတှပေပှေနသေော နှုတျခမျးကွီးတှနှေငျ့ ဂြာဂြာ့ နို့အုံကွီးတှကေို အငမျးမရ စို့လိုကျပွနျသညျ၊ ‘ ပွှတျ ပွှတျ … ပလပျ ပလပျ … ‘ ‘ အား .. အငျ့ .. အဟငျ့ … ‘ ဘယျလိုဖွဈဖွဈ တခုမှ ခံရခကျြ မသကျသာပါလားနျော .. ။ ဂြာဂြာ စိတျလှုပျရှားစှာ တှေးမိသညျ။ … စောစောက အောကျပိုငျးမှာ ဘာဂြာပေးခံရတာကလဲ တမြိုး ခံစားခကျြပွငျးထနျသလို အခု အပျေါပိုငျးမှာ နို့စို့ခံရတော့လဲ ရငျထဲက နှလုံးသားတှပေါ ကိုလတျဆီ ပါသှားပွီလား ထငျမှတျမှားရပွနျသညျ။ .. ကိုလတျက ဒလကွမျးကို အားမနာတမျး စို့နသေညျ။ … ဘယျဘကျကိုစို့လြှငျ ညာ၊ ညာဘကျကိုစို့လြှငျ ဘယျဘကျနို့အုံကို လကျနှငျ့အပီအပွငျ သမ သေးသညျ။ တျောတျောကွာလာတော့ ဂြာဂြာ မခံနိုငျတော့ … ။ နို့အုံသားနုနုလေးတှေ နို့သီးခေါငျးလေးတှေ ကြိနျးစပျနာကငျြလာရပွီ။ ကိုလတျစို့သမြှ ရငျဘတျလေး ကော့ကော့ပွီး ခံနရေသညျမို့ နောကျကြောတှလေဲ ညောငျးလှပွီ … ။
အောကျမှာလဲ အရညျတှေ အိုငျထှနျးနပွေီ။ … ‘ အို … ဆရာရယျ … စို့လို့ မဝသေးဘူးလား … တျောပါတော့ … ‘ ဂြာဂြာ ထုတျကိုတောငျးပနျရတော့သညျ။ အရငျက သူမတောငျ့တနခေဲ့ရသော အထိအတှတှေ့ကေ ခုလို တကယျတမျး ကွုံလာရတော့ ထငျထားသညျထကျကို ကောငျးနပေမေယျ့ ကိုလတျက ကွမျးလှနျးတော့ ဂြာဂြာ မခံနိုငျဖွဈလာရခွငျးပါ … ။ ကိုလတျ စိတျဆိုးသှားမှာလဲ စိုးရိမျနမေိသညျ၊ .. အာရုံတှေ မြားလိုကျ ပါဘိတော့ ဂြာဂြာရယျ … ။ ကိုလတျက ဒီတခါတော့ ဂြာဂြာ့စကားကို နားထောငျသညျ။ နို့စို့နတော ရပျလိုကျပွီး ပကျလကျလေးဖွဈနသေော ဂြာဂြာ့ပျေါ တကိုယျလုံးထပျမိအောငျ လြှောကနဲ တကျလာကာ နရောပွောငျးယူလိုကျသညျ။
ဂြာဂြာ့နို့အုံထှားထှားကွီးတှကေ ကိုလတျရငျဘတျအောကျမှာ ပွားကနဲဖွဈသှားပွီး ဘေးဘကျကိုပငျ နို့အုံသားတှေ လြှံကလြာသညျ။ မကျြနှာခငျြး အအပျမိတှငျ ကိုလတျ နှုတျခမျးကွီးတှကေ ခုနကမှနှုတျခမျးဆိုးဆေး ပါးပါးပွနျတငျထားသညျ့ ဂြာဂြာ့နှုတျခမျး အိအိထှေးထှေးလေးတှကေို မလှတျတမျးဖမျးစုပျထားလိုကျသညျ။ အသာအယာဖှဖှလေး စုပျနမျးတာမြိုးမဟုတျပဲ ပါးစပျကို အကယျြဆုံးဟကာ တရှိနျထိုးစုပျပွဈလိုကျခွငျးမို့ နှုတျခမျးဒေါငျ့နားက မှဲ့နကျကလေးပငျ ကိုလတျ၏ စုပျနမျးသညျ့ စကျကှငျးထဲ ဝငျသှားရသညျ။ ကိုလတျက ဒီမှဲ့နကျလေးကိုကွညျ့ပွီး ဂြာဂြာ့ကို စှဲလမျးနခေဲ့ရ သူမို့ မှဲ့နကျလေးကို လြှာထိပျနှငျ့ အသာထိုးကာ ရကျရကျပေးနပွေနျသညျ။ ခံစားမှုက ထုတျဖျောပွောရနျ ခကျလှအောငျကို ဂြာဂြာ့အတှကျ ထူးခွားဆနျးသဈလှသညျ။ … အရငျဘဲ ကိုလှငျက ဒီမှဲ့လေးအကွောငျး ကဗြာတှဖှေဲ့ပွ တတျတာကလှဲလို့ ကိုလတျလို လကျတှဆေ့နျဆနျ မလှုပျရှားတတျခဲ့။ .. ခုတော့ ဒီမှဲ့လေးက ကိုလတျနှငျ့ ကမြှ ဂြာဂြာ့အတှကျ အဓိပ်ပါယျ ပိုရှိသှားရပွီ။
ကိုလတျကွမျးသမြှ အံကွိတျခံရငျး ဂြာဂြာ တလူးလူးတလှနျ့လှနျ့ ဖွဈနရေသညျ။ နှဈယောကျသား တကိုယျလုံး ထပျကပျမိနသေညျမို့ အောကျပိုငျးခငျြးလညျး ကပျနမေိသညျဖွဈရာ ကိုလတျ လီးတံကွီးက ဂြာဂြာ့ဆီးခုံလေးနှငျ့ ပေါငျတံဖွိုးဖွိုးနှဈခြောငျးကွားတှငျ ညပျနသေညျ။ ဒီတော့ ဇကျကိုဖိခုပျြ ထားခံရသော မွှတေကောငျလို ကိုလတျလီးကွီးက ဒေါသတကွီး ရုနျးကနျနရော ဂြာဂြာ့ခကျြကောငျးနရော လေးတှကေို လြှောကျပွီးပှတျတိုကျထိုးဆှနသေလိုဖွဈနရေသညျ။ .. ဂြာဂြာ မနနေိုငျတော့။ .. ခံခငျြလာပွီ။ ‘ ဟငျ့ ဟငျ့ … လုပျပါတော့ ဆရာရယျ … ဂြာဂြာ မနနေိုငျတော့လို့ပါ … ‘ အရှကျကို ဘေးခြိတျပွီး ဂြာဂြာလေး တောငျးပနျရတော့သညျ။ .. ပွောခလြိုကျမိပွီးမှ ကိုယျ့စကားကိုယျပွနျရှကျမိတော့ မကျြနှာလေးက ရဲတှတျသှားသညျ။ ကိုလတျက မကျြနှာခငျြးခှာလိုကျပွီး ခေါငျးထောငျကာ ဂြာဂြာ့ရှကျမကျြနှာရဲရဲလေးကို အရသာခံကွညျ့နေ ပွနျ၏။
ကိုလတျမကျြနှာကွီးက ပွုံးပွုံးကွီးလုပျနရော ဂြာဂြာ သီးမခံနိုငျတော့ပဲ ကိုလတျနှာခေါငျးကွီးကို လိမျဆှဲ ပွဈထညျ့လိုကျမိသညျ။ .. ‘ အား … နာတယျ ဂြာဂြာရဲ့ … ‘ ‘ သွျော … သူ့ကတြော့ နာတတျတယျ … သူမြားကတြော့ မနာတတျတာကနြတောပဲ .. ကိုငျလိုကျညှဈ လိုကျတာမြား ကိုယျခငျြးမစာ … ဟှနျး .. ‘ ‘ ကောငျးတော့ ကောငျးတယျမဟုတျလား ဂြာဂြာ ရဲ့ …. ‘ ‘ သှားပါ .. ဆရာ့ကိုတော့ ကွောကျတောငျလာပွီ .. အတှအေ့ကွုံက ဘယျလောကျတောငျ စုံထားလဲမသိ’ ဂြာဂြာ့ခဈြမကျြစောငျးလေးက ကိုလတျရငျကို ကလိကလိ ဖွဈစသေညျ။ ‘ အဲလို အတှအေ့ကွုံစုံလို့လဲ ကိုယျတကယျခဈြတဲ့ ဂြာဂြာ့ကို ရအောငျဖနျနိုငျတာပေါ့ … ဟုတျဖူးလား .. ‘ ‘ ကဲပါ … ဟုတျပါတယျ .. ဆရာကွီးရယျ … လုပျမှာလဲလုပျပါဦး .. ဒီက မိနျးကလေးတနျမဲ့တောငျးပနျ နရေတာ အားနာပါဦး ရှငျရယျ … ‘ ‘ အောရိုကျ … ‘ ကိုလတျက ခေါငျးကို ဆတျကနဲ တခကျြငွိမျ့လိုကျသညျ။
ဂြာဂြာနှငျ့သူနှငျ့က ရငျညှနျ့ကနေ ဟိုးအောကျအထိ တောကျလြှောကျဖိကပျနသေညျမို့ ဂြာဂြာ့ခွသေလုံးလေးတှကေို ကိုလတျခွဖေမိုးတှကေ ခြိတျလိုကျပွီး ဂြာဂြာ့ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ကားကားလေးဖွဈသှားအောငျ အသာဆှဲဖွဲခလြိုကျသညျ။ ကားထှကျသှားသော ဂြာဂြာ့ခွထေောကျလေးတှပေျေါမှာ ကိုလတျ ရဲ့ ခွထေောကျနှဈခြောငျးက အလိုကျသငျ့ ဖိကပျပါသှားသညျ။ .. နှဈယောကျသား အပျေါပိုငျးတှကေ ထိကပျ နကွေသလို ပေါငျတံတှေ ခွထေောကျတှကေ ကားထှကျလြှကျသား တောကျလြှောကျ ထိကပျနကွေသညျ။ ဆီးခုံခငျြးလဲ ထိကပျနကွေဆဲ။ … ဒီပုံစံက ကိုလတျအလှနျ နှဈသကျသညျ့ ပုံစံ … ပကျလကျလုပျတာခငျြးတူတူ လှကွေီးထိုးရိုးရိုးပုံစံထကျ မိနျးကလေးဘကျက ညှဈအားကိုပိုကောငျးစသေညျ့ အနအေထားမြိုးဖွဈသညျ။ ဒူးထောငျ ပေါငျကားပေးရမှာ ရှကျတတျသော မိနျးကလေးတှေ အတှကျလဲ အဆငျပွသေညျ။
ထိုအနအေထားအတိုငျး နရောယူလိုကျပွီးသညျနှငျ့ ကိုလတျ ခါးကို အသာကွှလိုကျသညျ။ စောစောက ပေါငျတံတှကွေားတှငျ ညပျနရေသော ကိုလတျ လီးတံကွီးက ကွှားကွှားရှားရှား ထောငျထလာ လသေညျ။ .. ကိုလတျက လကျတဖကျကိုအောကျလှိုပြွီး သူ့လီးကွီးထိပျနှငျ့ ဂြာဂြာ့ စောကျဖုတျလေး အ၀ တညျ့သှားအောငျ တပေ့ေးလိုကျသညျ။ တညျ့ပွီဆိုသညျနှငျ့ လကျပွနျသိမျးကာ ခါးကိုပွနျဖိခလြိုကျတော့၏ ‘ ဗွှတျ …… ‘ ‘ အား ဟားဟား …. သပွေီ သပွေီ .. ‘ စောစောကတော့ သူပဲ လုပျပါတော့ဆိုပွီး တကယျလုပျတော့ ဂြာဂြာ ခေါငျးကိုခါရမျးကာ ကိုလတျရငျဘတျကွီးကို အတငျးတှနျးပဈနသေညျ။ … မိနျးကလေးတှမြေား မူယာမာယာကိုမြားတယျဆိုတာ ဒါမြိုးထငျပါ့ ။
ရညျးစားရှိနှငျ့ပွီးသားပမေယျ့ ပါကငျမဖှငျ့ရသေးသော အပိုလြေးမို့ ဂြာဂြာ့စောကျဖုတျလေးက တငျးကွပျစီးပိုငျနကော အဝငျမလှယျလှပဲ ဖွဈနသေညျ။ ကိုလတျလဲ အခွအေနအေရ ခါးကိုအဆုံးဖိမခသြေးပဲ ဖွေးဖွေးခငျြး ဖိနှဲ့ကာ သှငျးနလေိုကျ၏။ ‘ ဗွိ .. ဗွိ .. ‘ ‘ အား … အား … နာတယျ .. နာတယျ ဆရာရဲ့ … တျောပါတော့ … အိုး … ‘ ကိုလတျက တဖွညျးဖွညျးခငျြးနှဲ့သှငျးနသေဖွငျ့ ဂြာဂြာ အျောနသေညျ့ကွားမှပဲ ကိုလတျ လီးတံကွီးက တှငျးပေါကျထဲ မွှဝေငျသလို တအိအိထိုးဝငျနသေညျ။ .. သို့ပမေယျ့ လမျးတဝကျလောကျအရောကျမတော့ အထဲမှ အတားအဆီးလေးတခုက ရှဆေ့ကျမတိုးရနျ အာခံနလေသေညျ။ .. သွျော .. ဂြာဂြာ အပိုစြငျလေး ရှိသေးတာပဲ .. သခြောသှားပွီလေ။ ကိုလတျက ရှီကနဲ လတေခကျြခြှနျလိုကျသညျ။
ထို့နောကျ ခါးကို အသာပွနျမတျလိုကျပွီး အံတခကျြတငျးတငျးကွိတျကာ ဂြာဂြာ့အတှကျ ဟိုအရငျကတဲက မြှျောမှနျးသိမျးဆညျးထားခဲ့ရသမြှ အားတှအေငျတှကေို အကုနျထုတျသုံးကာ ဆောငျ့ခလြိုကျတော့သညျ။ ‘ ဗွဈ … ဖောငျး … ‘ အပိုစြငျအမှေးလေးက ဗွဈကနဲပေါကျ … ပွီးလဲပွီးရော အရှိနျနှငျ့ထိုးဝငျလာသညျ့ ကိုလတျလီးကွီးက ဂြာဂြာ့စောကျဖုတျထဲ အဆုံးထိအောငျ ဝငျသှား .. ဆီးခုံခငျြးက ဖောငျးကနဲဆောငျ့မိ … အဖွဈအပကျြတှကေ တဆကျတညျး ဖွဈပှားသှားသညျ။ ဂြာဂြာ အမယျလေး တရနျပငျ အခြိနျမရလိုကျတော့။ … ပါးစပျလေး အစှမျးကုနျဟကာ ခေါငျးလေးနောကျပွနျလနျထှကျသှားစဉျမှာပငျ ကိုလတျက အောငျလံစိုကျထူ လိုကျပွီးသား ဖွဈသှားတော့သညျ။
ကိုလတျလီးကွီး၏ ကြောဘကျမှ ဂျေါလီလေးနှဈလုံးကလဲ တာဝနျကစြှောဖွငျ့ ဂြာဂြာ့အစိလေးကို ဒလကွမျး ပှတျဆှဲခသြှားရာ ဂြာဂြာ့တကိုယျလုံး ကွကျသီးတှေ တဖွနျးဖွနျးထသှားရတော့သညျ။ … သွျော .. လူ့ဘ၀ အရသာဆိုတာ ဒါပါလား နျော … ။ အောငျလံတဆုံးစိုကျပွီးသညျနှငျ့ ကိုလတျက ဂြာဂြာ့ စောကျဖုတျထဲမှ သူ့လီးကို ပွနျဆှဲမထုတျသေးပဲ ဆကျကာ ဖိထားသညျ။ တအငျးအငျး ညဉျးသံလေးတှနှေငျ့အတူ ဂြာဂြာ့ခွထေောကျ ပေါငျတံနှငျ့ဖငျဆုံကွီးတှကေ တရှရှကွှတကျ ရုနျးကနျနကွေသညျ။ ကိုလတျက ကွှခှငျ့မပေးပဲ အားထညျ့ကာ ဇှတျဆကျဖိထားတော့ ဂြာဂြာ့တကိုယျလုံး သှေးတှေ ဆူပှကျတကျလာတော့သညျ။ .. အပိုမြှေးလေးပေါကျသှားလို့ နာဖို့တောငျ သတိမရနိုငျတော့။
အထဲက စောကျဖုတျ အတှငျးသားလေးတှကေ တလှုပျလှုပျတရှရှနှငျ့ ကိုလတျလီးကွီးကို ဆီးကွိုထှေးပှထေ့ားကွသညျ။ သှေးထဲသားထဲမှ ဆိမျ့တကျလာသော အရသာတှကေ ဂြာဂြာ့တကိုယျလုံးကို ဖုံးလှမျးသှားကွသညျ။ … သွျော … အလိုးခံရတာ ဒီလောကျအရသာရှိမှနျးသာကွိုသိရငျ ဂြာဂြာတို့ ဒီအရှယျအထိအောငျတောငျ မနပေဲ အစောကွီးကတညျးက ယောကျြားယူပွဈလိုကျပွီးသား ရှိရော့မညျ။ .. ခုလဲ နောကျတော့ မကသြေး ပါဘူးလေ … အရှယျက ခုမှ ၂၅ ရှိသေးတာပဲ။ .. ရှလြေှ့ောကျ ဘဝမှာ တဝကွီး အလိုးခံဘို့ အခြိနျတှေ အမြားကွီး ကနျြပါသေးသညျလေ … ။ ကိုယျ့အတှေးနှငျ့ကိုယျ ဂြာဂြာ မပှငျ့တပှငျ့လေး ပွုံးလိုကျမိတော့ ကိုလတျက မကျြမှောငျကုံ့သြှားသညျ။
သူကဖွငျ့ သနားလို့ တအားတောငျမဆောငျ့သေးပဲ ခနနှပျပေးထားတာကို မခြောက ဘာထငျနလေဲမသိ .. လို့ ကိုလတျက တှေးမိသှားသညျ။ ဒီလူ ဒါအကုနျပါပဲလို့မြား ထငျနရေော့သလား မပွောတတျ။ ဒီလောကျတောငျရှိလှတာ တှကွေ့သေးတာပေါ့။ … ကိုလတျ တလှဲတှေးမိသှားတာက ဂြာဂြာ့အကွိုကျဖွဈသှားသညျ။ ကိုလတျက စောစောက သနားခငျြ ညှာခငျြနသေညျ့စိတျတှကေို စှနျ့လှတျကာ အသားကုနျ ကြုံး လိုးတော့ သညျကိုး … ။ ဂြာဂြာကလဲ ဒါမြိုး အားရပါးရ အလိုးခံခငျြနပွေီမို့ ဆန်ဒနှငျ့လကျတှေ့ တထပျတညျးကသြှားရ လတေော့သညျပေါ့။ … ‘ ဖုံး ဖုံး .. ဖတျဖတျ … ‘ ‘ အား အ … အား အ … ‘ ကိုလတျဆောငျ့သံ နှငျ့ ဂြာဂြာ့နှုတျမှ အလိုလိုပှငျ့ထှကျလာသော ညဉျးသံလေးတှကေ အခနျးထဲမှာ စညျးဝါး မှနျမှနျ လှငျ့ပံနြသေညျ။ ပါကငျဖှငျ့ပွီးကာစလေးလဲဖွဈ … ဖရော့ချ ပုံစံ၏အားသာမှုကလဲ ကူညီနဆေိုတော့ ကိုလတျအတှကျတော့ အထိအတှကေ့ ထူးရှယျ ဖွဈနရေတော့သညျ။
ဆောငျ့ခလြိုကျတိုငျး အောကျမှ ဂြာဂြာ ရဲ့ စိတျထစရာ တငျဆုံကွီးတှကေ လမှေယေ့ာတခုအလား ပွနျပွနျကနျတငျပေးနကွေမှုကလညျး အရငျက လိုးခဲ့ဘူးသညျ့ ဘယျမိနျးကလေးတှနှေငျ့မှ မတူအောငျ အရသာထူးလှသညျ။ .. ပိနျပိနျပါးပါးလေးတှကေ ကိုယျဟနျကြော့သလေးဘာလေးနှငျ့ ခုလို အရသာမြိုးကြ ဘယျလိုမှ မပေးစှမျးနိုငျတာ ဘယျသူငွငျးခငျြကွ သေးသညျလဲ … ။ သွျော ဒီလို တငျဆုံကွီးမြိုးနှငျ့ ဂြာဂြာ့ကိုဖွုတျခှငျ့ လိုးခှငျ့ကွုံတာ သူကား ကုသိုလျ ထူးပစှေ။ ဂြာဂြာ့ကိုယျလေးက အောကျမှာ တလူးလူးတလိမျ့လိမျ့ဖွဈနတေိုငျး ရငျနှဈမှာကွားမှ နို့အုံအိအိကွီးတှကေလညျးပဲ တအိအိနှငျ့ ကိုလတျရငျဘတျကို လာရောကျပှတျသပျနကွေသညျမှာ ကိုလတျတော့ တညလုံးသာ ဒီလို နနေလေိုကျခငျြစိတျ ပေါကျမိတော့သညျ။
အားပွတျလို့ သခေငျြ သသှေားပလစေ့ေ လေ။ … ‘ ဂြာဂြာ အလိုးခံလို့ကောငျးရဲ့လားဟငျ ခံကောခံနိုငျရဲ့လား ….. ‘ ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျ မနားတမျးဆောငျ့လိုကျပွီးမှပဲ ကိုလတျက စကားမေးဖျောရတော့သညျ။ မခံနိုငျလို့ အသကျထှကျမညျ့သူသာဆို ဘယျနှဈခါလောကျ သပွေီးလောကျပွီလဲ မသိ။ .. ဂြာဂြာ့လို အိုးကောငျးမောငျးသနျ မို့သာ တျောတော့သညျ။ ‘ အား … ရှီး … ကောငျးတယျဆရာ … အလိုးခံနိုငျပါတယျ .. ဟို ဟိုလေ … ‘ ဂြာဂြာက စကားဆကျရ ခကျနသေညျ။ ‘ ပွောလေ ဂြာဂြာရဲ့ .. ‘ ‘ အဟငျး … ဂြာဂြာ ရှကျလို့ .. ပွောရမှာ …. ‘ ‘ သွျော .. ဂြာဂြာရယျ .. ဒီအခွအေနရေောကျမှမြား ရှကျနရေသေးတယျ .. ပွောသာပွော .. ‘ ‘ ဟို ဟိုလေ .. ဒီပုံစံနဲ့ အလိုးခံရတာ အားမရသလိုပဲ ဆရာရယျ … ‘ အလဲ့ … မရှခြေောက အလာကွီးပဲ။
ဟုတျတော့လဲ ဟုတျပါသညျ .. ဒီ ဖရော့ချ ပုံစံက ယောကျြားလေးတှေ အတှကျတော့ ညှဈအားကောငျးကောငျးပိုခံစားရသညျ။ ပေါငျတံနှငျ့ခွသေလုံးလေးတှေ၏ အထိအတှကေို့ပါ တပွိုငျတညျး ခံစားရသညျရောကွောငျ့ ပိုဖီးလျလာသျောလညျး မိနျးကလေးတှအေတှကျကတြော့ဖွငျ့ အဝငျမနကျလှသဖွငျ့ အထဲမှာ နငျ့နငျ့နဲနဲ မရှိလှသောကွောငျ့ တခို့မြိနျးကလေးတှကေ လုံးဝ အားမရ ။ အထူးသဖွငျ့ စိတျထနျသော သှေးသားဆူသော ဂြာဂြာ့လို မိနျးကလေးတှအေတှကျတော့ မထိတထိလိုသာပဲ ဖွဈနရေသညျပေါ့။ … ကဲလေ … ပရိသတျက တောငျးဆိုလာမှတော့ ပုံစံပွောငျးကွယုံပေါ့။ … ‘ ကဲ … ဒါဆို ပုံစံပွောငျး လိုးကွမယျ … ဟုတျပွီလား … ‘ ‘ ဟုတျ … ‘ ကိုလတျက သူ့ဟာကွီးကို ဂြာဂြာ့အထဲမှ ဇတျကနဲ ဆှဲနှုတျလိုကျ၏။
ဂြာဂြာ့ရငျထဲ ဟာပွီးကနျြခဲ့သညျ။ … အသာအယာနှုတျတာမဟုတျပဲ ဇတျကနဲဆှဲနှုတျတာဆိုတော့ နှုတျခမျးသားလေးတှတေောငျ အပွငျကို စှိကနဲ စူထှကျ ပါသှားရပွီးမှ တဖွညျးဖွညျး ပုံမှနျနရော ပွနျရောကျသှားရသညျ။ ‘ ကဲ .. ဂြာဂြာ ခနထဦး … ပွီးတော့ လေးဘကျလေး ထောကျပေး … ‘ ဂြာဂြာက စှကေ့နဲထကာ လေးဘကျ ကြော့ကြော့လေး ထောကျလိုကျသညျ။ မွနျမွနျလုပျမှ .. အထဲမှာနရေတာ ဟာလှပွီ … ။ ‘ အဲ … ဟုတျပွီ .. ခါးလေးကို နဲနဲအောကျနှိမျ့ခလြိုကျပွီး တငျပါးကွီးတှကေို နောကျကို ကော့ထုတျပေး ‘ ကိုလတျက အပီအပွငျကို လမျးညှနျနသေညျ။ လကျကလဲ ဂြာဂြာ့ခါးသိမျသိမျလေးကို လာဖိပေးကာ ပုံစံကြ အောငျ လုပျပေးနလေိုကျသေးသညျ။ တငျပါးအိအိကွီးတှကေိုလဲ နောကျကို ဆှဲကော့ထုတျပေးလိုကျသေး၏။ ‘ အဲ .. ဟုတျပွီ … ရပွီ .. ‘ ဂြာဂြာ့ပုံစံက ဒီလို စတိုငျလျ နှငျ့လဲ အရမျးကို ဆှဲဆောငျအား ကောငျးနလေသေညျ။
ကွညျ့လိုကျပါဦး … လကျလေးက ခပျယိုငျယိုငျလေးထောကျထားသညျ။ .. သေးသိမျသောခါးလေးက ခုလိုလေးဘကျထောကျ နတေော့ ပိုပွီးတော့ကို သေးသှယျသှားသလားထငျရသညျ။ တငျသားကားကားကွီးတှကေလဲ ပိုပွီး စှငျ့တကျလာကွသညျ။ .. ရငျဘတျအောကျမှာတော့ ဗူးစငျမှ ဗူးသီးကွီးတှလေို နို့ကွီးနှဈလုံးက တှဲလောငျး ကနြကွေသညျမှာ အသဲယားစရာ … ။ အဲ .. ကိုလတျ ဒီလောကျပှဲကွမျးပဈလိုကျသဖွငျ့ ဂြာဂြာ့ခေါငျးမှ သူနာပွုခေါငျးဆောငျး လေးကတော့ ပွုတျကနြပွေီးတော့ ဆံပငျလေးတှလေဲ ကလဈတှေ ညှပျတှပွေုတျပွီး ဖရိုဖရဲ ဝဲကနြရေသညျပေါ့ …။
ဒါပမေယျ့ ဒီလို ဖရိုဖရဲလေး ဖွဈနတောကိုက တမြိုးဆှဲဆောငျအားတိုးကာ ရမကျတှေ ပိုထနျစရာ ဖွဈနရေတော့သညျ။ … ဖငျဆုံကွီးနှဈခွမျးကွားမှ ပွူးထှကျနသေော စောကျဖုတျ နှုတျခမျးသား တှကေတော့ ကိုလတျကို လာလှညျ့ပါ လိုးလှညျ့ပါ ဆျောလှညျ့ပါနှငျ့ ချေါနကွေပွီ။ … ကိုလတျက ဂြာဂြာ့ ရငျခုနျစရာ အိုးကွီးနောကျမှာ ကပျပွီး ဒူးထောကျခလြိုကျ၏။ ငယျဖျော လီးတံကွီးက တာဝနျကို ဦးလညျမသုနျ ထမျးရှကျဖို့ တယမျးယမျးနှငျ့ အသငျ့ဖွဈနပွေီ။ … ကိုလတျက ပွူးထှကျနသေော ဂြာဂြာ့ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားလေးတှအေဝကို သူ့လီးကွီး အသာတလေို့ကျ၏။ တျောတျောနှငျ့ ထိုးမသှငျးသေးပဲ စောကျဖုတျ အဝမှာတငျ တရှရှပှတျကာ လကျတှကေလဲ ဂြာဂြာ့တငျပါးကွီးတှကေို အသာအယာ ပှတျသပျလိုကျ ညှဈနယျလိုကျ လုပျပေးနသေညျ။ ဂြာဂြာ့တငျဆုံကွီး တယမျးယမျးဖွဈလာ တော့သညျ။ မွနျမွနျမြား ဝငျသှားလို ဝငျသှားငွား ကိုလတျရှိရာ နောကျဖကျကို ဖငျဆုံကွီးက ဇှတျတိုး လာသညျ။ .. ကိုလတျက ညဈကယျြကယျြလေး ပွုံးလိုကျမိ၏။ မယျခုမြှျော .. ဆိုတာ ဒါမြိုး ဖွဈမှာပေါ့။
‘ ဗွှတျ ‘ ‘ အား ………….. ‘ ကိုလတျက အစာလိုကျဟပျသလို တယမျးယမျးဖွဈနသေော ဂြာဂြာ့ဖငျဆုံကွီးကို ဆတျကနဲ လကျနှဈဖကျနှငျ့ အားရပါးရ ဆုပျကိုငျလိုကျယငျး တခြိနျတညျးမှာပငျ စံခြိနျလှနျ ကိုလတျလီးကွီးက ဂြာဂြာ့ ပါကငျဖှငျ့ပွီးစ စောကျဖုတျလေးထဲ အဆုံးထိတိုငျ တဟုနျထိုး ထိုးဝငျသှားတော့ ဂြာဂြာ ငယျသံပါအောငျ အျောလိုကျမိသညျ။ တငျပါးကွီးတှကေ တဆတျဆတျတုနျကာ ခါယမျးထှကျသှား၏။ ‘ အား … ဆရာရယျ .. အထဲမှာ သားအိမျကိုထိုးမိနပွေီ .. အား .. အား … ‘ ဂြာဂြာ့ဖငျကွီးက ရမျးထှကျသှားပမေယျ့ ကိုလတျက သူ့ဟာကွီးကို ကြှတျမထှကျသှားအောငျ အတငျးဖိပွီး ထိုးထညျ့ထားတော့ အထဲက ဂြာဂြာ့သားအိမျ အဝလေးကို ကိုလတျထိပျဖူးကွီးက ဒလကွမျးထိုးဖိနှိုးဆှပေး သလို ဖွဈသှားရသညျမို့ ဂြာဂြာ မကျြရညျတှပေငျ လညျတကျလာအောငျ ထိထိမိမိ ခံစားလိုကျရသညျ။
စောစောကပုံစံနှငျ့ အားမရပါဆိုသညျ့ မိဂြာဂြာတယောကျ အားရယုံမက အီဆိမျ့ပွီးကို တကျသှားရလပွေီ။ ခါးလေးက ပိုညှတျကသြှားသညျ။ .. ရှမှေ့ာထောကျထားသော လကျလေးတှပေါ ခှကေခြငျြသလိုလို ယိုငျ ထိုးသှားသညျမို့ မကျြနှာနှငျ့ကွမျးပွငျမဆောငျ့မိအောငျ မနဲအားတငျးကာ ပွနျပွီး မတငျလိုကျရ၏။ .. ခုလို ဂြာဂြာ ခှခှေလေေးလဲကလြုလုဖွဈသှားပွီးမှ အတငျး အားခဲကာ လကျကလေးတှထေောကျပွီး ပွနျရုနျးထလာပုံက ကိုလတျမကျြစိထဲမှာ အလှနျကိုကွညျ့ကောငျးသှားရသညျ။ ရမကျတှေ ပိုထနျလာသညျ။ သူပွောလို့ ပုံစံပွောငျးပေးထားရတာပဲ .. ခှယေိုငျရုံမကလို့ ပုံလကျြပဲ လဲကကြ .. သနားနစေရာ မလို ပါဘူးလေ ဆိုသောစိတျရိုငျးတှေ ဝငျလာသညျ။
ကိုလတျစိတျတှကေို လှတျပေးလိုကျမိတော့သညျ။ ….. ကိုလတျက ဂြာဂြာ့ ခါးသိမျသိမျလေးကို လကျနှဈဖကျလုံးနှငျ့ စုံကိုငျဆှဲထိနျးထားလိုကျသညျ။ .. ပွီးတော့ ဂြာဂြာ့တငျပါးအိအိကွီးတှေ လှိုငျးလေးတှထေကာ တုနျတုနျတကျသှားသညျအထိကို အားရပါးရ ပွဈပွဈပွီး ဆောငျ့ခနြလေိုကျတော့သညျ။ .. ပထမတော့ ဂြာဂြာ ငါးရံ့ပွာလူး ခါယမျးနသေေးသညျ။ … သို့ပမေယျ့ ခနကွာတော့ အထာကသြှားပွီး သူမကိုယျသူမ ဟနျခကျြညီအောငျ ထိနျးနိုငျသှားသညျ။ ခှလေဲကမြညျ့ အရိပျအယောငျ မရှိတော့ … ။ ကိုလတျ ဆောငျ့ခကျြနှငျ့အညီ စညျးခကျြကကြ သူမတငျပါးကွီးတှကေို နောကျပဈပဈပေးပွီး တကျညီ လကျညီလေးပငျ လှုပျရှားပေးလာလသေညျ။ ခုမှ ဒီပုံစံနှငျ့ အလိုးခံရတာ ဂြာဂြာ အထာကသြှားပွီ။ အရသာလဲ အကွီးအကယျြ တှသှေ့ားရပွီ။ … ဂြာဂြာ နောကျပေး ပေးတတျလာတော့ ကိုလတျလဲ ဆောငျ့ရတာ အရသာပိုတှလေ့ာသညျ။
တကယျပါ … သူအရငျဖွုတျခဲ့ လိုးခဲ့ဘူးသညျ့ မိနျးကလေးတှထေကျကို ဒီဆရာမလေး ဂြာဂြာ့ဆီမှာ ပွောပွရ ခကျလှသော ဆှဲဆောငျအား တခုခု ရှိနတောအမှနျ ။ .. နောကျထပျ မိနျးမတှေ ရာခြီလိုးလို့ကော ဒီလို စိတျပါလကျပါ ငွိတှယျမှုမြိုး ရမညျဟု မညျသူ အာမခံနိုငျပါမညျနညျး။ .. တသကျတာအတှကျ သူမကို အပိုငျဖွုတျခှငျ့ လိုးခှငျ့လိုငျစငျရရှိအောငျ လကျထပျယူလိုကျတော့မညျဟု ကိုလတျ ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျမိသညျ။ ဒီအတှေးလေး ဝငျလာတော့ ဂြာဂြာ့ကိုလိုးရတာ ပိုကွညျနူးစရာကောငျးလာသညျ။ ကွိုကျကုနျးတယောကျကို လိုးနရေသလိုမြိုး မခံစားရတော့ပဲ ဘဝကွငျဖျောလောငျး ကောငျမလေးကို မွတျမွတျနိုးနိုး လိုးနရေသလိုဖွဈလာပွီမို့ ကိုလတျခံစားမှုတှကေ ပိုမို ဆနျးသဈလာသညျ။ ခံစားမှုတှေ ဆနျးသဈလာတော့ ဆောငျ့ခကျြတှကေလဲ ပိုပွငျးလာသညျ။ သုတျကလဲ ထှကျကိုမလာတော့။ အခြိနျတှေ ဘယျလောကျကွာသှားသညျမသိတော့ … ။
ခံနရေသော ဂြာဂြာတော့ မွော့နလေပွေီ။ … စောစောက ကိုလတျ ဘာဂြာပေးထားစဉျက နှဈခြီသုံးခြီ ပွီးထားပွီးသားမို့ ဒီတခြီကတြော့ တျောတျောနှငျ့တော့ မပွီးနိုငျသေး … ။ ကွာတော့ ဒူးတှေ နာလာပွီ။ ရှမှေ့ာထောကျထားရသော လကျလေးတှလေဲ ညောငျးလှပွီ။ .. ကိုလတျကတော့ ဘယျကမ်ဘာအထိ ကို ဆကျဆောငျ့နဦေးတော့မညျမသိ။ .. သို့ပမေယျ့ ကိုလတျက မိနျးမမြိုးစုံနှငျ့ အတှအေ့ကွုံစုံထားသူမှနျး ဂြာဂြာ သိနတေော့ သူမကမြှ ခံနိုငျရညျမရှိလို့ အထငျခံရမှာ တနညျးအားဖွငျ့ အထငျသေးသှားမှာလဲ ဂြာဂြာ ကွောကျသညျ။ .. ကိုလတျစှဲသှားမှ သူမ ဘဝလဲ ကွိုကျကုနျးမဖွဈရပဲ တညျတညျတနျ့တနျ့ ပှဲတကျမယားဖွဈခှငျ့ရမှာ မဟုတျလား။ .. ဒီတော့လဲ ဂြာဂြာ့မှာ ကိုလတျ လိုးသမြှ ဆောငျ့သမြှကို အံကိုတငျးတငျးကွိတျခံယငျး အဝတျပုံကွီး တခုလို ပြော့ခှမေကသြှားအောငျ အစှမျးကုနျ တောငျ့ထားရရှာလတေော့သညျ။ နဖူးဆံစပျမှာလဲ ခြှေးဥလေး တှပေငျ သီးထနပွေီ။ ကိုလတျကတော့ ခါးသိမျသိမျလေးကို စုံကိုငျညှဈကာထိနျးထားရငျး ဆောငျ့လိုကျ၊ .. တခြီတခြီကပြွနျတော့ ဗူးသီးကွီးတှလေို တှဲလောငျးကကြာ ဗရမျးပတာ ခါယမျးနသေော ဂြာဂြာ့နို့အုံကွီးတှကေို ရှကေို့ကိုငျးပွီး လှမျးဆုပျနယျလိုကျနှငျ့ အပီအပွငျကို လိုးနလေတေော့၏။
တခါတခါကပြွနျတော့လဲ ဂြာဂြာ့ကြောပွငျ ဖှေးဖှေးလေး ပျေါမှာ အသာမှောကျခကြာ ဂြာဂြာ့ကြောလေးနှငျ့ သူ့ပါးတှကေပျထားရငျး အမောဖွသေလို လုပျကာ အသာညှောငျ့လိုး နတေတျပွနျသေးသညျ။ ခနလောကျ အဲဒီလို ညှောငျ့လိုးပွီးလို့ သကျလုံပွနျကောငျး သှားသညျနှငျ့ နဂိုအတိုငျး အသားကုနျ ပွနျဆောငျ့ လိုးပွနျတော့၏။ ဂြာဂြာ့မှာသာ နားခှငျ့မရ .. အမောလေးမှ ဖွခှေငျ့မရပဲ တလစပျကို အလိုးခံနရေလတေော့သညျ။ … ဒီပုံစံပွောငျးလိုးတာ နာရီဝကျကြျောလာပွီထငျသညျ။ .. ဂြာဂြာလဲ မကျြလုံးတှပွော ခေါငျးတှေ မူးလာပွီ။ စောစောကလို ရငျခငျြးအပျ ခွထေောကျတှကေား အနအေထားလေးမှာ အသာနှပျမနခေဲ့မိတာ မှားလိုကျလေ ခွငျး လို့ ခုမှ နောငျတရမိသညျ။ .. သို့ပမေယျ့ ခုခြိနျမှတော့ ဘာမှ မတတျနိုငျတော့ပွီပဲ။ … တဖွညျးဖွညျး ခံရငျးခံရငျးနှငျ့ ဂြာဂြာ့စောကျဖုတျလေးထဲမှ ခံစားမှုတှေ ပွနျပွီး ဆနျးသဈလာသညျ။ .. ဖီလငျတှေ အပွတျတကျလာသညျ။
အူထဲအသညျးထဲမှ တလှိုကျလှိုကျ ဖွဈလာသညျ။ နို့အုံကွီးတှေ တငျးထလာပွီး နို့သီးခေါငျးလေးတှကေ ကြိနျးစပျကာ ထောငျမတျခြှနျကော့ လာကွသညျ။ .. ဂြာဂြာ အသကျရှုတှေ ပိုမွနျလာသညျ။ .. ပွီးတော့မညျ နောကျတခြီ … ။ ‘ အ .. အား … ဆရာရယျ .. ပွီးပွီ ပွီးပွီ .. ဂြာဂြာပွီးပွီ … ကောငျးလိုကျတာ .. အိုး မိုငျဂေါ့ဒျ … ‘ ဂြာဂြာ့စောကျဖုတျလေးထဲမှ အရညျတှေ ဖှီးကနဲ ပနျးထှကျလာသညျ။ ကိုလတျလီးကွီးနှငျ့ ကွပျသိပျပွညျ့နသေညျ့ကွားထဲမှ အတငျးကို တိုးထှကျစီးကကြုနျ၏။ ဂြာဂြာ့အသံလေးက တုနျယငျစှာအဖြားခတျရငျး တိမျဝငျသှားတော့သညျ။ ဂြာဂြာ ဘယျလိုမှ မတောငျ့ထားနိုငျတော့ .. အားတှအေငျတှေ အကုနျ ကုနျပွီ။ ကိုလတျလီးကွီး တပျလြှကျတနျးလနျးနှငျ့ပငျ လကျပဈခွပေဈကို ဟပျထိုးလဲကြ သှားရရှာလတေော့သညျ။ ကိုလတျလဲ မပွီးသေးသော သူ့လီးကွီးကို ဂြာဂြာ့အထဲ စိမျထားရငျးနှငျ့ ဂြာဂြာ့အပျေါ အသာထပျလြှကျ မှောကျခကြာ မှိနျးနလေိုကျလတေော့၏။ ခနနလေို့ ဂြာဂြာ အမောပွလြှေငျတော့ နောကျတပှဲနှဲရနျ အဆငျသငျ့ပွငျ စောငျ့စားရငျး ဂြာဂြာ့ လညျဂုတျသား ဝငျးဝငျးလေးတှကေိုသာ ခပျဖှဖှလေး ငုံခဲနလေိုကျမိပါတော့သတညျး … ပွီးပါပွီ။
ညနေ လေးနာရီခွဲပြီးနေပြီ။ … ကိုလတ်တယောက် အိမ်ပြန်ရန် ဆေးရုံလှေကားမကြီးမှ ဆင်းတော့မလို့ဟန်ပြင်နေစဉ် နောက်ဖက်မှ အသံလေးတခုက ရုတ်တရက်ပေါ်လာ၏။ ‘ ဆရာ ပြန်တော့မလို့လား … ဟင်းဟင်းဟင်း .. ‘ ပြန်တော့မလားမေးတာ ဘာများ ရီစရာ ပါနေသည်မသိ။ … ကိုလတ်စိတ်ထဲ နဲနဲ အစာမကြေဖြစ်သွားမိသည်။ .. လှည့်ကြည့်စရာမလိုပဲ သိနေသည်။ အသံရှင်လေး မည်သူဆိုတာ။ … ဘယ်သူရှိရမည်လဲ … သူနာပြုအသစ်လေး ဂျာဂျာ ပေါ့။ … သူမက မြန်မာမဟုတ် .. ။ တိုင်းရင်းသူလေး .. ။ နာမည်အပြည့်အစုံက အယ်လ်ကွန်ဖန်ဂျာ တဲ့ ….. ။ သို့ပေမယ့် တဆေးရုံလုံးက သူမကို ဂျာဂျာ လို့ပဲ ခေါ်ကြသည်။ … တွေးကြည့်လျှင် အဓိပ္ပါယ်က ဘာလိုလိုကြီး … ။ ကိုလတ်စိတ်ထဲတော့ လွန်ခဲ့သည့် သုံးလလောက်က သူတို့ဆေးရုံကို ဒီဆရာမလေး ရောက်လာပြီး သူတို့ဝါ့ဒ်ထဲရောက်လာခဲ့ချိန်ကစပြီး သူမနာမည်ကို ဂျာဂျာ လို့ ခေါ်လိုက်ရတိုင်း စိတ်ထဲမှာ သူမကို ဘာဂျာပေးချင်စိတ်တွေသာ တဖွားဖွားပေါ်ပေါ်လာနေတော့ ခက်လှသည်။
နာမည်အပြည့်အစုံခေါ်ဘို့ကလဲ ခေါ်ရခက်လှတော့ ဒီအတိုင်းပဲ သူများတွေခေါ်သလို အတိုပဲ ခေါ်နေရတော့သည်။ ထားပါတော့ ဂျာဂျာ ပဲ … ။ အနှီ ဂျာဂျာသည် လှတာတော့ တော်တော့ကိုလှသည်။ .. ဆွဲဆောင်မှုကလည်း ကောင်းသည်။ .. မျက်နှာလေးကြည့်မလား … ဖြူနုနေသည်။ .. မျက်ခုံးလေးတွေက တန်းတန်းလေး .. ။ နှာတံလေးက ပေါ်ပေါ် .. ။ တခြားတိုင်းရင်းသူတွေနှင့်မတူပဲ မျက်ဆံလေးကလဲ နက်နက်လေး … ။ ပါးပြင်လေးတွေက ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေလို ရဲရဲလေးတွေ … ။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေက ဖူးရွနေသည်။ .. အောက်နှုတ်ခမ်းလေးက တွဲတွဲလေး … ။ မေးစေ့နှစ်ခွလေးအပေါ်နားမှ မှဲ့လေးကတော့ သူမမျက်နှာကို ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးထားသည့်အရာလေးပဲဖြစ်မည်။ … ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကြည့်ဦးမလား … ဘာမှ အပြစ်ပြောစရာမရှိ။ … ငါးပေသုံးလက်မဆိုသော အရပ်လေးက နဲနဲတော့ ပုသည်ပြောလို့ရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ကြည့်ကောင်းသော အရပ်ထဲမှာ ပါနေသည်။ … ခါးလေးက သေးသေးလေး။
ကိုလတ်ဖတ်ဖူးသည့်ဆောင်းပါးများအရ ငါးပေသုံးလက်မရှိသော မိန်းကလေးတယောက်အတွက် စံချိန်မှီ ခါးအတိုင်းက ၂၁ လက်မခွဲ ရှိရမည်ဟု ဖတ်ဖူးသည်။ .. မယ်ရွေးပွဲတွေအကြောင်း လိုက်လေ့လာတုန်းက ဖတ်ဖူးထားတာပါ … ။ ခု ဂျာဂျာ့ခါးက ၂၁ တောင်နဲနဲ လျော့ဦးမလားမသိ။ .. ခါး ၂၁ ဆိုလျှင် ရင်က ၃၁၊ တင်က ၃၃ အနည်းဆုံးရှိရမည်တဲ့ … ဒါလောက်ရှိမှ စံမှီမည်။ … ဒီ့ထက်ကွာခြားချက်ပိုလေလေ ပိုကြည့်ကောင်းလေလေပေါ့ … ။ သို့ပေမယ့် တခိျု့ ကွာခြားချက်အရမ်းကြီး များသွားလွန်းလျှင်လည်း မဆံ့မပြဲကြီးလိုဖြစ်ပြီး မျက်စိထဲ အမြင်ရိုင်းသွားတတ်ပြန်သည်။ … ကိုလတ် ပေကြိုးနှင့်တော့ သွားမတိုင်းကြည့်ဖူးပါ … ဒါပေမယ့် မျက်မှန်းအတိုင်းအရတော့ ဂျာဂျာ့ ရင်က ၃၂လောက် .. တင်က ၃၃ခွဲ လောက်ရှိလိမ့်မည်မှန်း သိနေသည်။ .. မျက်စိထဲ မြင်ယောင်သာ ကြည့်ကြပါတော့။ .. ထိုခါးကို လေတိုးရင် ကျိုးမှာ အလွန်စိုးတယ်ဆိုသည့် ဆရာမြို့မငြိမ်းသီချင်းက ဂျာဂျာ့ကိုများ ကြည့်ပြီး စပ်ထားသလား ထင်ရသည်။
မဆံ့မပြဲကြီးမျိုးလည်း ဖြစ်မနေ .. သူ့ဟာနှင့်သူ ကျော့ကျော့မော့မော့လေးနှင့် ကြည့်လို့ကောင်းလှသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် လှသလို ဂျာဂျာက ဝတ်လိုက်စားလိုက်လျှင်လည်း ကိုယ်လုံးအလှပေါ်အောင် အထူး သတိထားပြီး ဝတ်စားပုံရသည်။ .. သူနာပြုဆိုတော့ အလုပ်ချိန်ဆို ယူနီဖောင်းပဲ ဝတ်ရသည်ပေါ့။ … ဒါပေမယ့် မဂျာဂျာတို့က သူများတွေလို ယူနီဖောင်းကို ဖြစ်သလိုမဝတ် … ။ ရင်ဖုံးအင်္ကျီလေးဆိုလဲ ဖြူဖွေးဥနေသည်။ … အသားက ခပ်ပျော့ပျော့ကိုယ်ကပ် အသားမျိုးမှ ရွေးဝတ်သည်။ အင်္ကျီကိုဘယ်တော့မှ ပွပွ မဝတ် .. ။ တစ်ရစ် တင်းကပ်နေအောင် ခပ်ကျပ်ကျပ်အမြဲဝတ်သည်။ တခါတခါ .. ဝါ့ဒ်ထဲကို မေထရွန်ကြီး ရောင်းလှည့်လာလို့ ဆုံမိလျှင် ဂျာဂျာ့ကို အနားနားကပ်ပြီး တိုးတိုးဆူတတ်တာ .. လက်မောင်းကို လိမ်ဆွဲပြီး သတိပေးတတ်တာ ကိုလတ် သတိထားမိသည်။ ယူနီဖောင်းနှင့်ဆိုတော့ အောက်ကတော့ ရိုးရိုးဘော်လီပဲဝတ်ရသည်မို့ ဘရာစီယာတွေ ပုံဆန်းဘော်လီတွေ တော့ ဝတ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့ …။ သို့ပေမယ့် ဂျာဂျာ့ကိုယ်လုံးလေးက ဒါတွေ ကူနေစရာကို မလိုအောင်ကို ပြီးပြည့်စုံနေပြီးသားဖြစ်သည်။
ကိုလတ် တခါတခါများမြင်ယောင်ကြည့်မိသည် .. ။ ဒီလို ကိုယ်လုံးမျိုးလေးနှင့် ဒီလို အသားပျော့အင်္ကျီအဖြူကျပ်ကျပ်လေး အောက်မှာများပုံဆန်း ဘရာစီယာလေးနှင့်သာဆို ဘယ်လိုနေမည်မသိ .. လို့ ။ တွေးကြည့်ယုံနှင့်ပဲ ဖွားဘက်တော်ကခေါင်းထောင်ထောင် ထလာတတ်လို့ အိမ်သာထဲ ပြေးခဲ့ရသည့်အကြိမ်တွေလဲ မနည်းတော့။ … ထမီလေးကြည့်ဦးမလား … ။ သူများတွေလို တွေ့ကရာ အသားနှင့် အနီရောင်ဖြစ် ပြီးရော ဘယ်တော့မှ မဝတ်။ .. ဘီဘဲလ်လို အိတုံလို ကိုယ်ပေါ်မှာ ပျော့အိပြီးကပ်နေမည့် အသားမျိုးမှ အနီရောင်ရှာပြီး ဝတ်တတ်သည်။ ဒေါက်တွေဘာတွေ လိုအပ်သလို သေသေချာချာလဲ တတ်ပုံရသည်။ ဂျာဂျာ့တင်သားအိအိကြီးတွေပေါ်တွင် ထမီပျော့ပျော့လေးက အမြဲလို တသားတည်းကပ်နေတတ်သည်။ .. အောက်မှ ပင်တီ အရစ်လေးက အထင်းသား …. ။ လမ်းလျှောက်လိုက်လို့ လှိုင်းတွေထ သွားတိုင်း မြင်ရသူ အသက်ရှုမှားလောက်သည် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေတော့၏။
အရပ်ကလေးက နည်းနည်းပုသူမို့ တခါတလေ ဝါ့ဒ်ထဲမှာ ဒရစ်ပုလင်းတွေဘာတွေ ချိတ်ရဖြုတ်ရတိုင်း ဒီအတိုင်းမမှီလေတော့ ခြေဖျားလေးတွေထောက်ပြီးများ လှမ်းလိုက်ရချိန်တွေဆို ကိုလတ်သာ အနားမှာရှိနေလျှင် အလုပ်ထဲက စည်းမျဉ်းတွေ ဂုဏ်တွေမေ့ထားလိုက်ပြီး နောက်ကနေ သွားပြီးတော့သာ ကိုင်ညှစ်ပြစ်လိုက်ချင်မိလောက်အောင် ဖြစ်ရတတ်သည်။ ဒီကောင်မလေး ဝါ့ဒ်ထဲရောက်လာတော့ ကိုလတ် ဖန်မလားစိတ်ကူးသေးသည်။အမှန်က မိဂျာဂျာကလည်း ဝါ့ဒ်ထဲရောက်လာကတည်းက လူပျိုလူလွတ် ဇ နှင့် နာမည်တလုံးနှင့်ကိုလတ်ကို သတိထားမိပုံရပါသည်။ .. နဂိုကလဲ ခပ်သွက်သွက်ဖြစ်ရသည့်အထဲ ကိုလတ်ရှေ့ဆိုလျှင် ပိုပြီး အသံလေးက စာ သွားတာ … ဆေးရုံစင်္ကြန်တွေမှာများ ကိုလတ်ရှေ့က သွားမိတာနှင့်ကြုံလျှင် တင်သားကြီးတွေ ပိုလှုပ်ခါပြီး လျှောက်ပြတတ်တာ .. တခါတခါ ကိုလတ် စားပွဲမှာ အလုပ်ထိုင်လုပ်နေတုန်းများ ကိုလတ်ဆီ လာဘို့ ကြုံလာလျှင် စားပွဲပေါ်လက်ထောက်ပြီး ရင်ကိုကော့ တင်ကိုနောက်ပစ်ပြတတ်တာ .. ကိုလတ်လဲ ကောင်းကောင်းသတိထားမိသည်ပဲ … ။
အလုပ်ထဲဆိုတော့လဲ ရုတ်တရက် သွားမစရဲ။ .. စလိုက်လို့ ဖြစ်သွားပြီးလျှင် အပြင်ကဟာလေးတွေလို အရှောင်အတိမ်းလုပ်လို့ လွယ်မည်မဟုတ်။ .. ယူရဘို့ များသွား လိမ့်မည်။ … ဒီအချိန်မှာပဲ မီမီနှင့်ကလဲ မနားတမ်းကို ဆွဲလာဖြစ်ကြတော့ ကိုလတ်စိတ်ထဲ ဂျာဂျာ့ကို ခနခေါက်ထားလိုက်မိတော့သည်ပေါ့။ …မိဂျာဂျာလို ကောင်မလေးမျိုးက ကိုလတ်ခေါက်ထားတော့ကော ဒီအတိုင်းနေနေမည်တဲ့လား … ။ သူမ ဟန်ရေးပြသမျှ အရာမထင်တော့ စိတ်က ပေါက်လာသည်။ .. ဒီ လူပျိုဆရာဝန် မျက်စိများ ကန်းနေသလားပင်မသိဟု တွေးမိတာ အကြိမ်ကြိမ် … ။ အခြောက်တော့ မဟုတ်နိုင် … သူ့သတင်းတွေက မွှေးလှသည်ပဲ။ .. တဆေးရုံလုံး မကြားချင်မှ အဆုံးရယ် … ။ သူမကိုတော့ အရေးမလုပ်ပေမယ့် သူဆေးခန်းဖွင့် ထားသည့်လမ်းထဲမှ ကုလားဆင် မုဆိုးမလေးနှင့်ကျတော့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံဆိုတာ ကြားလိုက်ရသည့်နေ့က ဂျာဂျာ မခံချင်စိတ်နှင့် အိပ်လို့ပင်မပျော် … ။ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လှတာ တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ဟု ဂျာဂျာ တေးမှတ်ထားလိုက်သည်။
ဖြစ်ချင်တော့ နောက်ရက်များမကြာခင် နောက်ဆုံးနှစ်ဆေးကျောင်းသား ကိုလွင်က ဂျာဂျာ့ကို ပရိုပို့စ် လုပ်လာတော့ ဂျာဂျာ ဘာမှ စဉ်းစားမနေတော့ပဲ ချက်ခြင်းကို အဖြေပေးပစ်လိုက်၏ ကိုလတ်ရှေ့မှာ ကိုလွင်နှင့်တွဲသွား တွဲလာ လုပ်ပြရတာ အရသာရှိလှသည်မှတ်သည် … ။ ကိုလတ်ကတော့ လွတ်တဲ့ငါး ကြီးသည် ဆိုတာလို နှမျောတသ ဖြစ်နေရခဲ့ရ၏။ သူ့ရှေ့မှာ ဂျာဂျာက ဟိုကောင်လေးနှင့်တွဲပြလေ သူ့စိတ်တွေက မခံချင်စိတ်နှင့်အတူ နိုးထလာလေဖြေစ်နေရတော့သည်။သို့ပေမယ့် သူမ ကိုယ်တိုင်လဲ မှန်းချက်နှင့်နှမ်းထွက်က မကိုက်ဖြစ်နေတာ သူမဖာသာပဲ သိသည်။ .. ကိုလတ်ကို အရွဲ့ တိုက်ချင်စိတ်နှင့် အဖြေပေးကာ တွဲပစ်လိုက်သော ဆေးကျောင်းသားကိုလွင်က ခပ်ကြောင်ကြောင်ရယ် .. ။ နှစ်ယောက်သား ချိန်းတွေ့ချိန် ကဗျာတွေ လာရွတ်ပြလိုပြ လုပ်နေတတ်သည့်လူမျိုး … ။ လူကိုပဲ မထိရက် သလိုလို မကိုင်ရက်သလိုလိုနှင့် … ပန်းကလေးနွမ်းသွားမှာစိုးသည်တွေဘာတွေနှင့် ဒိုင်ကြောင်နေတတ်သူ ဖြစ်နေတာ တွဲပြီးမှ သိရတော့သည်။
တွဲပြီးမှတော့ မိဂျာဂျာတို့ ဘာတတ်နိုင်မှာတဲ့လဲလေ …။ တခါတလေ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေရှိရာ အဆောင်ကို သွားလည်သည့်အခါမျိုး (ဂျာဂျာကိုယ်တိုင်ကတော့ မြို့ထဲမှာ မိဘတွေနှင့် အတူနေသူဖြစ်သည်၊ .. အဆောင်မှာ မနေ) များ .. ဟဲ့ကောင်မ ညဉ်းဘယ်အဆင့် ရောက်နေပြီလဲ ဘာလဲ နှင့် အမေးခံရလျှင် ဂျာဂျာ မချိပြုံးလေးသာ ပြုံးနေလိုက်ရသည်ချည်း။ .. ပါးလေး နမ်းယုံထက် မပိုသေးဘူးဟု အမှန်အတိုင်းဖြေလဲ ယုံကြမှာမှ မဟုတ်တာလေ။ဒီနေ့ညနေတော့ ကိုလွင့်ကို ကျွတ်အောင်ချွတ်မည်ရယ်လို့ ဂျူတီဆင်းလျှင် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြဘို့ ချိန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ .. သူမလဲ ဆေးရုံအပြီး ကိုလွင်လဲ ကျောင်းအပြီး ညနေ ၅နာရီပွဲပေါ့။ … လှေကားမှ ဆင်းတော့မည့်ဆဲဆဲ သူမရှေ့မှာ ကိုလတ်ကို ခပ်ငေါင်ငေါင်ကြီး တွေ့လိုက်ရသည်မို့ မထိတထိ ကလိသလို ရီသံလေးနှင့် လှမ်း နှုတ်ဆက်လိုက်မိခြင်းပါ … ။
ကိုလတ် မျက်မှောင်ကြုံ့ရင်း လှည့်ကြည့်လိုက်မိ၏။ ဂျာဂျာ၏ ချစ်စဖွယ် အပြုံးလေးကို မြင်ရတော့ ကိုလတ်မျက်ခုံးတွေ အလိုလို အတွန့်ပြေသွားသည်။ ဂျာဂျာက ယူနီဖောင်း မလဲရသေး .. ။ သို့ပေမယ့် ခေါင်းဆောင်း ကက်ပ် လေးကိုတော့ ဖြုတ်ထားပြီးပြီ။ ကက်ပ် မပါပဲ နောက်တွဲဆံထုံးလေးနှင့် မြင်ရတာ ဂျာဂျာက တမျိုးကြည့်ကောင်းနေ၏။ အစကတော့ ကိုလတ်စိတ်ထဲ ဂျာဂျာ့ရီသံက သူ့ကိုလှောင်နေသလိုလို ခံစားရသဖြင့် စိတ်ခုသလိုလိုဖြစ်သွားရခြင်းဖြစ်သည်။ .. ဒါပေမယ့် တကယ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဂျာဂျာ့မျက်နှာလေးက အပြစ်ကင်းစင်စွာဖြင့် ဝင်းပနေသည်။ .. ကိုယ့်ဖာသာ အလိုလို လိပ်ပြာမလုံဖြစ်နေမိတာပဲ ထင်ပါရဲ့လေ … ။ ‘ ပြန်တော့မယ်လေ … ဂျာဂျာရဲ့။ … လေးနာရီပဲခွဲပြီးနေမှဟာ .. ။ ဂျာဂျာရော မပြန်သေးဘူးလား … ‘ ဂျာဂျာက သူမလက်ကိုင်ပဝါလေးကို လက်ထဲတွင် ဆုပ်လိုက်ချေလိုက် လှည့်ပါတ်ကစားလိုက်လုပ်နေသည် ဒါလဲ မိန်းကလေးတို့ တတ်အပ်သော မာယာတွေထဲမှာ တမျိုးပါလေသလားတော့ မသိ။
‘ အဟင်း … ဒီနေ့ ကိုလွင်နဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဘို့ ချိန်းထားလို့ ဆရာ … ‘ ‘ သြော် …. ဒီလိုလား … ။ အိမ်ပြန်နောက်ကျနေတော့မှာပေါ့ … ‘ ‘ အဟဲ … အိမ်ကို ဒီနေ့ ညဂျူတီကျတယ်လို့ လှိမ့်ထားတယ်ဆရာ။ .. ရုပ်ရှင်ပြီးမှ အဆောင်က သူငယ်ချင်းတွေ အခန်း ပြန်အိပ်မှာ … ‘ ‘ အမယ် … ညီးတောင် တော်တော် ပညာစုံနေပါ့လား … ‘ လက်ယဉ်နေသော ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့ခေါင်းလေးကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း လှမ်းထုသည်။ ဂျာဂျာ ခေါင်းလေး ပုသွားကာ လျှာလေးတစ်လစ်ဖြစ်သွား၏။ ‘ ကဲကဲ … ဘယ်ရုံမှာလဲ .. ညီးအဆက်နဲ့ ချိန်းထားတာ … ။ ခုပဲ ငါးနာရီမတ်တင်းရှိတော့မယ် … ‘ ‘ ပပဝင်းမှာပါ ဆရာ၊ ဒီနေ့ သူက ဆေးရုံကြီးမှာ အတန်းရှိလို့ ရုံမှာပဲ ဆုံဘို့ချိန်းထားကြတာ … အယ် .. ဟုတ်ပါရဲ့ နဲနဲတောင် နောက်ကျနေပြီ .. ‘ ဂျာဂျာက လက်ပါတ်နာရီလေးကို မြှောက်ကြည့်ရင်း မဲ့တဲ့တဲ့လေး ဖြစ်သွားသည်။ … အနောက်ပိုင်းဆေးရုံကနေ မြို့လယ် ပပဝင်း ရုပ်ရှင်ရုံကို ဆယ့်ငါးမိနစ်ထဲနှင့် ရောက်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်လှပေ။ … ‘ ဆရာလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ … ဆရာ့ကားကို ဂျာဂျာ စီးရဲရင်ပေါ့ …
‘ ‘ အောင်မယ်လေး … ကိုယ့်ဆရာကားများ ဘာမစီးရဲစရာရှိလဲ … လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆို ကျေးဇူးပါဆရာ … ခနနော် … ဂျာဂျာ အဝတ်အမြန်သွားလဲလိုက်ဦးမယ် … ယူနီဖောင်းကြီးနဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ မဖြစ်သေးပါဘူး ‘ ‘ အိုကေ … ဆရာ ကားပါကင်ကပဲ စောင့်နေတော့မယ် … ‘ ‘ ဟုတ် … ‘ ဂျာဂျာ ဆရာမများ နားနေခန်းဘက် ခပ်သွက်သွက် ထွက်သွားတုန်း ကိုလတ်လဲ အောက်ဆင်းလာနှင့်ခဲ့ လိုက်တော့၏။ … ဘာရယ်မဟုတ် … ပါးစပ်မှ ‘ မင်းရည်းစားတောင်သိရဲ့လား ‘ … သီချင်းလေးကို လေချွန်လာမိလျှက်သားဖြစ်နေသဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုံးမိရသေးသည်။ .. ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ဂျာဂျာ ကားနားရောက်လာ၏။ ‘ ဆောရီးနော် ဆရာ … ပို့ပေးမယ့်သူက တကူးတက စောင့်နေရတယ်၊ .. အားနာလိုက်တာ … ‘ ဖက်ဖူးရောင် ဝမ်းဆက်လေးနှင့် အလှကြီးလှနေသော ဂျာဂျာက ကားပေါ်စွေ့ကနဲ ဝင်ထိုင်ရင်း တောင်းပန် နေပြန်သည်။ … ဂျာဂျာ့ကိုယ်သင်းနံ့လေးက ရေမွှေးနံ့လေးတွေ မိတ်ကပ်နံ့လေးတွေနှင့် ရောကာ ကားထဲမှာ သင်းကနဲဖြစ်သွား၏။ .. ကိုလတ် တံတွေးကို အသာ လူမသိသူမသိ မြိုချလိုက်မိသည်။ လွတ်တဲ့ငါး .. ကြီးသည်ဆိုတာ ဒါမျိုးလား မသိ။
ကားမောင်းကျွမ်းသလောက် ကြမ်းသူမို့ ပပဝင်းရုံကို ငါးမိနစ်လောက်နှင့် ရောက်သွားသည်။ လမ်းတလျှောက် သူခပ်ကြမ်းကြမ်းမောင်းတာကို မျက်လုံးလေးအဝိုင်းသားနှင့်ကြည့်ရင်း ဘုရားသခင် … ဟု မကြာမကြာ ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်နေသော ဂျာဂျာ့ပုံလေးက မျက်စိထဲကကို မထွက်။ ‘ ကဲ .. ရောက်ပြီ။ .. အချိန်မှီပါတယ် ဟုတ် … ‘ ‘ အဟင်း .. အချိန်မှီတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်၊ လမ်းမှာ ဂျာဂျာ ဘယ်နှစ်ခါတောင် ဘုရားသခင်ကို တ မိတယ်မသိဘူး။ … ‘ ဂျာဂျာက ချစ်စဖွယ်လေးပြုံးပြရင်း ကားပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။ ရုပ်ရှင်ရုံအောက်ကို တချက်ဝေ့ကြည့်တော့ သူမဘဲ ကိုလွင်ကို အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့။ … ‘ ဟို … ဆရာ အပန်းမကြီးရင် တခုကူညီပါဦးလားရှင် … ‘ ကိုလတ်က ကားပြန်ထွက်ဖို့ စက်တောင်နှိုးနေပြီ။ … စက်ကိုပြန်သတ်လိုက်ရင်း ဘာလဲဆိုသော သဘော နှင့် အသာမေးဆတ် ပြလိုက်မိ၏။ ‘ ဟိုလေ … လက်မှတ်တွေက ဂျာဂျာ့ဆီမှာ ရှိပြီးသားပါ .. ကြိုတင် ယူထားတာ။ .. ဒါပေမယ့် သူက မရောက်သေးတော့ ဂျာဂျာ တယောက်ထဲ ရုံအောက်မှာ စောင့်နေရမှာ တမျိုးကြီးဖြစ်နေလို့ ဆရာများ ခန အတူစောင့်ပေးလို့ ရမလားလို့ … အားတော့နာတယ် ဆရာရယ် … ‘ အင်း .. ဒါလဲ ဟုတ်သည်ပဲ။
ဂျာဂျာ့လို ဟော့ရှော့တ်လေးနှင့် အရမ်းကို မိသည့်ကောင်မလေးတယောက်က ရုပ်ရှင်ရုံအောက်မှာ ဘယ်လာ တယောက်ထဲ အူကြောင်ကြောင် ရပ်စောင့်နေချင်ပါ့မလဲ။ .. ခုတောင် ရုံအောက်က လူတွေ(ယောကျာ်းတွေ) က ခေါ်တော တထောင်အားနှင့် ဝိုင်းကြည့်နေကြပြီ။ ‘ ရပါတယ်ဗျာ … အားလဲနာတယ် ခင်လဲခင်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါ့ .. ဟုတ်လား … ‘ ‘ အဟဲ … ကျေးဇူးပါဆရာ … ‘ ဂျာဂျာက ရှက်ပြုံးလေးနှင့် ခေါင်းလေးငုံ့သွားသည်။ ကိုလတ် အိပ်မက်များ မက်နေသလား ထင်မိသည်။ သူအရင်က မစွမ်းရင်းရှိခဲ့ပြီး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သူများလက်ပါသွားသော ဂျာဂျာလေးနှင့် အတူတူ ရုပ်ရှင်ရုံအောက်မှာ မုန့်တွေဝယ် .. အအေးတွေသောက်နှင့် … ဖြစ်နေရသည်ကိုး။ သူ့ရည်းစားနှင့်အတူကြည့်ဘို့ စောင့်နေတာမဟုတ်ပဲ သူနှင့်အတူသာကြည့်ကြဘို့ဆို ဘယ်လောက်များ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းလိုက်လေမည်လဲလေ။ … သက်ပြင်းကိုသာ ဂျာဂျာမသိအောင် မကြာမကြာ ခိုးပြီး ချနေ မိရတော့သည်။ အချိန်တွေ တစစ ကုန်သွားပြီ။ ငါးနာရီ ဆယ့်ငါးမိနစ်တောင် ရှိပြီ … ။
သကောင့်သား ကိုလွင်ကား မပေါ်ရေးချ ပေါ်ကိုမလာ။ … ဂျာဂျာ့မျက်နှာလေးလဲ ဒေါသနှင့် ရှက်စိတ်တွေနှင့် ရဲတွတ်နေပြီ။ … မျက်ဆံနက်နက်လေးတွေနှင့် ချစ်စဖွယ်ကောင်းလှသော မျက်လုံးလေးတွေတွင် မျက်ရည်လေးတွေပင် ဝိုင်းနေပြီ။ ‘ ကဲ … ဂျာဂျာရေ .. အချိန်လဲ တော်တော်နောက်ကျနေပြီ … ဘာလုပ်ကြမလဲ … ‘ ဂျာဂျာ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်။ တော်တော်နှင့် စကားသံထွက်မလာ .. အေးလေ ရှက်ရှာမည်ပေါ့။ … တစိမ်းယောကျာ်းတယောက်ရှေ့မှာမှ ချိန်းထားသော ရည်းစားက ရောက်မလာတော့ ဘယ်မိန်းကလေးမဆို အရှက်ခွဲခံရသည်လို့ပဲ ယူဆကြမည်ပေါ့။ … ‘ သူ ဒီလိုချည်းပဲ ဆရာ … ဂျာဂျာ့ကို ဒါ သက်သက်အရှက်ခွဲတာ … ‘ စကားအဆုံးတွင် ဂျာဂျာ့အသံလေးက တိမ်ဝင်သွားပြီး ခပ်တိုးတိုး ရှိုက်သံလေးပင် ထွက်လာသည်။
မျက်ရည်တွေ ကျမလာအောင် မျက်တောင်ကော့ကြီးတွေကို တဖြတ်ဖြတ်ခပ်ကာ ထိန်းလိုက်ရ၏။ ‘ ကဲ … ရောက်လာပြီးမှတော့ မထူးပါဘူး ဂျာဂျာရယ် … ဝင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ .. ‘ ဂျာဂျာ စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားဟန်လေး ဖြစ်သွားသည်။ ‘ အင်း … အိမ်ကိုလဲ ညဂျူတီ ပြောထားပြီးမှတော့ ပြန်လဲမပြန်ချင်တာ အမှန်ပဲ ဆရာရယ် … ဒါပေမယ့် ဆရာ ဆေးခန်းထိုင်ဘို့က ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား … ‘ ‘ အို … ဆေးခန်းက အရေးမကြီးပါဘူးကွာ … ဂျာဂျာ့ကိုကြည့်ပြီး ဆရာပါ ဝမ်းနည်းလာလို့ပါ … ‘ ဟုတ်ပါသည် … ဆေးခန်းတရက်စာ ဝင်ငွေက ဂျာဂျာ့လို ကောင်မလေးမျိုးနှင့် ရုပ်ရှင်အတူတွဲကြည့်ရမည့် အခွင့်အရေးကို ဆုံးရှုံးခံရလောက်အောင်တော့ မတန်ရေးချ မတန်ပါ။ … တနည်းအားဖြင့်တော့ ရည်းစားက ချိန်းထားတာတောင် ရောက်မလာချိန်မှာ မိမိက ဆေးခန်းတောင်ဖျက်ပြီး သူမကို အဖော်လုပ်ပေးနိုင်သည်ဆိုသည့်သဘောနှင့် အမှတ်ယူလိုက်ခြင်းလဲ ဖြစ်ပါသည်။
‘ ဒီနေ့တော့ ဂျာဂျာ ဆရာ့ကို ဒုက္ခတွေ တခုပြီး တခုပေးနေမိပါပြီရှင် … ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိ တော့ပါဘူး … ‘ ‘ ကဲ အမိရေ … ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိရင်လဲ ပြောမနေနဲ့တော့ .. ။ ရုပ်ရှင်တောင် စနေတာ တော်တော် ကြာလောက်ပြီ။ အထဲ ဝင်ကြစို့ … ‘ ဒီလိုနှင့် ကိုလတ်က ဦးဆောင်ကာ ဂျာဂျာနှင့် ၂ယောက်သား ရုံထဲ ဝင်လာဖြစ်ခဲ့တော့သည်။ သြော် … ဒီတညနေလေးက သူမကို ဘ၀ တဆစ်ချိုးပြောင်းစေဘို့ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဆိုသည်ကိုတော့ ဂျာဂျာလေး လုံးဝ မရိပ်မိခဲ့ရှာပါပေ။ ….. ရုံထဲရောက်တော့ ရုပ်ရှင်က စပြီးပြနေပြီမို့ မီးတွေမှိတ်နေပြီ။ ချစ်သူစုံတွဲကြည့်ဘို့ယူထားသည့် ကြိုတင်လက်မှတ်ဆိုတော့ ခုံနေရာက ဟိုးနောက်က ဒီစီနောက်ဆုံးတန်း ဒေါင့်လေးမှာ … ။
ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့လက်လေးကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း မှောင်ထဲမှာ ခလုတ်မတိုက်မိအောင် သတိထား သွားနေရ၏ အရေးထဲမှ တမင်လုပ်ထာမဟုတ်ပဲနှင့်ကို မှောင်ထဲမှာ ဂျာဂျာနှင့်သူ ကိုယ်လုံးချင်း ၂ခါလောက် တိုက်မိကြ သေးသည်။ ဂျာဂျာ့တင်ပါး အိအိကြီးတွေက ကိုလတ်ပေါင်တွေနှင့် အိကနဲထိတော့ ကိုလတ် မှောင်ထဲမှာ အံကိုသာ တင်းတင်းကြိတ်ထားမိလိုက်ရသည်ပေါ့။ … တော်သေးသည် ဆေးရုံက တန်းလာရတာမို့ ဒီနေ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်လာမိလို့သာ … ။ ခုံနေရာရောက်တော့မှ နှစ်ယောက်သား ထိုင်ချယင်း အလင်းရောင် မပီဝိုးတဝါးအောက်မှာ လှမ်းပြုံးပြဖြစ် ကြသည်။ .. ခုံနေရာက နောက်ဆုံးတန်း၏ ဘယ်ဘက်ဒေါင့်လေးမှာ။ .. ဂျာဂျာက နံရံဘက်မှာထိုင်သည်။
ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့ညာဘက်မှာ ထိုင်၏။ အနားကပ်လျှက် ညာဘက် သုံးလေးခုံအထိ မည်သူမျှ မရှိ။ .. ရှေ့ကအတန်းမှာလဲ ဟိုးညာဘက်ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာသာ စုံတွဲ နှစ်တွဲ သုံးတွဲ အသီးသီးထိုင်နေကြသည်။ ကိုလတ် အသက်ရှုတွေ မြန်လာရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေက လှုံ့ဆော်နေသည်မို့လားမသိ၊ .. ကိုလတ်ကော ဂျာဂျာပါ စကားတခွန်းမှ မပြောမိကြပဲ ကိုယ့်ရင်ခုန်သံ ကိုယ်ပြန်ကြားနေရသည်ထင်မိသည်။ .. မှောင်ထဲမှာ တခါတခါ ရုပ်ရှင်က အလင်းပြကွက်တွေ ပြလာလို့ အလင်းရောင်လေး နဲနဲအားကောင်းလာတိုင်း အနားပတ်လည်မှ စုံတွဲတွေက အပီပွဲကြမ်းနေကြတာ လှမ်းလှမ်းမြင်နေရသည်။ .. ဂျာဂျာတော့ ဘယ်လိုနေသည်မသိ၊ .. ကိုလတ်တော့ ရမက်ဇောတွေ ထလာသည်။ .. ဟိုးအရင်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားမိလျှက်သားနှင့် မရည်ရွယ်သော အဖြစ်အပျက်များကြောင့် မနီးစပ်ဖြစ်ခဲ့သည့် ဂျာဂျာလေးနှင့် ခုလိုအခြေအနေမျိုး ရောက်နေရတော့ ကိုလတ်ခမျာ စိတ်ကို ထိန်းဘို့ အရမ်းခက်ခဲလာတော့သည်ပေါ့။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆရာနှင့်တပည့်ပုံစံမို့ သူမမှာလဲ ရည်းစားရှိနေမှန်းကြီးသိသိနှင့် အစပျိုးရမှာ နဲနဲတော့ အခက်ကြုံနေရသည်။ … ဂျာဂျာကျတော့ကော … သူမလဲ သွေးနှင့်ကိုယ် သားနှင့်ကိုယ်ပဲလေ။ အစကတည်းက ကိုလတ်ကို အထာ တွေပေးနေခဲ့မိပြီး ကိုယ်တော်ချောက သူမကိုတော့မကြံပဲ မုဆိုးမလေးနှင့် သွားငြိမ့်နေမှန်းသိလိုက်ရလို့သာ စိတ်ဆိုးဆိုးနှင့် လက်ရှိဘဲကို အရွဲ့တိုက်အဖြေပေးဖြစ်ခဲ့သည်ပဲ … ။ ခုလိုမျိုး ဘဲနှင့်နှစ်ပါးကြည်ကြဘို့လို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်မည် စီစဉ်ထားပြီးကာမှ ဘဲကပေါ်မလာလို့ ကိုလတ်နှင့်အတူကြည့်ဖြစ်ကြတော့ သူမစိတ်တွေ ဘယ်လိုကြီးဖြစ်လာမှန်းကို မသိ။ .. ရင်တွေက မခုန်စဖူး အခုန်ထူးလာသည်။ .. ပြီးတော့ လက်ရှိဘဲ ကိုလွင်က ကဗျာရူး ခပ်ကြောင်ကြောင်မို့ တခါမှ ထိထိရောက်ရောက် အပွေ့အသပ်အကိုင်အတွယ် မခံရ ဘူးလေတော့ စိတ်တွေက ဆာနေခဲ့ရသည်ဖြစ်ရာ ကိုလတ်များ ခုနေ သူမကို လာဖက်လေတော့မည်လား .. နမ်းပြုများ လာလေတော့မှာလား … စသည်ဖြင့် စိတ်တွေ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေရလေတော့၏။
အချိန်တွေ အတော်လေးကြာသွားသည်။ … ကိုလတ်က မှောင်ထဲတွင် မျက်လုံးဒေါင့်ကပ်ပြီး ဂျာဂျာ့ကို အသာခိုးကြည့်၏။ .. ကောင်မလေးလဲ စိတ်တွေ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေမှန်း ကိုလတ်ရိပ်မိသွားသည်။ .. ရိပ်မိမည်ပေါ့၊ ဂျာဂျာ့အာရုံက ရုပ်ရှင်ထဲမှာကို မရှိ။ .. ဘာတွေ ပြလို့ပြနေမှန်းလဲ သိပုံမရ။ .. မှောင်ထဲကိုသာ မျက်လုံး အကြောင်သား တွေငေးငေးလေး ကြည့်နေမိသည်ကိုး ..။ သက်ပြင်းလေးတွေ မသိမသာ ခိုးခိုးချနေတာကလဲ အကြိမ်ကြိမ်။ ကိုလတ် စိတ်တွေ ပိုဆူလာသည်။ ကံစမ်းမဲလေးတော့ နှိုက်ကြည့်ဦးမှ ဟူသော စိတ်က ရုန်းထလာသည်။ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်စေတော့ … ။ နှစ်ယောက်ကြားမှ လက်ရန်းပေါ်တင်ထားသော ဂျာဂျာ့လက်လေးပေါ်သို့ ကိုလတ် သူ့လက်ကို မသိမသာ ထပ်တင်လိုက်သည်။ … ဂျာဂျာ့လက်လေးတွေ အေးစက်နေတာ သတိပြုမိသွားပြန်၏။ ဂျာဂျာက သူမ၏ လက်ကို မရုန်းဖယ် .. ။ ‘ မလှုပ် စိတ်တူ ‘ ဆိုသော စကားကို ကိုလတ် သွားသတိရသည်။ ရဲဆေးတွေက ပိုပြီး တက်လာတော့၏။
ကိုလတ် ခါးဆန့်ဆန့်ပြင်ထိုင်လိုက်သည်။ .. အနေအထားပြင်ရင်းမှ လက်ညောင်းလို့ ဆန့်ရသလိုလိုနှင့် သူ့ဘယ်လက်မောင်းကို ဂျာဂျာရှိရာ ဘေးခုံ ပေါ်သို့ အသာဆန့်တင်လိုက်သည်။ … ပထမတော့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်းတင်ထားခြင်းဖြစ်၏။ ခနနေတော့ လက်ကို မသိမသာ လျှောချကာ ဂျာဂျာ့ပုခုံးသားအိအိလေးတွေနှင့် သူ့လက်မောင်းကော လက်ဖျံကိုပါ ဖိကပ်ထားလိုက်သည်။ … ဂျာဂျာလဲ ငတုံးမလေးမှ မဟုတ်သည်ပဲလေ။ .. ကိုလတ် အနေအထားပြင်လိုက်ကတည်းက သတိထားမိနေသည်။ .. ထင်ထားသည့်အတိုင်းပဲ ခနနေတော့ ကိုလတ်လက်ကြီးက သူမပုခုံးပေါ်ရောက်လာတော့ ဘာလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲ ခနစဉ်းစားနေမိသေးသည်။ ရုန်းလိုက်ရမလား .. ရန်တွေ့ပြီး ထွက်သွားလိုက်ရမလား … ။ အို … လက်ရှိဘဲကလဲ အာပလာကောင် … ။ ကိုလတ်မှာလဲ လက်ရှိ ဆိုင်သူရှိမနေတာ သူမအသိ။ … သူမ စိတ်တွေကလဲ မရိုးမရွဖြစ်နေတာ အမှန် … ။
ဘာများ ရုန်းရန် အကြောင်းရှိမည်တဲ့လဲလေ … ။ ဂျာဂျာ အသာပဲငြိမ်နေမိလိုက်တော့သည်။ ငါးမိနစ်ခန့်တော့ အခြေအနေက ဒီအတိုင်းငြိမ်သက်နေ၏။ ဂျာဂျာ အသက်ပင် ရဲရဲမရှုရဲ … ။ ဘာတွေများ ဆက်ဖြစ်လာဦးမည်လဲ ရင်တထိတ်ထိတ်နှင့် စောင့်စားနေမိ ရသည်။ … တကိုယ်လုံးလဲ ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ တချက်တချက် ကြက်သီးလေးတွေပင် ထထ သွားရ၏။ … အောက်က စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ အရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာလေသည်လား မသိ။ .. အောက်ခံပင်တီခွဆုံနားမှာ စေးကပ်ကပ်ဖြစ်လာတာ ခံစားနေရသည်။ … နေရ ခက်လိုက်တာနော်။ ကိုလတ်ကလဲ အခြေအနေကို တရံမလပ် အကဲခတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျာဂျာ့မျက်နှာအနေအထား အပြောင်းအလဲကို မျက်လုံးဒေါင့်ကပ်ပြီး ချက်ကင် လုပ်နေသည်မို့ ပထမတော့ သူမမျက်နှာလေး ဝေခွဲမရသည့်ခံစားမှုဖြင့်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာ .. နောက်တော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟန်မျိုး ဖြစ်သွားတာ … တော်တော်ကြာတော့ ဖီးလ်တွေ တက်လာဟန်နှင့် မျက်တောင်လေးတွေမှေးပြီး တလှုပ်လှုပ် တရွရွ ဖြစ်လာတာ .. အကုန် ကိုလတ် မြင်နေရသည်။ ကံစမ်းမဲတော့ ပေါက်ပြီပေါ့ … ။
စားနေကြ ကြောင်ဖား ကိုလတ်အဖို့ ဒီအခြေအနေရောက်လျှင် ဘာတွေဘယ်လို ရှေ့ဆက်ရမည်ဆိုတာ စဉ်းစားနေစရာပင်မလို။ အရာရာက သူ့အလိုလို တဆက်တည်း လှုပ်ရှားသွားကြလေသည်။ ပထမက မသိမသာတင်ထားသော ကိုလတ်လက်တွေက သိသိသာသာပုံစံသို့ပြောင်းကာ ဂျာဂျာ့ပုခုံး လုံးလုံးအိအိလေးတွေကို ကျကျနန ဖက်လိုက်သည်။ ဂျာဂျာ့ကိုယ်လေး တချက်တုန်တက်သွားသော်လည်း ရုန်းတာတွေ ဘာတွေတော့ မလုပ်။ .. ဒီတော့ နောက်တဆင့်အနေဖြင့် သူမ၏ ဘယ်လက်မောင်းလေးကို ကိုလတ်လက်ချောင်းတွေက ဆုပ်ညှစ်လာသည်၊ … တရွရွ ပွတ်သပ်ပေးလာသည်။ ဂျာဂျာ တလူးလူးတလွန့်လွန့် ဖြစ်လာသည်။ ခေါင်းလေးကိုတော့ တအားကို ငုံ့ချပြစ်ထားမိ၏။
ဝတ်ထားမိသည်က လက်ပြတ်အင်္ကျီလေးမို့ ဂျာဂျာ့လက်မောင်းသားလေးတွေက ကိုလတ်ပွတ်သပ်တာကို အကာအကွယ်မရှိ တိုက်ရိုက်ခံနေကြရသည်။ ခံစားမှုက နင့်နင့်နဲနဲ ရှိလှသည်။ … ဂျာဂျာ၏ တုတ်တုတ်ခဲခဲ ပေါင်တံကြီးနှစ်ချောင်းက မသိမသာ တလူးလူးတလွန့်လွန့်နှင့် အချင်းချင်း ပွတ်ပွတ်နေကြတာ ကိုလတ် အလင်းရောင်မှိန်မှိန်ထဲတွင် မြင်နေရသည်။ ဗြုန်းဆို ကိုလတ် ညာလက်က ထိုပေါင်တံကြီးတွေပေါ် ကျရောက်လာ၏။ .. အချင်းချင်း ပွတ်နေရတာ မကြည့်ရက်သည့်အလား ဂျာဂျာ့ပေါင်တံကြီးနှစ်ခုကို ပွတ်ပေးလာသည်။ .. ကူညီပါရစေ ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲဖြစ်မည်။ … ‘ အို … ‘ ဂျာဂျာ့ အာမေဍိတ် သံလေးက ခြောက်ကပ်နေသော အာခေါင်ထဲတွင် တိုးတိတ်ပျောက်ကွယ်သွား၏။ အာတွေတွင်မက နှုတ်ခမ်းတွေလဲ ပူစပ်ပူလောင်နှင့် ခြောက်သွေ့နေလေပြီ။ အောက်နှုတ်ခမ်းကို သူမ၏ ရှေ့သွားလေးတွေနှင့် တအားကိုဖိကိုက်ထားမိတော့၏။ ကိုလတ်ပိုဆိုးလာသည်။
ဘယ်လက်မောင်းကို ပွတ်သပ်ဖြစ်ညှစ်ပေးနေသော ကိုလတ်လက်ချောင်းတွေက ဂျာဂျာ့ချိုင်းကြားလေးမှ လျှိုကာ ဘယ်ဘက်နို့အုံကြီးကို နှိုက်ဖို့ကြိုးစားလာကြသည်။ .. ဂျာဂျာ အတင်းလက်မောင်းကို ဖိကပ်ထား မိ၏။ အပျိုလေးဆိုတော့လဲ ရင်ဖိုသည်ပေါ့ … ။ လက်ရှိရည်းစား ကိုလွင်က ဒီနယ်မြေတွေကို ကျူးကျော် ဘူးသေးတာမှ မဟုတ်တာ။ … ‘ အာ့ … ‘ ဂျာဂျာ့ နှုတ်မှ လွှတ်ကနဲ အသံလေးထွက်သွားသည်။ ချိုင်းကြားမှ တိုးဝင်ရန် လမ်းရှာမရဖြစ်နေသော ကိုလတ်လက်ကြီးက ဗြုန်းကနဲဆို ပုခုံးပေါ်မှကျော်ကာ ဂျာဂျာ့ဘယ်ဘက်နို့အုံကြီးကို အုပ်ကိုင်လိုက်သည်ကိုး … ။ သူမ ဘာလုပ်လိုက်ရမည်မှန်း မသိသေးခင်မှာပင် ကိုလတ်လက်ချောင်းများက နို့အုံကြီးတခုလုံးကို အုပ်စီးမိသွားပြီ။ … အိတုန်သား အင်္ကျီလေးပေါ်မှ ဖိအုပ်ကာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုပ်ညှစ်လိုက်သော ကိုလတ်လက်ကြီးအောက်တွင် ဂျာဂျာ့နို့အုံကြီးက အိကနဲ အိကနဲ မရုန်းသာမဖယ်သာ ခံနေရတော့သည်။
ဒါတော့ ကိုလတ် နဲနဲလွန်ပြီထင်သည်။ .. ‘ အွန့် .. ဟွန်း … အူး ….. ‘ ကိုလတ်ကို ရှေ့မဆက်ဖို့ ပြောမည်ရယ်လို့ ဂျာဂျာ ငုံ့ထားသောခေါင်းလေးကို မော့ပြီး ကိုလတ်ဖက်သို့ အလှည့်လိုက်တွင် ဒီလိုဖြစ်လာမည်မှန်း ကြိုတွက်ကာ အသင့်ပြင်ထားသော ကိုလတ်မျက်နှာကြီးက သူမ မျက်နှာလေးကို အလိုက်သင့်ပူးကပ်သွားလိုက်တော့သည်။ ဒီတော့ ကိုလတ်နှုတ်ခမ်းနွေးနွေးကြီးတွေက ဂျာဂျာ့နှုတ်ခမ်းအိတွဲတွဲလေးတွေနှင့် အလိုလို ဂဟေဆက်မိသွားရတော့သည်ပေါ့။ .. ဂျာဂျာ့တကိုယ်လုံး ဗြောင်းဆန်သွားရချိန်မှာပင် ကိုလတ်က သူမနှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို အားအင်အပြည့် နှင့် သူ့ပါးစပ်ကြီးထဲ ပါလာသည်အထိ စုပ်သွင်းယူလိုက်တော့ ဂျာဂျာ့ထဲမှ မပီမသ ညဉ်းသံလေးတွေပဲ လျှံထွက်လာရတော့သည်။ တကိုယ်လုံးလဲ အားအင်တွေ မရှိတော့သလို ကိုလတ်ရင်ခွင်ကြီးထဲ လဲပြိုကျ သွားရတော့သည်။
စောစောက ဂျာဂျာ့ဘယ်လက်မောင်းလေးကို ပွတ်သပ်ပေးနေသော ကိုလတ်ဘယ်လက်ကြီးက သူ့ရင်ခွင်ထဲ လဲပြိုကျလာသော ဂျာဂျာ့ကိုယ်လုံးလေးတခုလုံးကို မြွေတကောင်လို သိုင်းဖက်ရစ်ပါတ် ထားလိုက်သည်။ ညာလက်ကတော့ မူလ တာဝန်ဖြစ်သည့် ပေါင်တံကြီးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေသည့်အလုပ်ကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင်နေဆဲပင် … ။ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်လို့ အားရတော့ ကိုလတ်က သူ့လျှာဖျားလေးကို ဂျာဂျာ့ ပါးစပ်ထဲ ထိုးသွင်းလာပြန်သည်။ ပထမတော့ ဂျာဂျာ နှုတ်ခမ်းကို အတင်းစေ့ထားမိသည်။ ဒါပေမယ့် ကိုလတ်လက်ကြီးက သူမပေါင်တံနှစ်ခုကြားထဲ ရုတ်တရက် ထိုးနှိုက်လိုက်ချိန်မှာတော့ ပါးစပ်လေးက အလိုလို ဟပေးလိုက်မိလျှက်သား ဖြစ်သွားရလေတော့သည်။
ကိုလတ်က သူအလွန်ဖီးလ်လာခဲ့ရသော ဂျာဂျာ့တကိုယ်လုံးကို အခုမှ စိတ်တိုင်းကျ အသုံးချနေလေတော့၏ ဘယ်လက်က အပေါ်ပိုင်းတခုလုံးကို ပိုက်စိပ်တိုက်ခြေမှုန်းနေချိန်တွင် ညာလက်ကတော့ ဗိုက်သားချပ်ချပ် လေးနှင့် ပေါင်တံကြီးတွေ ပေါင်ကြားတွေကို ဒလစပ်လိုက်လံပွတ်သပ်နေသည်။ ထိုင်ခုံနှင့်ညပ်ကာ ပိနေ သော မယ်တွေပင်ရှုံးလောက်သည့် တင်သားအိအိကြီးတွေမှာလဲ ဘေးမဲ့ပေးမခံရရှာပါ။ .. ဘယ်လက်ကော ညာလက်ကပါ အဆင်သင့်လျှင် သင့်သလို အောက်ကိုလျှောချလာပြီး အိတုန်သားထမီလေးပေါ်ကနေ တလကြမ်းပွတ်သပ်လိုက် ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်လိုက် ဆိတ်လိုက် လုပ်နေလေတော့သည်။ ရည်စားနှင့်တုန်းက ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ရသေးသည့် ဂျာဂျာ့တကိုယ်လုံး ကိုလတ်လက်ထဲတွင် စိစိညက်ညက် ကျေနေရလေပြီ။
ခံလို့လဲကောင်းသည် .. နာလဲနာသည်။ ကိုလတ်လျှာကြီးကလဲ ဂျာဂျာ့ပါးစပ်ထဲတွင် ဒေါင့်စေ့လောက်အောင်ကို လျှောက်ထိုးမွှေနှောက်နေသည်။ မသိစိတ်၏ စေ့ဆော်မှုဖြင့်ပင် ဂျာဂျာလည်းပဲ ကိုလတ်လျှာကို သူမလျှာလေးနှင့် ပြန်ထိုးကလိပေးနေမိသည်။ ‘ အင်း ဟင်းဟင်း …. ပြွတ်ပြွတ် … အွန်းဟွန်း …. အူးအူး …. ‘ ကိုလတ်က ပွဲကြမ်းသထက် ကြမ်းလာသည်။ ဂျာဂျာ့ထမီလေးက ပြေလျော့နေပြီမို့ အောက်ခံပင်တီလေးက မပေါ့်တပေါ်ဖြစ်နေရာ ကိုလတ်၏လက်ကြီး တွေက ထို ပင်တီလေးနှင့် တင်သားအိအိကြီးတွေကြားထဲတိုးဝင်ပြီး တင်သားကြီးတွေကို အရှိအတိုင်းကို ကိုင်ဆုပ်လာသည်။ တခါတခါ ရှေ့ဘက်ဗိုက်သားလေးနှင့် ပင်တီကြားထဲသို့ပင် နယ်ကျော် ဝင်ရောက်ချင် လာလေရာ ဂျာဂျာ မနေနိုင်တော့ပဲ နှုတ်မှ အော်ညဉ်းသံတွေ ထွက်လာရသည်။ သူမနှုတ်ခမ်းတွေက ခုထိ ကိုလတ်နှုတ်ခမ်းတွေအောက်မှာပင် ငုံခဲထားခံရဆဲဖြစ်ရာ ပလုံးပထွေးအော်သံတွေလို ထွက်လာရလေ၏။
ကိုလတ်က အသံတွေ ငြိမ်သွားအောင် နှုတ်ခမ်းကို အားနှင့်ဖိစုပ်ပြစ်သည်။ … သို့ပေမယ့် အသံတွေက ငြိမ်မသွားပဲ လှိုဏ်သံပေါက်ကာ ပိုကျယ်လာရသည်။ .. ဘေးနားက အတွဲတွေပင် သူတို့အလုပ်ကိုရပ်ပြီး ကိုလတ်နှင့် ဂျာဂျာ့အဖြစ်ကို တစေ့တစောင်းလှမ်းကြည့်လာကြတာ ဂျာဂျာ မျက်စိဒေါင့်ထဲမှ မြင်လာရတော့ တခုခုတော့ လုပ်မှဖြစ်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်။ .. ဒီအတိုင်းတော့ မဖြစ်မှ မဖြစ်တော့ပဲလေ။ .. ‘ ပြွတ် ….. ‘ ဂျာဂျာ ခေါင်းလေးကို တအားစောင်းပစ်ပြီး သူမနှုတ်ခမ်းတွေကို ကိုလတ်၏အနမ်းအစုပ်တွေအောက်မှ လွတ်အောင် အားစိုက်ရုန်းလိုက်တော့ နှုတ်ခမ်းချင်းကွာသွားသည့်အသံက ရုပ်ရှင်တရုံလုံးပင် ဟိန်းထွက် သွားလား မှတ်ရသည်။
ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနော် ….. ‘ လူ .. လူတွေ ဝိုင်းကြည့်ကုန်ပြီ ဆရာရယ် … ပြန် .. ပြန်ကြရအောင်ပါနော် … နော် … ‘ အသက်ကိုမှန်အောင် ထိန်းရှုရင်း အသံတုန်တုန်လေးနှင့် ဂျာဂျာ ပြောမိသည်။ .. ရုပ်ရှင်ပြီးမှ မီးတွေလင်းမှ လူရှေ့သူရှေ့မှာ သူမ ဘယ်လိုမျက်နှာနှင့် အပြင်ပြန်ထွက်ရပါ့မလဲလေ။ .. ကိုလတ်က သိပ်သဘောတူချင်ပုံမရ .. ။ ခုမှ နမ်းလို့ကိုင်လို့ နှိုက်လို့ ကောင်းတုန်းမို့ ဝသေးပုံမပေါ်။ .. ‘ နော် .. ဆရာ .. နော်လို့ … ။ ပြန်ကြရအောင်ပါ ….. ‘ ဂျာဂျာ ငိုသံပါလေးနှင့် တောင်းပန်တော့မှ ကိုလတ်က မညိတ်ချင်ညိတ်ချင်နှင့် ခေါင်းညိတ်သည်။ မှောင်ထဲမှာ နှစ်ယောက်သား လက်ချင်းတွဲယင်း ရုံအပြင်ထွက်ပေါက်ဆီ လှမ်းလာခဲ့လိုက်ကြ၏။ ဂျာဂျာကတော့ ခေါင်းကို ကြမ်းပြင်နှင့်ထိလုမတတ် ငုံ့ထားသည်။
ကိုလတ်ကပဲ ဦးဆောင်ခေါ်လာရခြင်း ဖြစ်၏။ .. အပြန်မှာတော့ အခြေအနေက မတူတော့ပြီမို့ ကိုလတ် ပညာပြတော့သည်။ အဝင် တုန်းက မတော်တဆ နှစ်ခါလောက် ထိမိတိုက်မိခဲ့တာ သွေးရိုးသားရိုးမှန်း ဂျာဂျာသိသည်။ သို့ပေမယ့် အခုကျတော့ ကိုလတ်က တမင်ကြီးကို မှောင်ထဲမှာ မမြင်ရသလိုလိုနှင့် သူမကိုယ်လေးကို ဝင်တိုးလိုက် ပွတ်တိုက်လိုက် လုပ်နေသည်။ .. တခါတခါ လက်ကြီးတွေက ပီပီပြင်ပြင်ပင် သူမခါးကိုဖက်လိုက် ဖင်ဆုံကြီးကိုပွတ်လိုက် ကိုင်လိုက် လုပ်နေသေးသည်။ လမ်းလျှောက်ယင်းမို့ အခွင့်မသာလေတော့ နို့အုံကြီးတွေကတော့ ချမ်းသာရာ ရနေသေးသည်။ .. ဖြစ်ချင်တာဖြစ် ရုံအပြင်မြန်မြန်ရောက်ဖို့ အဓိကပဲဟုသာ တွေးကာ ဂျာဂျာ လိုက်လာခဲ့ရတော့သည်။ အပြင်တွင် ၆နာရီခွဲလောက်ရှိပြီမို့ မှောင်စပျိုးနေပြီ။ .. ဆောင်းဦးပေကိုး ။ ဂျာဂျာ့ခြေထောက်တွေ မြေကြီးနှင့်ထိနေလား လေထဲတွင်လွင့်နေလားပင်မသိတော့ … ။
ကိုလတ် ကားနားရောက်လို့ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့မှ ဝုန်းကနဲအရုပ်ကြိုးပြတ် ဝင်ထိုင်ချလိုက်ပြီး မျက်စိ အစုံကို နာနာမှိတ်ထားလိုက်မိတော့သည်။ ကိုလတ်ကိုလဲ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲ … ။ ကိုလတ်က ကားစက်နှိုးပြီး မောင်းထွက်လာသည်။ ဆောင်းဦးမို့ မအိုက်သော်လည်း ကိုလတ်က မှန်တွေအလုံပိတ်ကာ အဲယားကွန်းကို ခပ်နိမ့်နိမ့်ဖွင့်ထား၏။ လေနုအေးလေးက ဂျာဂျာ့မျက်နှာကို တိုးနေသည်မို့ စောစောက မောထားသမျှ အတိုးချကာ ဂျာဂျာ အမော ဖြေနေရလေသည်။ တော်သေးသည် … ကိုလတ်က အခုတော့ ကားကို ညင်ညင်သာသာပဲ မောင်းနေသဖြင့် ရုပ်ရှင်အလာတုန်းကလို ရင်မောမနေရလို့သာပဲ ။ မဟုတ်ရင်တော့ မိဂျာဂျာတို့ မောရလွန်းလို့ အသက်ပင် ထွက်သွားလောက်မည် ဟု တွေးနေမိလေသည်။
ကိုယ့်ဇောနှင့်ကိုယ်မို့ ကိုလတ် ဘယ်ကိုမောင်းနေမှန်း ဂျာဂျာ သတိမထားမိ။ ကားလေးက တုန့်ကနဲ ရပ်လိုက်တော့မှ မျက်စိအသာဖွင့်ကြည့်မိတော့ ဆေးရုံအဆောင်ကို ပြန်ပို့ပေးတာ မဟုတ်မှန်း သဘောပေါက်မိတော့သည်။ ဂျာဂျာ မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ … ကိုလတ်ဖက် ပြာပြာသလဲ လှည့်ကြည့်မိတော့ ကိုလတ်က ခပ်အေးအေး မထုံတက်သေး ပုံစံနှင့်။ .. ‘ ဒါ .. ဒါက ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ဆရာ … ‘ ကိုလတ်က နှစ်လိုဘွယ် ပြုံးပြလိုက်သည်။ ‘ ဒါ ဆရာ့အိမ်လေ ဂျာဂျာရဲ့ … ဟိုတုန်းက ဂျာဂျာပဲ ကြုံရင် ဝင်လည်ချင်တယ်ဆို … ‘ ‘ အယ် … အဲဒါက .. အဲဒါက … ‘ ဂျာဂျာ ကိုယ့်စကားနှင့်ကိုယ် ဘာပြန်ပြောရမည်မှန်းမသိ။ ‘ လာပါ .. ဂျာဂျာရယ် … အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောရအောင်လို့ပါ နော် .. နော် ….. ‘ မျက်နှာနားကပ်ကာ ပြုံးပြနေသော ကိုလတ်စကားသံအောက်တွင် ဂျာဂျာ ဘယ်လိုကဘယ်လို ခေါင်းညိတ် ပြလိုက်မိသည်မသိ။
ကိုလတ်က အောက် အရင်ဆင်းသွားကာ မြေညီတိုက်ခန်းအဝင်တံခါး နှစ်ထပ်ကို သော့ဖွင့်နေသည်။ ကျောက်မြောင်းဘက်မှ မြေညီတိုက်ခန်းကျယ်တွေ ထုံးစံအတိုင်း ကားကို အထဲတန်းပြီး မောင်းသွင်းလို့ ရအောင် ဆင်ခြေလျှောလေးတွေ လုပ်ထားသည်မို့ တံခါးတွေ ဖွင့်ပြီးသည်နှင့် ကိုလတ်က ကားကို အထဲ မောင်းသွင်းလာလိုက်၏။ ဂျာဂျာကတော့ ကားပေါ်မှမဆင်းဖြစ်ပဲ ခေါင်းလေးငုံ့ကာသာ ငူငူငေါင်ငေါင်ကြီး ထိုင်နေမိတော့သည်။ သူမတော့ စိတ်ညှို့များ ခံထားရပြီလားမသိဟုပင် သူမဖာသာ တွေးနေမိလေ၏။ တိုက်ခန်းထဲ ကားရောက်သွားတော့ ကိုလတ်က ကားပေါ်မှဆင်းကာ အခန်းတံခါးတွေ ပြန်ပိတ်သည်။ ကားမှန်တွေက ခုထိမချရသေးသည်မို့ ဂျာဂျာ ကိုလတ်နှင့်ပါလာတာ အပြင်လူတွေ သတိထားမိမှာမဟုတ်။ ဒီလိုဖြစ်အောင်ပဲ ကိုလတ်က မြေညီတိုက်ခန်းကျယ်မှာ တမင် နေခြင်းဖြစ်သည်။
အပေါ်ထပ်တွေဆို ကောင်မလေးတွေ ပါလာတိုင်း လမ်းလျှောက်တက်နေရသည်နှင့် ရပ်ကွက်ထဲ ကြော်ငြာမောင်းခတ်သလို ဖြစ်နေမည်။ .. အခုတောင်မှ သူ့သတင်းတွေက တရပ်ကွက်လုံးပြန့်ချင်ချင် မဟုတ်လား။ … အမှန်က အောက်ထပ် အခန်းကျယ်ကြီးမို့ ဆေးခန်းကို အိုးမကွာ အိမ်မကွာ ဖွင့်လျှင်လဲ ရသည်ပင် ။ သို့ပေမယ့် ကိုလတ်က အိမ်ခန်းကို ဘယ်တော့မှ ဆေးခန်းမဖွင့်ဟု စွဲစွဲမြဲမြဲ ခံယူထားသူဖြစ်သည်။ ‘ လာလေ … ဂျာဂျာ ဆင်းလေ …. ‘ ကိုလတ်က ခလုပ်လေးနှိပ်လိုက်သောကြောင့် ပါဝါဝင်းဒိုး ကားမှန်လေးက လျှောကျသွားသည်။ ခုထိအောင် ခေါင်းငုံ့ကာ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေသော ဂျာဂျာ့မျက်နှာနားကပ်ကာ ကိုလတ်က ခပ်တိုးတိုး ခေါ်လိုက်လေ၏။
ကိုလတ် ထွက်သက်လေလေးတွေက ဂျာဂျာ့ ပါးရဲရဲလေးတွေပေါ် ဖြတ်ပြေးသွားသည်။ ‘ ဆရာ့ အိမ်သားတွေကော ဟင် … ‘ ဂျာဂျာက မျက်လွှာလေးပင့်ကာ မရဲတရဲလေး မေး၏။ ကိုလတ်က ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ပြုံးလိုက်သည်။ ‘ မရှက်ပါနဲ့ ဂျာဂျာရဲ့ … ဘယ်သူမှကို မရှိပါဘူး … ဆရာက တယောက်ထဲ နေတဲ့ဟာကို … ‘ ‘ အို … ဘုရားသခင် … ‘ ဂျာဂျာ ဘုရားတရ ပြန်ပါပြီ။ .. လိုက်လာမိတာတော့ မှားပြီထင်သည်။ ဝေခွဲမရသော မျက်နှာလေးနှင့် ဂျာဂျာ ကားပေါ်မှမဆင်းဖြစ်ပဲ ကိုလတ်ကို မော့ကြည့်နေမိသည်။ ‘ အွန့် ….. ‘ ကိုလတ်က မကျမ်းကြေပြီးသားမို့ ဘာလုပ်ရမည်ဆိုတာ နားလည်သည်။ စောစောက အရှိန်တွေက အချိန်နဲနဲကြာလို့ ဂျာဂျာသွေးအေးနေမှန်းသိသည်။ .. သွေးပြန်ပူလာအောင် နှိုးပေးမှ အလုပ်ဖြစ်မည်မှန်းလဲ သိသည်။ ဒီတော့ တွေတွေလေး မော့်ကြည့်နေသည့် ဂျာဂျာ့မျက်နှာလေးဆီ သူ့မျက်နှာကို ရုတ်တရက်ပူးကပ်ကာ နှုတ်ခမ်းချင်း အားရပါးရ တေ့စုပ်ပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ခမ်းချင်းခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်ထားရင်းနှင့် ကိုလတ်ခေါင်းက နောက်ဆုတ်ကာ ပြန်မော့လိုက်တော့ ဂျာဂျာ မနေနိုင်။
တဟင်းဟင်း ညဉ်းသံလေးတွေနှင့်အတူ နှုတ်ခမ်းပေါ်ကျရောက်နေသည့် စုပ်အား သက်သာလို သက်သာငြား ကိုလတ်ရွေ့လျားရာနောက် အလိုက်သင့်ပါလာရတော့၏။ ခေါ်လိုရာကို ရုတ်တရက်မလိုက်ပဲ ငြင်းဆန်ချင်နေသည့် မိန်းကလေးတွေကို အလိုက်သင့်ပါလာအောင် ခေါ်သည့်နည်းတမျိုးပါပဲ … ။ ခုလဲ ဂျာဂျာတယောက် ကားအောက် အလိုလို ဆင်းမိလျှက်သား ဖြစ်သွားရတော့သည်ပေါ့။ … ဂျာဂျာ သိလိုက်ပါပြီ … သူမဘ၀ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံဖြစ်တော့မည်ဆိုသည်ကို ။ သို့ပေမယ့် သူမ မကျေနပ်တာက ခုထိ ကိုလတ်က ချစ်သည်လို့တောင် တခွန်းမှ ဖွင့်ဟမပြောသေး။ သူမ အပေါစား ဆန်လွန်းနေပြီလား … ။ တွေးရင်းတွေးရင်း ဝမ်းနည်းလာသည်မို့ ဂျာဂျာ ရှိုက်ကြီးတငင် ကို ငိုချပြစ်လိုက်မိတော့သည်။
‘ ဟင် … ဂျာဂျာ ဘာဖြစ်လို့လဲဟင် … ‘ ဂျာဂျာ ရှိုက်ကြီးတငင် တကယ်ငိုတော့ ကိုလတ် ပြာသွားသည်။ .. သူက ကောင်မလေးတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုလိုချင်ချင်ရှိနေမှ လုပ်ချင်သူဖြစ်၏။ အလိုမတူပါပဲ မတရားကျင့်တာမျိုးကျ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့ မရ။ .. ထို့ကြောင့် ဂျာဂျာ အခုလို ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုတော့ ရှေ့မဆက်ဖြစ်ပဲ ခနရပ်ကာ မေးလိုက် မိခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျာဂျာက မဖြေ။ … ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ယမ်းကာ အားရပါးရ ဆက်ငိုနေသည်။ ကိုလတ်က လွှတ်ပေးလိုက်ပြီမို့ အနားမှ ဆိုဖာတခုပေါ် ထိုင်ချလိုက်ပြီး မနားတမ်းကို ငိုနေမိခြင်းဖြစ်ပါ၏ ကိုလတ်ခေါင်းထဲ အတွေးတခု လက်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။
ရည်းစားရှိသည်ဆိုပေမယ့် အစိမ်းသက်သက်လေး။ .. ဖြစ်ချင်တော့ အခြေအနေတွေက တွန်းပို့လိုက်လို့ မရည်ရွယ်ပါပဲ ချက်ခြင်းကြီး ဇာတ်လမ်းက ဖန်လာရ ပေမယ့် သူက ခုချိန်ထိ သူမကို ချစ်တယ်လို့တောင် မပြောရသေး။ … ဒါကြောင့် ငိုနေတာပဲဖြစ်ရမည်။ ဒါဆိုလျှင်တော့ အနာသိလျှင် ဆေးရှိရမည်ပေါ့။ … ကိုလတ် က ဂျာဂျာ ငိုနေသော ဆိုဖာနားတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။ ‘ ဂျာဂျာ …. ‘ ဂျာဂျာက မော့မကြည့်။ .. ငိုမြဲဆက်ငိုနေသည်။ ‘ ဂျာဂျာ … ဆရာ့ကို ကြည့်ပါဦး။ … ဆရာ့ကို စိတ်ဆိုးနေတာလား … ‘ ကိုလတ်က နူးနူးညံ့ညံ့လေး ခေါ်လိုက်ရင်း ဂျာဂျာ့ ပါးလေးနှစ်ဖက်ကို လက်နှင့် အသာအုပ်ကိုင်ကာ ညင်ညင်သာသာလေး ခေါင်းကို ဆွဲမော့ယူလိုက်သည်။ ဂျာဂျာ့ ရှိုက်သံလေးတွေ နဲနဲ ကျဲသွား၏။
‘ မဟုတ်ပါဘူး ဆရာရယ် … ဆရာ့ကို စိတ်မဆိုးပါဘူး … ဂျာဂျာ့ကိုယ် ဂျာဂျာ စိတ်ဆိုးမိတာပါ … ‘ ‘ သြော် … ဂျာဂျာ ရယ် … ‘ မျက်ရည်လေးတွေ ဥနေသော မျက်ဝန်းနက်နက်လေးတွေနှင့် သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသော ဂျာဂျာ့မျက်နှာလေးကို ကြည့်ရင်း ကိုလတ်ရင်ထဲမှာ အရင်တုန်းက တခါမှ မခံစားဘူးသော ခံစားမှုတခု ဖြစ်ထွန်းလာသည်။ ဒီကောင်မလေးကို သူတကယ် ချစ်မိပြီ ထင်သည်။ ဂျာဂျာ့လက်လေးတွေကို ကိုလတ် ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လိုက်မိ၏။ ‘ မငိုပါနဲ့ ဂျာဂျာရယ် … ဆရာ ဂျာဂျာ့ကို တကယ်ချစ်တာပါ ….. ‘ ‘ ရှင် … ‘ ‘ တကယ်ပါ … ဟို ကဗျာရူးကောင်နဲ့ ဂျာဂျာ မဖြစ်ခင်ကတည်းက ချစ်နေခဲ့ရတာ … အခြေအနေတွေက မပေးတာနဲ့ ဆရာ ဘာမှမလုပ်ရသေးခင် ဂျာဂျာ ဟိုကောင့်နောက် ပါသွားခဲ့ရတာ .. ။ ခုတော့ ပိုင်ရှင်မှန် လို့ ဆရာ့ဆီ ပြန်ရောက်လာပြီပေါ့ ခလေးရယ် …. ‘ ကိုလတ်အသံက ဆွေးမြည့်တုန်ခါနေသည်။ ရုပ်ရှင်သာဆို အကယ်ဒမီ ရှော့တ် ပေါ့။ … အလိုလို ကမှ မဆွတ်ခင်က ညွတ်ချင်နေခဲ့သူ ဂျာဂျာ့အတွက်တော့ ဒါလောက်က လိုအပ်ယုံမက ပိုနေပါပြီ။
ဂျာဂျာ အငိုတိတ်သွားပြီး ကိုလတ်ကို စိန်းစိန်းကြီး ကြည့်နေသည်။ ‘ ဆရာ တကယ်ပြောတာလား … ‘ ‘ တကယ်ပေါ့ ဂျာဂျာရဲ့ … ပြီးပြီးရော ပြောပြီး နောက်နေ့တွေကျ မတွေ့ရမယ့် မျက်နှာတွေမှ မဟုတ်တာ၊ ဂျာဂျာ့ကို ဆရာတကယ် လက်ထပ်မှာ … ‘ ‘ သွားပါ … အပိုတွေ ….. ‘ ဂျာဂျာ့မျက်နှာလေးက ပြုံးတုံ့တုံ့လေး ပြန်ဖြစ်သွားသည်။ ကိုလတ် ရင်ဘတ်ကို လက်သီးဆုပ်လေးတွေနှင့် ခပ်သာသာလေး လှမ်းထု၏။ ‘ ကဲ … ထဦး .. ။ ငိုထားလိုက်တာ ပေပွနေပြီ … မျက်နှာလေးဘာလေး သွားသစ်ချေဦး … ‘ ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့ ပါးလေးကို လိမ်ဆွဲရင်း ကားပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့သော ဂျာဂျာ့ ကျောပိုးအိတ်လေးကို လှမ်းယူပေးသည်။ ‘ အို … ဆရာ မယူနဲ့ .. ဂျာဂျာ့ဖာသာ ယူမယ် … အထဲမှာ ထမီတွေ ပါတယ် … ‘ ဂျာဂျာက သူ့ကျောပိုးအိတ်လေးကို ကိုလတ်လက်ထဲမှ အတင်းပြန်လုသည်။
‘ သြော် … ဒါကြောင့် အိတ်က ဖောင်းလှချည်လား ထင်နေတာ … ဘယ့်နှယ့်ကြောင့် အဝတ်တွေအကုန် ထည့်လာရတာလဲ … တခါတည်းများ ဟိုအကောင်နဲ့ ခိုးရာလိုက်ဖို့ လုပ်ထားလို့လား … ‘ ကိုလတ်က မျက်မှောင်ကြီးကုံျ့ပြီး မကျေမချမ်းလေသံနှင့် မေးလာသည်။ ဂျာဂျာ ခစ်ကနဲ ရီလိုက်မိ၏။ ‘ ဆရာဟာလေ … သဝန်တိုစရာမရှိ ရှာကြံ တိုနေတယ် … နက်ဖြန် အလုပ်တက်တော့ ဝတ်ဖို့ ယူနီဖောင်း တွေပါရှင့် … သူနဲ့က ဘာဆိုဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးရှင် ..ယုံပါ …. ဆရာနဲ့သာ …. ‘ ဂျာဂျာက စကားမဆက်တော့ပဲ ရုတ်တရက်ရှက်သွားဟန်ဖြင့် မျက်နှာလေးရဲတွတ်သွားသည်။ ‘ ဆရာနဲ့က ဘာဖြစ်လဲ … ဆက်ပြောလေ … ‘ ကိုလတ်က ချောင်ပိတ် မေးသည်။ ‘ တော်ပြီ … မပြောဘူး … ဆရာ အရမ်းလူလည်ကျတယ် … ‘ ဂျာဂျာက ချစ်မျက်စောင်းလေး လှမ်းထိုးသည်။ ကျောပိုးအိတ်လေးကို ဇစ်ဖွင့်လိုက်ပြီး အထဲမှ ကရင်ပတ်ဖ် ဘူးလေးတွေ နှုတ်ခမ်းနီတောင့်လေးတွေ ထုတ်ယူသည်။
ကိုလတ်က ကျောပိုးအိတ်ထဲ အသာကဲကြည့်၏။ ဟုတ်ပါသည် … ယူနီဖောင်းတွေကလွဲလို့ တခြားအဝတ်အစားတွေ မပါပါ။ .. ဂျာဂျာ သူ့ကို မညာတာ သိလိုက်ရတော့ ကျေနပ်သွားသည်။ ‘ ဟဲ့ … ယူနီဖောင်းကလဲ တစုံထဲ မကပါလား … ‘ ‘ အို … ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ထမီတွေလျှောက်ကိုင်ကြည့်နေရတာလဲ .. ဖယ်ပါ ဆရာရဲ့ ..။ ဂျာဂျာ့အကျင့်က အမြဲတမ်း ယူနီဖောင်း အပိုတစုံဆောင်ထားနေကျပဲလေ .. ဒါမှ မတော်တဆ ဝါ့ဒ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း သွေးတွေဘာတွေ ပေရင် ချက်ခြင်းလဲစရာ တစုံအသင့်ရှိနေအောင်လို့ … ‘ ဂျာဂျာက ရှင်းပြရင်း စောစောက ငိုထားမိလို့ ပေပွနေသည့် သူမ အငိုမျက်နှာလေးကို ပြန်သန့်စင်ဘို့ အိမ်နောက်ဖက်ထဲ ဝင်မည်ပြုသည်။ ကိုလတ် အတွေးတခုပေါက်လာသဖြင့် ဂျာဂျာ့လက်ကို လှမ်းဆွဲထားလိုက်၏။
‘ ဂျာဂျာ .. ခန ‘ ‘ ရှင် … ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာ … ‘ ဂျာဂျာ မျက်လုံးလေး အဝိုင်းသားနှင့် လှည့်မေးသည်။ ‘ မျက်နှာသစ်ရင်းနဲ့ အခုအဝတ်တွေကို ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ ပြန်လဲလိုက်ပါလား … ‘ ‘ အို … ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဆရာရယ် … ‘ ‘ တကယ်ပြောတာပါ .. ဂျာဂျာရဲ့ .. ဂျာဂျာ့ကိုယ်လုံးလေးကို ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ အားရပါးရ ကြည့်ချင်လို့’ ‘ ဟွန်း … ပိုကို ပိုတယ် .. ‘ ဂျာဂျာ နှုတ်ခမ်းလေးစူ ခြေလေးဆောင့်ရင်း ကျောပိုးအိတ်လေးကို ပြန်လာယူသည်။ ပြီးမှ နောက်ဖေးဘက် ဝင်သွား၏။ နှစ်ယောက်သား ညစာလဲ မစားရသေး … သို့ပေမယ့် အကြောင်းမဟုတ်ပါ၊ အိမ်မှာ စည်သွပ် ဗူးတွေ ကြက်ဥတွေ ဝက်အူချောင်းတွေ အများကြီး ရှိပါသည်။ .. ဆာမှပဲ ထလုပ်ပြီး စားတော့မည်ဟု ကိုလတ် တွေးနေမိသည်။ အချိန်ဘယ်လောက် ကြာသွားသည် မသိ။ … အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ငွေလမင်းလေး ရုတ်တရက် သာ သွားသည်။ ဟုတ်ပါသည် … ဂျာဂျာရယ်လေ .. ။
အဖြူအနီ ယူနီဖောင်းလေးနှင့် မျက်လွှာလေးချကာ မခို့တယို့လေး ရပ်နေသည်။ မျက်နှာသစ်လိုက်ယုံမက မိတ်ကပ်နှင့် ကရမ်ပတ်ဖ်ပါးပါးလေးပါ ပြန်လိမ်းထားသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ သူတလကြမ်း စုပ်နမ်းလိုက်သဖြင့် ဆေးသားအကုန်ပြယ်ကုန်ပြီဖြစ်သော နှုတ်ခမ်းအိအိလေးတွေကိုလဲ ပန်းရောင်နုနုဆိုးဆေးလေးတွေ ပြန်တင်ထားသည်။ ဧည့်ခန်းမီးချောင်းရောင်အောက်တွင် ဂျာဂျာတယောက် အလှကြီး လှနေတော့သည်။ လှမ်းကြည့်လိုက်မိသော ကိုလတ် မှင်တက်လို့ပင် သွားရ၏။ ဂျာဂျာ့ထုံးစံအတိုင်း ရင်ဖုံးအင်္ကျီအဖြူလေးက အသားအိအိလေးနှင့် တင်းရင်းကျပ်ထုပ်နေသည်။ အိတုံသား ထမီအနီလေးကတော့ ခါးနှင့် တင်သားအိအိထွားထွားကြီးတွေပေါ်မှာ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်လေး … ။ သံပါတ်ပေးလိုက်သော စက်ရုပ်ကြီးပမာ ကိုလတ် ထိုင်နေရာမှ စွေ့ကနဲထပြီး ဂျာဂျာ့အနားရောက်သွား၏။ ဂျာဂျာ မော့မကြည့်ပဲ ကိုလတ် အနားရောက်လာတာ သိနေသည်။
ကိုလတ် အသက်ရှုသံကြီးတွေက ပြင်း ထန်လွန်းနေသည်ကိုး .. ။ ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့ကို ရှေ့တည့်တည့်မှ ကြည့်သည်၊ ဘေးစောင်းကြည့်သည်၊ ဂျာဂျာ အနေခက်လာသည်။ ကိုယ်တော်က ထိုမျှနှင့် အားမရသေး .. ။ နောက်ဖက်မှ ပတ်ကြည့်ပြန်သည်။ ဂျာဂျာ ထွက်ပြေးချင်စိတ်ပင် ပေါက်လာမိသည်။ ကိုလတ်အကြည့်တွေအောက်မှာ တကိုယ်လုံးများ အရည်ပျော်ကျသွားတော့မလား လို့ ထင်မှတ်ခံစားရ၏။ ယူနီဖောင်းဆိုပေမယ့် ဆေးရုံမှာမဟုတ်ပဲ အပြင်အဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီး လဲလိုက်ခြင်းမို့ အတွင်းခံတွေက မလဲဖြစ်လိုက်ပါ။ .. အဲဒီတော့ ဂျာဂျာ့ အင်္ကျီအဖြူလေးအောက်တွင် ဆေးရုံမှာလို ဘော်လီမဟုတ်ပဲ ပုံဆန်း ဘရာစီယာလေးနှင့်ဖြစ်နေတာ ကိုလတ် မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့လိုက်ရ၏။ အိုး … ဟန်ကျလေစွ။ ဒီလိုလေး ဂျာဂျာ့ကို စိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်နေခဲ့ရတာ အကြိမ်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်။ ဒီနေ့တော့ ကိုလတ် ကံကောင်းစွာနှင့် လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝ ရလေပြီပေါ့။ .. ကြည့်ပါဦး … ။
အချိုးအစားကျလှသော ကိုယ်လုံးလေးပေါ်တွင် အသားအိအိ အင်္ကျီဖြူခပ်ပါးပါးလေးက တင်းရင်းဖိကပ်လို့ နေသည်။ … ထိုအသား ခပ်ပါးပါးလေးအောက်တွင် ပုံဆန်းဘရာစီယာ မျှင်မျှင်လေးက အတန်းလိုက်လေး။ ဆူဖြိုးသော ဂျာဂျာ့ အသားဆိုင်တွေကို ဘရာစီယာကြိုးမျှင်လေးက ခပ်တင်းတင်းစည်းနှောင်ထားသဖြင့် အသားလေးတွေ ချိုင့်ဝင်နေတာကိုပင် အင်္ကျီဖြူလေးကိုထိုးဖောက်ကာ ကိုလတ် မြင်နေရသည်။ … နောက်ကျောဘက်ကနေ ကိုလတ် ကြည့်နေတာ ကြာလွန်းလာတော့ ဂျာဂျာ နောက်ကျောမလုံသလိုခံစား လာရသည်မို့ ကိုလတ် ဘာတွေများလုပ်နေသလဲလို့ နောက်ကို ခေါင်းလေးစောင်းငဲ့ကာ ပြန်ကြည့်သည်။ ကိုယ်လေးကို လိမ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားရသည်မို့ ဂျာဂျာ့တင်သားကြီးတွေက အိတုံထမီအနီလေးအောက်မှ တင်းကနဲ ရုန်းထွက်လာကြမလိုဖြစ်သွား၏။ ကိုလတ် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပါ။
ဝါ့ဒ်ထဲမှာ ဒါမျိုးမြင်ရလေတိုင်း မနဲစိတ်ထိန်းထားခဲ့ရသမျှ ခုတော့ ကိုလတ် လွတ်ထွက်သွားရတော့သည်။ ‘ အား … သေပြီဆရာ … ‘ ကိုလတ်လက်ကြီးတွေက ဂျာဂျာ့တင်သားအိအိကြီးတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ညှစ်လိုက်သည်မို့ ဂျာဂျာ ရုတ်တရက်လန့်ကာအော်မိသွားရသည်။ အလိုလိုကမှ ရင်တွေက တုန်နေချိန်မို့ ဖင် အားရပါးရ အကိုင်ခံလိုက်ရတော့ ဂျာဂျာ မတ်တပ်ပင်ကောင်းကောင်းမရပ်နိုင်တော့။ .. ဒူးလေးတွေ ညွှတ်ကာ နောက်ကိုလဲပြိုကျသွားသည်။ .. ကိုလတ်က နောက်မှာရပ်နေချိန်ဆိုတော့ ကိုလတ်ရင်ခွင်ထဲ အလိုလို ဂျာဂျာ့တကိုယ်လုံး ရောက်သွားတော့သည်။ ကိုလတ်က ရင်ခုန်စရာကောင်းလှသော ဂျာဂျာ့ကိုယ်လုံးလေးကို အားရပါးရ ဆီးပြီးဖက်လိုက်သည်။ စောစောကမှ အလှပြန်ပြင်ထားသည်မို့ ဂျာဂျာ့ကိုယ်လေးက မွှေးပံျ့သင်းမြ နေသည်။ .. ကိုလတ်စိတ်တွေ မုန်ယိုလာတော့သည်။ ဆက်ဒဇင်(ှေိငျာ ) လို့ ခေါ်ကြသည့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ကာမဆန္ဒတွဲပြီး ခံစားလိုသည့် စိတ်က ကိုလတ်ထံ ရုတ်တရက်အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ ဝင်ရောက်လာသည်။ .. ‘ ဗြိ … ဗြိ … ‘ ‘ အား … ဆရာ ဆရာရယ် … ‘ ဘာမှ မစဉ်းစားနိုင်ခင်မှာပင် ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့ ယူနီဖောင်းအင်္ကျီဖြူလေးကို ကြမ်းတမ်းစွာ ဆွဲဖြဲပြစ်လိုက် လေတော့သည်။
ဂျာဂျာ အလန့်တကြား အော်မိတော့သည်၊ .. ယူနီဖောင်း အပိုတစုံရှိသေးမှန်း ပြောမိတာ မှားပြီထင်သည်။ ကိုလတ်ပုံစံက လူစိတ်ပျောက်နေသလိုဖြစ်လာသည်မို့ ဂျာဂျာ အလန့်တကြား ရုန်းမိ၏။ သို့ပေမယ့် အရာမထင်တော့ .. ။ ကိုလတ်ရင်ခွင်ထဲတွင် ကျကျနန ရစ်ပါတ်ချုပ်နှောင်ခံထားရပြီမို့ ဘယ်လိုမှ မရုန်းသာတော့ပါ။ .. ကိုလတ်ပြုသမျှ နုရတော့မည့် ဂျာဂျာ ဖြစ်နေရပါပြီ။ ‘ ဗြိ ဗြိ .. ဗြစ်ဗြစ် .. ‘ ‘ အား … သေပြီ သေပြီ … ဆရာရယ် သနားပါဦး … ‘ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆွဲဖြဲရင်း လက်မောင်းနားရောက်တော့ အင်္ကျီအသားက ရုတ်တရက် ဆွဲဖြဲမရပဲ တစ်နေသည်မို့ ကိုလတ်က ပိုပြီး အားစိုက်ကာ ဆွဲဖြဲပြစ်တော့ ဂျာဂျာ့လက်မောင်းသား နုနုလေးတွေ သွေးခြေပင်ဥကုန်ပြီလား မှတ်ရသည် ..။ ဘယ်လောက်တောင်းပန်တောင်းပန် ကိုလတ်ကတော့ မရပ်ရေးချ မရပ်တော့ ..။ ဂျာဂျာ့အသံတွေကို မကြားပဲ ကိုလတ်နားထဲမှာ သူအင်္ကျီဆွဲဖြဲရာက ထွက်လာသော တဗြိဗြိ အသံတွေပဲ လွှမ်းမိုးနေသည်။
ထိုအသံတွေက သူ့ကို ပိုပြီး မုန်ယိုအောင် လုပ်ပေးနေကြသည်။ ဒီလိုနှင့် ခနအကြာတွင် ဂျာဂျာ့ယူနီဖောင်းအင်္ကျီအဖြူလေးမှာ အစိတ်စိတ်အမွှာအမွှာ ဖြစ်ကာ ကိုယ်ပေါ်မှ လျှောကျ သွားရတော့သည်။ .. ‘ အယ် အယ် .. ဆရာ ဆရာ .. မလုပ်ပါနဲ့ .. မလုပ်ပါနဲ့ .. ဂျာဂျာ ချွတ်ပေးပါ့မယ် … ‘ အင်္ကျီကိုချေမှုန်းပြီးတော့ ကိုလတ်လက်ကြီးတွေက ဂျာဂျာ့ အိတုံထမီလေးကို ကိုင်လာသည်၊ ဆွဲဖြဲမည်ပြင် လာပြန်သည်။ .. ဒီတခါတော့ ဂျာဂျာ မနေသာတော့။ .. ကိုလတ် ဆွဲမဖြဲခင် သူမထမီအနီလေးကို ကမန်းကတန်း ချွတ်ချပေးလိုက်ရလေသည်။ မဟုတ်ရင် ဒါလေးလဲ ကိုလတ်လက်ချက်မိသွားဦးမှာ။ .. ထမီတကွင်းဆိုလဲ တန်ဘိုးက နဲတာမှ မဟုတ်တာလေ .. နော် ။
ခုတော့ မီးချောင်းမီးရောင် ဖြူဖြူအောက်တွင် ဂျာဂျာ့တကိုယ်လုံး အဝတ်ဆိုလို့ ကျောတန်းဘရာစီယာလေးနှင့် အောက်က ပင်တီအနီရောင်လေးပဲ ကျန်တော့သည်။ … ကိုလတ်က ခုမှ လူစိတ်ပြန်ဝင်လာဟန်နှင့် သက်ပြင်းကြီးတချက်မှုတ်ထုတ်ကာ နောက်နဲနဲဆုတ်လိုက်၏။ ‘ ဆရာရယ် …. ‘ ဂျာဂျာ ခပ်တိုးတိုးညဉ်းတွားယုံမှလွဲပြီး ဘာမှ မပြောနိုင်တော့ပါ။ ကိုလတ်က ဘရာစီယာနှင့် ပင်တီလေးနှင့် လှချင်တိုင်းလှနေသော ကြွေရုပ်လေး ဂျာဂျာ့ကို အငမ်းမရပင် စိုက်ကြည့်နေတော့သည်။ ပြီးတော့မှ ကြမ်းပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်လေ၏။ သူ့ခေါင်းကို သူ လက်နှစ်ဖက်နှင့် ခပ်တင်းတင်းဖိညှစ်ရင်း ခါယမ်းပစ်လိုက်သည်။ .. သူ့စိတ်တွေ ဘာဖြစ် သွားပါလိမ့်နော် .. ။ ‘ ဆရာ .. ဆရာ .. နေလို့ကောင်းရဲ့လားဟင် .. ဂျာဂျာဘာလုပ်ပေးရမလဲ … ‘ အရေးထဲ မိဂျာဂျာက စိုးရိမ်တကြီးနှင့် သူ့ကိုပြေးပွေ့ထူသည်။
အားချင်းက မမျှလေတော့ သူကတော့ မတ်တပ်ရပ်မိမလာပဲ ဂျာဂျာ့ကိုယ်လေးသာ သူ့ရင်ထဲ လဲပြိုကျလာပြန်၏။ ‘ ပြွတ် .. အင်း ဟင်းဟင်း .. ‘ အမှတ်မရှိသည့် မိဂျာဂျာ .. ။ ခံရတာတောင် နဲသေးသည်လို့ သူမဖာသာ တွေးလိုက်မိသည်။ ကိုလတ်က သူမနှုတ်ခမ်းတွေကို ပြတ်ထွက်မတတ် ဖမ်းစုပ်ပြစ်လိုက်သည်။ .. တူးပိစ်ကလွဲလို့ တခြားဘာမှ မကျန်တော့သည့် သူမကိုယ်ပေါ်မှ အသားစိုင်တွေကို မညှာတမ်းဖြစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်နေပြန်သည်။ ‘ အား .. ဟာ့ ဟာ့ .. ဆရာ ဆရာ .. ဘာလုပ်တာလဲ ရှီး .. အား .. ‘ ကိုလတ်က သူ၏ နောက်ထပ်ဆန္ဒတခုကို အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါလေပြီ။ ဂျာဂျာ့ကို စတွေ့ပြီးကတည်းက သူမနာမည်ကို ဂျာဂျာလို့ ခေါ်လိုက်တိုင်း သူမကို ဘာဂျာပေးချင်စိတ်တွေ ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရ ပေါ်ပေါ်လာတတ်သည်ဟု စာရှုသူတို့ ဖတ်ခဲ့ရပြီးပြီ မဟုတ်လား။ … ခုတော့ ကိုလတ် ဆန္ဒပြည့်ဝသွားရလေပြီ။
ဂျာဂျာ့ကိုယ်လေးကို ကြမ်းပေါ် အသာလှဲချလိုက်ပြီး ပင်တီအနီလေးအောက်မှ ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ စောက်ဖုတ် နေရာလေးကို ကိုလတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေက အငမ်းမရ ဖိကပ်ပြီး စုပ်ပြစ်လိုက်တော့ ဂျာဂျာ့ အူတွေ အသဲတွေ ကလီစာတွေ အကုန် ကိုလတ်စုပ်အားနှင့်ပါသွားပြီလား ထင်လိုက်ရတော့သည်။ ဂျာဂျာ ထွန့်ထွန့်လူးသွားသည်။ … ကိုလတ်ကို အားလဲ နာသည်။ .. ကိုယ် လေးစားရင်းစွဲရှိခဲ့သော အလုပ်ထဲက ကိုယ့်ဆရာမို့ မျက်နှာလဲပူနေ မိရသည်။ .. ကိုလတ်ကတော့ ဘာဆိုဘာကိုမှ ဂရုစိုက်သည့်ပုံ မရှိတော့။ ပင်တီလေးပေါ်မှ စုပ်နေရတာ အားမရသည့်အလား ကိုလတ်က ပင်တီလေးကို ဆွဲဖြဲပစ်လိုက်ပြန်သည်။ ‘ ဗြိ ဗြိ … အိုး … ‘ ပင်တီကတော့ ထမီလို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချွတ်ပေးလို့ ရတာမဟုတ်လေတော့ ဂျာဂျာ ဘာမှ မတတ်နိုင်လိုက်။
မျက်စိတမှိတ်အတွင်းမှာပင် ပင်တီလေး စုတ်ပြဲသွားပြီး သူမ ဆီးခုံမို့မို့လေးနှင့် ရတနာရွှေကြုတ်ခံတွင်းဝမှ စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက ထင်းကနဲ ဝင်းကနဲ ပေါ်ထွက်လာရတော့သည်။ ကိုလတ်က မျက်နှာတခုလုံးမှောက်ချကာ ဂျာဂျာ့ စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနှင့်ဖိကပ်လိုက်ပြီး ဖူးကနဲ လေတချက် ခပ်ပြင်းပြင်းမှုတ်သွင်းလိုက်သည်။ .. ‘ အိုး … မိုင် … ‘ ဂျာဂျာ ကော့ပြန်တက်သွားသည်။ .. တင်ပါးကြီးက ကြမ်းပြင်မှ တပေလောက်ပင် မြောက်တက်သွား၏။ ကိုလတ်နှိုးဆွမှုကြောင့် စိုရွှဲနှင့်နေသော အရည်တွေက မှုတ်လိုက်သည့်ခပ်ပြင်းပြင်းလေအားနှင့် လွင့်စင်ကာ ပတ်ဝန်းကျင်တခွင် ပြန့်ထွက်သွားကြသည်။
‘ အာ့ .. အား … ‘ ကော့ပေးထားသလိုဖြစ်နေသည့် ဂျာဂျာ့ရွှေကြုတ စောက်ဖုတ်အ၀ လေးကို ကိုလတ်က ပါးစပ်တခုလုံး ဟနိုင်သမျှ ဟကာ ငုံခဲလိုက်ပြီး စုပ်ယူလိုက်ပြန်သည်။ .. ဂျာဂျာ့တင်ပါးကြီးတွေ ကြမ်းပေါ် ဝုန်းကနဲ ပြန်ပြစ်ကျ၏။ တင်ဆုံသားအိအိကြီးတွေသာ မရှိလျှင် တင်ပါးရိုးတွေပင် ကျိုးလောက်သည်။ .. မိန်းကလေးတွေ တင်ဆုံ အိထွားကြတာ သဘာဝတရားက ဒီလိုအချိန်မျိုးတွေအတွက် ကြိုတင်စီမံပေးထားတာပဲ ဖြစ်ရမည်။ .. ခုလဲ ကိုလတ် ဘာဂျာအစွမ်းအောက်တွင် ဂျာဂျာ့တင်ပါးကြီးတွေက ဒလစပ်ခါယမ်းနေလိုက် မြောက်တက် သွားလိုက် .. ပြန်ပြစ်ကျလာလိုက်ဖြစ်နေရာ တင်သားကြီးတွေ အိကနဲ အိကနဲကို ဖြစ်နေရတော့သည်။ နာလို့ နာရမှန်းလဲ မသိ။ .. ဂျာဂျာတို့ ဘာဂျာ အရသာကို ကောင်းကောင်းသိသွားပြီ။
ကိုလတ်က ရိုးရိုး စုပ်နေ မှုတ်နေရာမှ လျှာကြီးထုတ်ကာ အပြားလိုက်လျက်လိုက် .. လျှာဖျားလေးနှင့် အစိလေးကို ထိုးကော်ဆွလိုက် .. နှုတ်ခမ်းသားတဖက်စီကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနှင့် ဖိညှပ်ဆွဲယူလိုက် လုပ်နေလေရာ ဂျာဂျာ ကော့ကော်ကန်ကား ဖြစ်နေရတော့သည်။ .. အရည်တွေလဲ ထွက်ကျလာလိုက်တာ ကိုလတ်နှုတ်ခမ်းတွေလဲ ပေပွနေပြီ။ .. ဒါနဲ့တင်မရပ်သေးပဲ ထပ်ထွက်လာသောအရည်တွေက ကြမ်းပေါ်မှာ အိုင်ထွန်းလို့ကို နေပြီ။ .. ဘယ်နှစ်ချီတောင် ပြီးကုန်ပြီလဲ မသိတော့။ .. ‘ အယ် .. အယ် … မလုပ်ပါနဲ့ ဒါလေးတော့ … ‘ အောက်မှာ ဘာဂျာပေးနေရင်းက ကိုလတ်လက်ကြီးတွေက အပေါ်ဘက်တရွေ့ရွေ့တက်လာကာ ဘရာစီယာ လေးကို လှမ်းကိုင်လာတော့ ဂျာဂျာ ပြာပြာသလဲပင် ကျောလေးကြွပြီး အမြန်ချိတ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ရသည်။ မဟုတ်လျှင် ဒါလေးလဲ ကိုလတ်က ချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်။
ဆွဲဖြဲပြစ်နေဦးမှာ။ ခုတော့ ဂျာဂျာ့အပေါ်ပိုင်းလဲ ဗလာကျင်းသွားပြီ။ ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းဆီ လျှောကနဲတက် လာပြီး အရည်တွေပေပွနေသော နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနှင့် ဂျာဂျာ့ နို့အုံကြီးတွေကို အငမ်းမရ စို့လိုက်ပြန်သည်၊ ‘ ပြွတ် ပြွတ် … ပလပ် ပလပ် … ‘ ‘ အား .. အင့် .. အဟင့် … ‘ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် တခုမှ ခံရချက် မသက်သာပါလားနော် .. ။ ဂျာဂျာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ တွေးမိသည်။ … စောစောက အောက်ပိုင်းမှာ ဘာဂျာပေးခံရတာကလဲ တမျိုး ခံစားချက်ပြင်းထန်သလို အခု အပေါ်ပိုင်းမှာ နို့စို့ခံရတော့လဲ ရင်ထဲက နှလုံးသားတွေပါ ကိုလတ်ဆီ ပါသွားပြီလား ထင်မှတ်မှားရပြန်သည်။ .. ကိုလတ်က ဒလကြမ်းကို အားမနာတမ်း စို့နေသည်။ … ဘယ်ဘက်ကိုစို့လျှင် ညာ၊ ညာဘက်ကိုစို့လျှင် ဘယ်ဘက်နို့အုံကို လက်နှင့်အပီအပြင် သမ သေးသည်။ တော်တော်ကြာလာတော့ ဂျာဂျာ မခံနိုင်တော့ … ။ နို့အုံသားနုနုလေးတွေ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကျိန်းစပ်နာကျင်လာရပြီ။ ကိုလတ်စို့သမျှ ရင်ဘတ်လေး ကော့ကော့ပြီး ခံနေရသည်မို့ နောက်ကျောတွေလဲ ညောင်းလှပြီ … ။
အောက်မှာလဲ အရည်တွေ အိုင်ထွန်းနေပြီ။ … ‘ အို … ဆရာရယ် … စို့လို့ မဝသေးဘူးလား … တော်ပါတော့ … ‘ ဂျာဂျာ ထုတ်ကိုတောင်းပန်ရတော့သည်။ အရင်က သူမတောင့်တနေခဲ့ရသော အထိအတွေ့တွေက ခုလို တကယ်တမ်း ကြုံလာရတော့ ထင်ထားသည်ထက်ကို ကောင်းနေပေမယ့် ကိုလတ်က ကြမ်းလွန်းတော့ ဂျာဂျာ မခံနိုင်ဖြစ်လာရခြင်းပါ … ။ ကိုလတ် စိတ်ဆိုးသွားမှာလဲ စိုးရိမ်နေမိသည်၊ .. အာရုံတွေ များလိုက် ပါဘိတော့ ဂျာဂျာရယ် … ။ ကိုလတ်က ဒီတခါတော့ ဂျာဂျာ့စကားကို နားထောင်သည်။ နို့စို့နေတာ ရပ်လိုက်ပြီး ပက်လက်လေးဖြစ်နေသော ဂျာဂျာ့ပေါ် တကိုယ်လုံးထပ်မိအောင် လျှောကနဲ တက်လာကာ နေရာပြောင်းယူလိုက်သည်။
ဂျာဂျာ့နို့အုံထွားထွားကြီးတွေက ကိုလတ်ရင်ဘတ်အောက်မှာ ပြားကနဲဖြစ်သွားပြီး ဘေးဘက်ကိုပင် နို့အုံသားတွေ လျှံကျလာသည်။ မျက်နှာချင်း အအပ်မိတွင် ကိုလတ် နှုတ်ခမ်းကြီးတွေက ခုနကမှနှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး ပါးပါးပြန်တင်ထားသည့် ဂျာဂျာ့နှုတ်ခမ်း အိအိထွေးထွေးလေးတွေကို မလွတ်တမ်းဖမ်းစုပ်ထားလိုက်သည်။ အသာအယာဖွဖွလေး စုပ်နမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ပါးစပ်ကို အကျယ်ဆုံးဟကာ တရှိန်ထိုးစုပ်ပြစ်လိုက်ခြင်းမို့ နှုတ်ခမ်းဒေါင့်နားက မှဲ့နက်ကလေးပင် ကိုလတ်၏ စုပ်နမ်းသည့် စက်ကွင်းထဲ ဝင်သွားရသည်။ ကိုလတ်က ဒီမှဲ့နက်လေးကိုကြည့်ပြီး ဂျာဂျာ့ကို စွဲလမ်းနေခဲ့ရ သူမို့ မှဲ့နက်လေးကို လျှာထိပ်နှင့် အသာထိုးကာ ရက်ရက်ပေးနေပြန်သည်။ ခံစားမှုက ထုတ်ဖော်ပြောရန် ခက်လှအောင်ကို ဂျာဂျာ့အတွက် ထူးခြားဆန်းသစ်လှသည်။ … အရင်ဘဲ ကိုလွင်က ဒီမှဲ့လေးအကြောင်း ကဗျာတွေဖွဲ့ပြ တတ်တာကလွဲလို့ ကိုလတ်လို လက်တွေ့ဆန်ဆန် မလှုပ်ရှားတတ်ခဲ့။ .. ခုတော့ ဒီမှဲ့လေးက ကိုလတ်နှင့် ကျမှ ဂျာဂျာ့အတွက် အဓိပ္ပါယ် ပိုရှိသွားရပြီ။
ကိုလတ်ကြမ်းသမျှ အံကြိတ်ခံရင်း ဂျာဂျာ တလူးလူးတလွန့်လွန့် ဖြစ်နေရသည်။ နှစ်ယောက်သား တကိုယ်လုံး ထပ်ကပ်မိနေသည်မို့ အောက်ပိုင်းချင်းလည်း ကပ်နေမိသည်ဖြစ်ရာ ကိုလတ် လီးတံကြီးက ဂျာဂျာ့ဆီးခုံလေးနှင့် ပေါင်တံဖြိုးဖြိုးနှစ်ချောင်းကြားတွင် ညပ်နေသည်။ ဒီတော့ ဇက်ကိုဖိချုပ် ထားခံရသော မြွေတကောင်လို ကိုလတ်လီးကြီးက ဒေါသတကြီး ရုန်းကန်နေရာ ဂျာဂျာ့ချက်ကောင်းနေရာ လေးတွေကို လျှောက်ပြီးပွတ်တိုက်ထိုးဆွနေသလိုဖြစ်နေရသည်။ .. ဂျာဂျာ မနေနိုင်တော့။ .. ခံချင်လာပြီ။ ‘ ဟင့် ဟင့် … လုပ်ပါတော့ ဆရာရယ် … ဂျာဂျာ မနေနိုင်တော့လို့ပါ … ‘ အရှက်ကို ဘေးချိတ်ပြီး ဂျာဂျာလေး တောင်းပန်ရတော့သည်။ .. ပြောချလိုက်မိပြီးမှ ကိုယ့်စကားကိုယ်ပြန်ရှက်မိတော့ မျက်နှာလေးက ရဲတွတ်သွားသည်။ ကိုလတ်က မျက်နှာချင်းခွာလိုက်ပြီး ခေါင်းထောင်ကာ ဂျာဂျာ့ရှက်မျက်နှာရဲရဲလေးကို အရသာခံကြည့်နေ ပြန်၏။
ကိုလတ်မျက်နှာကြီးက ပြုံးပြုံးကြီးလုပ်နေရာ ဂျာဂျာ သီးမခံနိုင်တော့ပဲ ကိုလတ်နှာခေါင်းကြီးကို လိမ်ဆွဲ ပြစ်ထည့်လိုက်မိသည်။ .. ‘ အား … နာတယ် ဂျာဂျာရဲ့ … ‘ ‘ သြော် … သူ့ကျတော့ နာတတ်တယ် … သူများကျတော့ မနာတတ်တာကျနေတာပဲ .. ကိုင်လိုက်ညှစ် လိုက်တာများ ကိုယ်ချင်းမစာ … ဟွန်း .. ‘ ‘ ကောင်းတော့ ကောင်းတယ်မဟုတ်လား ဂျာဂျာ ရဲ့ …. ‘ ‘ သွားပါ .. ဆရာ့ကိုတော့ ကြောက်တောင်လာပြီ .. အတွေ့အကြုံက ဘယ်လောက်တောင် စုံထားလဲမသိ’ ဂျာဂျာ့ချစ်မျက်စောင်းလေးက ကိုလတ်ရင်ကို ကလိကလိ ဖြစ်စေသည်။ ‘ အဲလို အတွေ့အကြုံစုံလို့လဲ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့ ဂျာဂျာ့ကို ရအောင်ဖန်နိုင်တာပေါ့ … ဟုတ်ဖူးလား .. ‘ ‘ ကဲပါ … ဟုတ်ပါတယ် .. ဆရာကြီးရယ် … လုပ်မှာလဲလုပ်ပါဦး .. ဒီက မိန်းကလေးတန်မဲ့တောင်းပန် နေရတာ အားနာပါဦး ရှင်ရယ် … ‘ ‘ အောရိုက် … ‘ ကိုလတ်က ခေါင်းကို ဆတ်ကနဲ တချက်ငြိမ့်လိုက်သည်။
ဂျာဂျာနှင့်သူနှင့်က ရင်ညွန့်ကနေ ဟိုးအောက်အထိ တောက်လျှောက်ဖိကပ်နေသည်မို့ ဂျာဂျာ့ခြေသလုံးလေးတွေကို ကိုလတ်ခြေဖမိုးတွေက ချိတ်လိုက်ပြီး ဂျာဂျာ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကားကားလေးဖြစ်သွားအောင် အသာဆွဲဖြဲချလိုက်သည်။ ကားထွက်သွားသော ဂျာဂျာ့ခြေထောက်လေးတွေပေါ်မှာ ကိုလတ် ရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက အလိုက်သင့် ဖိကပ်ပါသွားသည်။ .. နှစ်ယောက်သား အပေါ်ပိုင်းတွေက ထိကပ် နေကြသလို ပေါင်တံတွေ ခြေထောက်တွေက ကားထွက်လျှက်သား တောက်လျှောက် ထိကပ်နေကြသည်။ ဆီးခုံချင်းလဲ ထိကပ်နေကြဆဲ။ … ဒီပုံစံက ကိုလတ်အလွန် နှစ်သက်သည့် ပုံစံ … ပက်လက်လုပ်တာချင်းတူတူ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးပုံစံထက် မိန်းကလေးဘက်က ညှစ်အားကိုပိုကောင်းစေသည့် အနေအထားမျိုးဖြစ်သည်။ ဒူးထောင် ပေါင်ကားပေးရမှာ ရှက်တတ်သော မိန်းကလေးတွေ အတွက်လဲ အဆင်ပြေသည်။
ထိုအနေအထားအတိုင်း နေရာယူလိုက်ပြီးသည်နှင့် ကိုလတ် ခါးကို အသာကြွလိုက်သည်။ စောစောက ပေါင်တံတွေကြားတွင် ညပ်နေရသော ကိုလတ် လီးတံကြီးက ကြွားကြွားရွားရွား ထောင်ထလာ လေသည်။ .. ကိုလတ်က လက်တဖက်ကိုအောက်လျှိုပြီး သူ့လီးကြီးထိပ်နှင့် ဂျာဂျာ့ စောက်ဖုတ်လေး အ၀ တည့်သွားအောင် တေ့ပေးလိုက်သည်။ တည့်ပြီဆိုသည်နှင့် လက်ပြန်သိမ်းကာ ခါးကိုပြန်ဖိချလိုက်တော့၏ ‘ ဗြွတ် …… ‘ ‘ အား ဟားဟား …. သေပြီ သေပြီ .. ‘ စောစောကတော့ သူပဲ လုပ်ပါတော့ဆိုပြီး တကယ်လုပ်တော့ ဂျာဂျာ ခေါင်းကိုခါရမ်းကာ ကိုလတ်ရင်ဘတ်ကြီးကို အတင်းတွန်းပစ်နေသည်။ … မိန်းကလေးတွေများ မူယာမာယာကိုများတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါ့ ။
ရည်းစားရှိနှင့်ပြီးသားပေမယ့် ပါကင်မဖွင့်ရသေးသော အပျိုလေးမို့ ဂျာဂျာ့စောက်ဖုတ်လေးက တင်းကြပ်စီးပိုင်နေကာ အဝင်မလွယ်လှပဲ ဖြစ်နေသည်။ ကိုလတ်လဲ အခြေအနေအရ ခါးကိုအဆုံးဖိမချသေးပဲ ဖြေးဖြေးချင်း ဖိနှဲ့ကာ သွင်းနေလိုက်၏။ ‘ ဗြိ .. ဗြိ .. ‘ ‘ အား … အား … နာတယ် .. နာတယ် ဆရာရဲ့ … တော်ပါတော့ … အိုး … ‘ ကိုလတ်က တဖြည်းဖြည်းချင်းနှဲ့သွင်းနေသဖြင့် ဂျာဂျာ အော်နေသည့်ကြားမှပဲ ကိုလတ် လီးတံကြီးက တွင်းပေါက်ထဲ မြွေဝင်သလို တအိအိထိုးဝင်နေသည်။ .. သို့ပေမယ့် လမ်းတဝက်လောက်အရောက်မတော့ အထဲမှ အတားအဆီးလေးတခုက ရှေ့ဆက်မတိုးရန် အာခံနေလေသည်။ .. သြော် .. ဂျာဂျာ အပျိုစင်လေး ရှိသေးတာပဲ .. သေချာသွားပြီလေ။ ကိုလတ်က ရွှီကနဲ လေတချက်ချွန်လိုက်သည်။
ထို့နောက် ခါးကို အသာပြန်မတ်လိုက်ပြီး အံတချက်တင်းတင်းကြိတ်ကာ ဂျာဂျာ့အတွက် ဟိုအရင်ကတဲက မျှော်မှန်းသိမ်းဆည်းထားခဲ့ရသမျှ အားတွေအင်တွေကို အကုန်ထုတ်သုံးကာ ဆောင့်ချလိုက်တော့သည်။ ‘ ဗြစ် … ဖောင်း … ‘ အပျိုစင်အမှေးလေးက ဗြစ်ကနဲပေါက် … ပြီးလဲပြီးရော အရှိန်နှင့်ထိုးဝင်လာသည့် ကိုလတ်လီးကြီးက ဂျာဂျာ့စောက်ဖုတ်ထဲ အဆုံးထိအောင် ဝင်သွား .. ဆီးခုံချင်းက ဖောင်းကနဲဆောင့်မိ … အဖြစ်အပျက်တွေက တဆက်တည်း ဖြစ်ပွားသွားသည်။ ဂျာဂျာ အမယ်လေး တရန်ပင် အချိန်မရလိုက်တော့။ … ပါးစပ်လေး အစွမ်းကုန်ဟကာ ခေါင်းလေးနောက်ပြန်လန်ထွက်သွားစဉ်မှာပင် ကိုလတ်က အောင်လံစိုက်ထူ လိုက်ပြီးသား ဖြစ်သွားတော့သည်။
ကိုလတ်လီးကြီး၏ ကျောဘက်မှ ဂေါ်လီလေးနှစ်လုံးကလဲ တာဝန်ကျေစွာဖြင့် ဂျာဂျာ့အစိလေးကို ဒလကြမ်း ပွတ်ဆွဲချသွားရာ ဂျာဂျာ့တကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထသွားရတော့သည်။ … သြော် .. လူ့ဘ၀ အရသာဆိုတာ ဒါပါလား နော် … ။ အောင်လံတဆုံးစိုက်ပြီးသည်နှင့် ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့ စောက်ဖုတ်ထဲမှ သူ့လီးကို ပြန်ဆွဲမထုတ်သေးပဲ ဆက်ကာ ဖိထားသည်။ တအင်းအင်း ညဉ်းသံလေးတွေနှင့်အတူ ဂျာဂျာ့ခြေထောက် ပေါင်တံနှင့်ဖင်ဆုံကြီးတွေက တရွရွကြွတက် ရုန်းကန်နေကြသည်။ ကိုလတ်က ကြွခွင့်မပေးပဲ အားထည့်ကာ ဇွတ်ဆက်ဖိထားတော့ ဂျာဂျာ့တကိုယ်လုံး သွေးတွေ ဆူပွက်တက်လာတော့သည်။ .. အပျိုမှေးလေးပေါက်သွားလို့ နာဖို့တောင် သတိမရနိုင်တော့။
အထဲက စောက်ဖုတ် အတွင်းသားလေးတွေက တလှုပ်လှုပ်တရွရွနှင့် ကိုလတ်လီးကြီးကို ဆီးကြိုထွေးပွေ့ထားကြသည်။ သွေးထဲသားထဲမှ ဆိမ့်တက်လာသော အရသာတွေက ဂျာဂျာ့တကိုယ်လုံးကို ဖုံးလွှမ်းသွားကြသည်။ … သြော် … အလိုးခံရတာ ဒီလောက်အရသာရှိမှန်းသာကြိုသိရင် ဂျာဂျာတို့ ဒီအရွယ်အထိအောင်တောင် မနေပဲ အစောကြီးကတည်းက ယောကျာ်းယူပြစ်လိုက်ပြီးသား ရှိရော့မည်။ .. ခုလဲ နောက်တော့ မကျသေး ပါဘူးလေ … အရွယ်က ခုမှ ၂၅ ရှိသေးတာပဲ။ .. ရှေ့လျှောက် ဘဝမှာ တဝကြီး အလိုးခံဘို့ အချိန်တွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးသည်လေ … ။ ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် ဂျာဂျာ မပွင့်တပွင့်လေး ပြုံးလိုက်မိတော့ ကိုလတ်က မျက်မှောင်ကုံျ့သွားသည်။
သူကဖြင့် သနားလို့ တအားတောင်မဆောင့်သေးပဲ ခနနှပ်ပေးထားတာကို မချောက ဘာထင်နေလဲမသိ .. လို့ ကိုလတ်က တွေးမိသွားသည်။ ဒီလူ ဒါအကုန်ပါပဲလို့များ ထင်နေရော့သလား မပြောတတ်။ ဒီလောက်တောင်ရှိလှတာ တွေ့ကြသေးတာပေါ့။ … ကိုလတ် တလွဲတွေးမိသွားတာက ဂျာဂျာ့အကြိုက်ဖြစ်သွားသည်။ ကိုလတ်က စောစောက သနားချင် ညှာချင်နေသည့်စိတ်တွေကို စွန့်လွှတ်ကာ အသားကုန် ကျုံး လိုးတော့ သည်ကိုး … ။ ဂျာဂျာကလဲ ဒါမျိုး အားရပါးရ အလိုးခံချင်နေပြီမို့ ဆန္ဒနှင့်လက်တွေ့ တထပ်တည်းကျသွားရ လေတော့သည်ပေါ့။ … ‘ ဖုံး ဖုံး .. ဖတ်ဖတ် … ‘ ‘ အား အ … အား အ … ‘ ကိုလတ်ဆောင့်သံ နှင့် ဂျာဂျာ့နှုတ်မှ အလိုလိုပွင့်ထွက်လာသော ညဉ်းသံလေးတွေက အခန်းထဲမှာ စည်းဝါး မှန်မှန် လွင့်ပျံနေသည်။ ပါကင်ဖွင့်ပြီးကာစလေးလဲဖြစ် … ဖရော့ခ် ပုံစံ၏အားသာမှုကလဲ ကူညီနေဆိုတော့ ကိုလတ်အတွက်တော့ အထိအတွေ့က ထူးရှယ် ဖြစ်နေရတော့သည်။
ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း အောက်မှ ဂျာဂျာ ရဲ့ စိတ်ထစရာ တင်ဆုံကြီးတွေက လေမွေ့ယာတခုအလား ပြန်ပြန်ကန်တင်ပေးနေကြမှုကလည်း အရင်က လိုးခဲ့ဘူးသည့် ဘယ်မိန်းကလေးတွေနှင့်မှ မတူအောင် အရသာထူးလှသည်။ .. ပိန်ပိန်ပါးပါးလေးတွေက ကိုယ်ဟန်ကျော့သလေးဘာလေးနှင့် ခုလို အရသာမျိုးကျ ဘယ်လိုမှ မပေးစွမ်းနိုင်တာ ဘယ်သူငြင်းချင်ကြ သေးသည်လဲ … ။ သြော် ဒီလို တင်ဆုံကြီးမျိုးနှင့် ဂျာဂျာ့ကိုဖြုတ်ခွင့် လိုးခွင့်ကြုံတာ သူကား ကုသိုလ် ထူးပေစွ။ ဂျာဂျာ့ကိုယ်လေးက အောက်မှာ တလူးလူးတလိမ့်လိမ့်ဖြစ်နေတိုင်း ရင်နှစ်မွှာကြားမှ နို့အုံအိအိကြီးတွေကလည်းပဲ တအိအိနှင့် ကိုလတ်ရင်ဘတ်ကို လာရောက်ပွတ်သပ်နေကြသည်မှာ ကိုလတ်တော့ တညလုံးသာ ဒီလို နေနေလိုက်ချင်စိတ် ပေါက်မိတော့သည်။
အားပြတ်လို့ သေချင် သေသွားပလေ့စေ လေ။ … ‘ ဂျာဂျာ အလိုးခံလို့ကောင်းရဲ့လားဟင် ခံကောခံနိုင်ရဲ့လား ….. ‘ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် မနားတမ်းဆောင့်လိုက်ပြီးမှပဲ ကိုလတ်က စကားမေးဖော်ရတော့သည်။ မခံနိုင်လို့ အသက်ထွက်မည့်သူသာဆို ဘယ်နှစ်ခါလောက် သေပြီးလောက်ပြီလဲ မသိ။ .. ဂျာဂျာ့လို အိုးကောင်းမောင်းသန် မို့သာ တော်တော့သည်။ ‘ အား … ရှီး … ကောင်းတယ်ဆရာ … အလိုးခံနိုင်ပါတယ် .. ဟို ဟိုလေ … ‘ ဂျာဂျာက စကားဆက်ရ ခက်နေသည်။ ‘ ပြောလေ ဂျာဂျာရဲ့ .. ‘ ‘ အဟင်း … ဂျာဂျာ ရှက်လို့ .. ပြောရမှာ …. ‘ ‘ သြော် .. ဂျာဂျာရယ် .. ဒီအခြေအနေရောက်မှများ ရှက်နေရသေးတယ် .. ပြောသာပြော .. ‘ ‘ ဟို ဟိုလေ .. ဒီပုံစံနဲ့ အလိုးခံရတာ အားမရသလိုပဲ ဆရာရယ် … ‘ အလဲ့ … မရွှေချောက အလာကြီးပဲ။
ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်ပါသည် .. ဒီ ဖရော့ခ် ပုံစံက ယောကျာ်းလေးတွေ အတွက်တော့ ညှစ်အားကောင်းကောင်းပိုခံစားရသည်။ ပေါင်တံနှင့်ခြေသလုံးလေးတွေ၏ အထိအတွေ့ကိုပါ တပြိုင်တည်း ခံစားရသည်ရောကြောင့် ပိုဖီးလ်လာသော်လည်း မိန်းကလေးတွေအတွက်ကျတော့ဖြင့် အဝင်မနက်လှသဖြင့် အထဲမှာ နင့်နင့်နဲနဲ မရှိလှသောကြောင့် တခိျု့မိန်းကလေးတွေက လုံးဝ အားမရ ။ အထူးသဖြင့် စိတ်ထန်သော သွေးသားဆူသော ဂျာဂျာ့လို မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ မထိတထိလိုသာပဲ ဖြစ်နေရသည်ပေါ့။ … ကဲလေ … ပရိသတ်က တောင်းဆိုလာမှတော့ ပုံစံပြောင်းကြယုံပေါ့။ … ‘ ကဲ … ဒါဆို ပုံစံပြောင်း လိုးကြမယ် … ဟုတ်ပြီလား … ‘ ‘ ဟုတ် … ‘ ကိုလတ်က သူ့ဟာကြီးကို ဂျာဂျာ့အထဲမှ ဇတ်ကနဲ ဆွဲနှုတ်လိုက်၏။
ဂျာဂျာ့ရင်ထဲ ဟာပြီးကျန်ခဲ့သည်။ … အသာအယာနှုတ်တာမဟုတ်ပဲ ဇတ်ကနဲဆွဲနှုတ်တာဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေတောင် အပြင်ကို စွိကနဲ စူထွက် ပါသွားရပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း ပုံမှန်နေရာ ပြန်ရောက်သွားရသည်။ ‘ ကဲ .. ဂျာဂျာ ခနထဦး … ပြီးတော့ လေးဘက်လေး ထောက်ပေး … ‘ ဂျာဂျာက စွေ့ကနဲထကာ လေးဘက် ကျော့ကျော့လေး ထောက်လိုက်သည်။ မြန်မြန်လုပ်မှ .. အထဲမှာနေရတာ ဟာလှပြီ … ။ ‘ အဲ … ဟုတ်ပြီ .. ခါးလေးကို နဲနဲအောက်နှိမ့်ချလိုက်ပြီး တင်ပါးကြီးတွေကို နောက်ကို ကော့ထုတ်ပေး ‘ ကိုလတ်က အပီအပြင်ကို လမ်းညွှန်နေသည်။ လက်ကလဲ ဂျာဂျာ့ခါးသိမ်သိမ်လေးကို လာဖိပေးကာ ပုံစံကျ အောင် လုပ်ပေးနေလိုက်သေးသည်။ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကိုလဲ နောက်ကို ဆွဲကော့ထုတ်ပေးလိုက်သေး၏။ ‘ အဲ .. ဟုတ်ပြီ … ရပြီ .. ‘ ဂျာဂျာ့ပုံစံက ဒီလို စတိုင်လ် နှင့်လဲ အရမ်းကို ဆွဲဆောင်အား ကောင်းနေလေသည်။
ကြည့်လိုက်ပါဦး … လက်လေးက ခပ်ယိုင်ယိုင်လေးထောက်ထားသည်။ .. သေးသိမ်သောခါးလေးက ခုလိုလေးဘက်ထောက် နေတော့ ပိုပြီးတော့ကို သေးသွယ်သွားသလားထင်ရသည်။ တင်သားကားကားကြီးတွေကလဲ ပိုပြီး စွင့်တက်လာကြသည်။ .. ရင်ဘတ်အောက်မှာတော့ ဗူးစင်မှ ဗူးသီးကြီးတွေလို နို့ကြီးနှစ်လုံးက တွဲလောင်း ကျနေကြသည်မှာ အသဲယားစရာ … ။ အဲ .. ကိုလတ် ဒီလောက်ပွဲကြမ်းပစ်လိုက်သဖြင့် ဂျာဂျာ့ခေါင်းမှ သူနာပြုခေါင်းဆောင်း လေးကတော့ ပြုတ်ကျနေပြီးတော့ ဆံပင်လေးတွေလဲ ကလစ်တွေ ညှပ်တွေပြုတ်ပြီး ဖရိုဖရဲ ဝဲကျနေရသည်ပေါ့ …။
ဒါပေမယ့် ဒီလို ဖရိုဖရဲလေး ဖြစ်နေတာကိုက တမျိုးဆွဲဆောင်အားတိုးကာ ရမက်တွေ ပိုထန်စရာ ဖြစ်နေရတော့သည်။ … ဖင်ဆုံကြီးနှစ်ခြမ်းကြားမှ ပြူးထွက်နေသော စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသား တွေကတော့ ကိုလတ်ကို လာလှည့်ပါ လိုးလှည့်ပါ ဆော်လှည့်ပါနှင့် ခေါ်နေကြပြီ။ … ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့ ရင်ခုန်စရာ အိုးကြီးနောက်မှာ ကပ်ပြီး ဒူးထောက်ချလိုက်၏။ ငယ်ဖော် လီးတံကြီးက တာဝန်ကို ဦးလည်မသုန် ထမ်းရွက်ဖို့ တယမ်းယမ်းနှင့် အသင့်ဖြစ်နေပြီ။ … ကိုလတ်က ပြူးထွက်နေသော ဂျာဂျာ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေအဝကို သူ့လီးကြီး အသာတေ့လိုက်၏။ တော်တော်နှင့် ထိုးမသွင်းသေးပဲ စောက်ဖုတ် အဝမှာတင် တရွရွပွတ်ကာ လက်တွေကလဲ ဂျာဂျာ့တင်ပါးကြီးတွေကို အသာအယာ ပွတ်သပ်လိုက် ညှစ်နယ်လိုက် လုပ်ပေးနေသည်။ ဂျာဂျာ့တင်ဆုံကြီး တယမ်းယမ်းဖြစ်လာ တော့သည်။ မြန်မြန်များ ဝင်သွားလို ဝင်သွားငြား ကိုလတ်ရှိရာ နောက်ဖက်ကို ဖင်ဆုံကြီးက ဇွတ်တိုး လာသည်။ .. ကိုလတ်က ညစ်ကျယ်ကျယ်လေး ပြုံးလိုက်မိ၏။ မယ်ခုမျှော် .. ဆိုတာ ဒါမျိုး ဖြစ်မှာပေါ့။
‘ ဗြွတ် ‘ ‘ အား ………….. ‘ ကိုလတ်က အစာလိုက်ဟပ်သလို တယမ်းယမ်းဖြစ်နေသော ဂျာဂျာ့ဖင်ဆုံကြီးကို ဆတ်ကနဲ လက်နှစ်ဖက်နှင့် အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ယင်း တချိန်တည်းမှာပင် စံချိန်လွန် ကိုလတ်လီးကြီးက ဂျာဂျာ့ ပါကင်ဖွင့်ပြီးစ စောက်ဖုတ်လေးထဲ အဆုံးထိတိုင် တဟုန်ထိုး ထိုးဝင်သွားတော့ ဂျာဂျာ ငယ်သံပါအောင် အော်လိုက်မိသည်။ တင်ပါးကြီးတွေက တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ခါယမ်းထွက်သွား၏။ ‘ အား … ဆရာရယ် .. အထဲမှာ သားအိမ်ကိုထိုးမိနေပြီ .. အား .. အား … ‘ ဂျာဂျာ့ဖင်ကြီးက ရမ်းထွက်သွားပေမယ့် ကိုလတ်က သူ့ဟာကြီးကို ကျွတ်မထွက်သွားအောင် အတင်းဖိပြီး ထိုးထည့်ထားတော့ အထဲက ဂျာဂျာ့သားအိမ် အဝလေးကို ကိုလတ်ထိပ်ဖူးကြီးက ဒလကြမ်းထိုးဖိနှိုးဆွပေး သလို ဖြစ်သွားရသည်မို့ ဂျာဂျာ မျက်ရည်တွေပင် လည်တက်လာအောင် ထိထိမိမိ ခံစားလိုက်ရသည်။
စောစောကပုံစံနှင့် အားမရပါဆိုသည့် မိဂျာဂျာတယောက် အားရယုံမက အီဆိမ့်ပြီးကို တက်သွားရလေပြီ။ ခါးလေးက ပိုညွှတ်ကျသွားသည်။ .. ရှေ့မှာထောက်ထားသော လက်လေးတွေပါ ခွေကျချင်သလိုလို ယိုင် ထိုးသွားသည်မို့ မျက်နှာနှင့်ကြမ်းပြင်မဆောင့်မိအောင် မနဲအားတင်းကာ ပြန်ပြီး မတင်လိုက်ရ၏။ .. ခုလို ဂျာဂျာ ခွေခွေလေးလဲကျလုလုဖြစ်သွားပြီးမှ အတင်း အားခဲကာ လက်ကလေးတွေထောက်ပြီး ပြန်ရုန်းထလာပုံက ကိုလတ်မျက်စိထဲမှာ အလွန်ကိုကြည့်ကောင်းသွားရသည်။ ရမက်တွေ ပိုထန်လာသည်။ သူပြောလို့ ပုံစံပြောင်းပေးထားရတာပဲ .. ခွေယိုင်ရုံမကလို့ ပုံလျက်ပဲ လဲကျကျ .. သနားနေစရာ မလို ပါဘူးလေ ဆိုသောစိတ်ရိုင်းတွေ ဝင်လာသည်။
ကိုလတ်စိတ်တွေကို လွှတ်ပေးလိုက်မိတော့သည်။ ….. ကိုလတ်က ဂျာဂျာ့ ခါးသိမ်သိမ်လေးကို လက်နှစ်ဖက်လုံးနှင့် စုံကိုင်ဆွဲထိန်းထားလိုက်သည်။ .. ပြီးတော့ ဂျာဂျာ့တင်ပါးအိအိကြီးတွေ လှိုင်းလေးတွေထကာ တုန်တုန်တက်သွားသည်အထိကို အားရပါးရ ပြစ်ပြစ်ပြီး ဆောင့်ချနေလိုက်တော့သည်။ .. ပထမတော့ ဂျာဂျာ ငါးရံ့ပြာလူး ခါယမ်းနေသေးသည်။ … သို့ပေမယ့် ခနကြာတော့ အထာကျသွားပြီး သူမကိုယ်သူမ ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းနိုင်သွားသည်။ ခွေလဲကျမည့် အရိပ်အယောင် မရှိတော့ … ။ ကိုလတ် ဆောင့်ချက်နှင့်အညီ စည်းချက်ကျကျ သူမတင်ပါးကြီးတွေကို နောက်ပစ်ပစ်ပေးပြီး တက်ညီ လက်ညီလေးပင် လှုပ်ရှားပေးလာလေသည်။ ခုမှ ဒီပုံစံနှင့် အလိုးခံရတာ ဂျာဂျာ အထာကျသွားပြီ။ အရသာလဲ အကြီးအကျယ် တွေ့သွားရပြီ။ … ဂျာဂျာ နောက်ပေး ပေးတတ်လာတော့ ကိုလတ်လဲ ဆောင့်ရတာ အရသာပိုတွေ့လာသည်။
တကယ်ပါ … သူအရင်ဖြုတ်ခဲ့ လိုးခဲ့ဘူးသည့် မိန်းကလေးတွေထက်ကို ဒီဆရာမလေး ဂျာဂျာ့ဆီမှာ ပြောပြရ ခက်လှသော ဆွဲဆောင်အား တခုခု ရှိနေတာအမှန် ။ .. နောက်ထပ် မိန်းမတွေ ရာချီလိုးလို့ကော ဒီလို စိတ်ပါလက်ပါ ငြိတွယ်မှုမျိုး ရမည်ဟု မည်သူ အာမခံနိုင်ပါမည်နည်း။ .. တသက်တာအတွက် သူမကို အပိုင်ဖြုတ်ခွင့် လိုးခွင့်လိုင်စင်ရရှိအောင် လက်ထပ်ယူလိုက်တော့မည်ဟု ကိုလတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိသည်။ ဒီအတွေးလေး ဝင်လာတော့ ဂျာဂျာ့ကိုလိုးရတာ ပိုကြည်နူးစရာကောင်းလာသည်။ ကြိုက်ကုန်းတယောက်ကို လိုးနေရသလိုမျိုး မခံစားရတော့ပဲ ဘဝကြင်ဖော်လောင်း ကောင်မလေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး လိုးနေရသလိုဖြစ်လာပြီမို့ ကိုလတ်ခံစားမှုတွေက ပိုမို ဆန်းသစ်လာသည်။ ခံစားမှုတွေ ဆန်းသစ်လာတော့ ဆောင့်ချက်တွေကလဲ ပိုပြင်းလာသည်။ သုတ်ကလဲ ထွက်ကိုမလာတော့။ အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိတော့ … ။
ခံနေရသော ဂျာဂျာတော့ မြော့နေလေပြီ။ … စောစောက ကိုလတ် ဘာဂျာပေးထားစဉ်က နှစ်ချီသုံးချီ ပြီးထားပြီးသားမို့ ဒီတချီကျတော့ တော်တော်နှင့်တော့ မပြီးနိုင်သေး … ။ ကြာတော့ ဒူးတွေ နာလာပြီ။ ရှေ့မှာထောက်ထားရသော လက်လေးတွေလဲ ညောင်းလှပြီ။ .. ကိုလတ်ကတော့ ဘယ်ကမ္ဘာအထိ ကို ဆက်ဆောင့်နေဦးတော့မည်မသိ။ .. သို့ပေမယ့် ကိုလတ်က မိန်းမမျိုးစုံနှင့် အတွေ့အကြုံစုံထားသူမှန်း ဂျာဂျာ သိနေတော့ သူမကျမှ ခံနိုင်ရည်မရှိလို့ အထင်ခံရမှာ တနည်းအားဖြင့် အထင်သေးသွားမှာလဲ ဂျာဂျာ ကြောက်သည်။ .. ကိုလတ်စွဲသွားမှ သူမ ဘဝလဲ ကြိုက်ကုန်းမဖြစ်ရပဲ တည်တည်တန့်တန့် ပွဲတက်မယားဖြစ်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်လား။ .. ဒီတော့လဲ ဂျာဂျာ့မှာ ကိုလတ် လိုးသမျှ ဆောင့်သမျှကို အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ခံယင်း အဝတ်ပုံကြီး တခုလို ပျော့ခွေမကျသွားအောင် အစွမ်းကုန် တောင့်ထားရရှာလေတော့သည်။ နဖူးဆံစပ်မှာလဲ ချွေးဥလေး တွေပင် သီးထနေပြီ။ ကိုလတ်ကတော့ ခါးသိမ်သိမ်လေးကို စုံကိုင်ညှစ်ကာထိန်းထားရင်း ဆောင့်လိုက်၊ .. တချီတချီကျပြန်တော့ ဗူးသီးကြီးတွေလို တွဲလောင်းကျကာ ဗရမ်းပတာ ခါယမ်းနေသော ဂျာဂျာ့နို့အုံကြီးတွေကို ရှေ့ကိုကိုင်းပြီး လှမ်းဆုပ်နယ်လိုက်နှင့် အပီအပြင်ကို လိုးနေလေတော့၏။
တခါတခါကျပြန်တော့လဲ ဂျာဂျာ့ကျောပြင် ဖွေးဖွေးလေး ပေါ်မှာ အသာမှောက်ချကာ ဂျာဂျာ့ကျောလေးနှင့် သူ့ပါးတွေကပ်ထားရင်း အမောဖြေသလို လုပ်ကာ အသာညှောင့်လိုး နေတတ်ပြန်သေးသည်။ ခနလောက် အဲဒီလို ညှောင့်လိုးပြီးလို့ သက်လုံပြန်ကောင်း သွားသည်နှင့် နဂိုအတိုင်း အသားကုန် ပြန်ဆောင့် လိုးပြန်တော့၏။ ဂျာဂျာ့မှာသာ နားခွင့်မရ .. အမောလေးမှ ဖြေခွင့်မရပဲ တလစပ်ကို အလိုးခံနေရလေတော့သည်။ … ဒီပုံစံပြောင်းလိုးတာ နာရီဝက်ကျော်လာပြီထင်သည်။ .. ဂျာဂျာလဲ မျက်လုံးတွေပြာ ခေါင်းတွေ မူးလာပြီ။ စောစောကလို ရင်ချင်းအပ် ခြေထောက်တွေကား အနေအထားလေးမှာ အသာနှပ်မနေခဲ့မိတာ မှားလိုက်လေ ခြင်း လို့ ခုမှ နောင်တရမိသည်။ .. သို့ပေမယ့် ခုချိန်မှတော့ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပြီပဲ။ … တဖြည်းဖြည်း ခံရင်းခံရင်းနှင့် ဂျာဂျာ့စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ ခံစားမှုတွေ ပြန်ပြီး ဆန်းသစ်လာသည်။ .. ဖီလင်တွေ အပြတ်တက်လာသည်။
အူထဲအသည်းထဲမှ တလှိုက်လှိုက် ဖြစ်လာသည်။ နို့အုံကြီးတွေ တင်းထလာပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ကျိန်းစပ်ကာ ထောင်မတ်ချွန်ကော့ လာကြသည်။ .. ဂျာဂျာ အသက်ရှုတွေ ပိုမြန်လာသည်။ .. ပြီးတော့မည် နောက်တချီ … ။ ‘ အ .. အား … ဆရာရယ် .. ပြီးပြီ ပြီးပြီ .. ဂျာဂျာပြီးပြီ … ကောင်းလိုက်တာ .. အိုး မိုင်ဂေါ့ဒ် … ‘ ဂျာဂျာ့စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ အရည်တွေ ဖွီးကနဲ ပန်းထွက်လာသည်။ ကိုလတ်လီးကြီးနှင့် ကြပ်သိပ်ပြည့်နေသည့်ကြားထဲမှ အတင်းကို တိုးထွက်စီးကျကုန်၏။ ဂျာဂျာ့အသံလေးက တုန်ယင်စွာအဖျားခတ်ရင်း တိမ်ဝင်သွားတော့သည်။ ဂျာဂျာ ဘယ်လိုမှ မတောင့်ထားနိုင်တော့ .. အားတွေအင်တွေ အကုန် ကုန်ပြီ။ ကိုလတ်လီးကြီး တပ်လျှက်တန်းလန်းနှင့်ပင် လက်ပစ်ခြေပစ်ကို ဟပ်ထိုးလဲကျ သွားရရှာလေတော့သည်။ ကိုလတ်လဲ မပြီးသေးသော သူ့လီးကြီးကို ဂျာဂျာ့အထဲ စိမ်ထားရင်းနှင့် ဂျာဂျာ့အပေါ် အသာထပ်လျှက် မှောက်ချကာ မှိန်းနေလိုက်လေတော့၏။ ခနနေလို့ ဂျာဂျာ အမောပြေလျှင်တော့ နောက်တပွဲနွှဲရန် အဆင်သင့်ပြင် စောင့်စားရင်း ဂျာဂျာ့ လည်ဂုတ်သား ဝင်းဝင်းလေးတွေကိုသာ ခပ်ဖွဖွလေး ငုံခဲနေလိုက်မိပါတော့သတည်း … ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဖှဖှလေး